Home » အထွေထွေ »
ထိုင်း ဗီယက်နမ်နဲ့ မြန်မာ့ဆန် ဘာကြောင့် ဈေးကွဲသလဲ ပြဿာနာသိလျှင် အဖြေရှိပါသည်
ထိုင်း ဗီယက်နမ်နဲ့ မြန်မာ့ဆန် ဘာကြောင့် ဈေးကွဲသလဲ ပြဿာနာသိလျှင် အဖြေရှိပါသည် ကမ္ဘာမှာ ဆန်အများဆုံး စားသုံးတာ အာရှဒေသဖြစ်သလို အဓိကထုတ်လုပ်တင်ပို့နေတာကလည်း အာရှနိုင်ငံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဧရာဝတီ၊ ကျောက်ဖရား၊ မဲခေါင်မြစ်များစီးဆင်းရာ (ACMEC)ဒေသက ကမ္ဘာ့ဆန်တင်ပို့မှုရဲ့ ၅၁ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကို တင်ပို့နေပါတယ်။ အဲဒီဒေသမှာ တစ်နှစ်ကို ဆန်တန်ချိန် ၁ဝ သန်း ခန့်တင်ပို့ပြီး၊ ကမ္ဘာ့ဆန်တင်ပို့မှုမှာ ထိပ်ဆုံးနံပါတ်တစ်နေရာယူထားတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ တစ်နှစ်ကို တန်ချိန် ၆ သန်းခန့်တင်ပို့ပြီး ဒုတိယနေရာ ယူထားတဲ့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့အပြင် ဆန်တင်ပို့နိုင်ငံ စာရင်းဝင် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတို့လည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ (ACMEC ) ဆိုတဲ့ ဒေသတစ်ခုတည်းက ဆန်ထုတ်လုပ်တင်ပို့နေ တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ပေမယ့်လည်း ပြည်ပဆန်ရောင်းဈေး FOB ဈေးနှုန်း တွေကတော့ တစ်ပြေးညီမရရှိဘဲ နည်းနည်းစီကွာခြားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဆန်ပြည်ပရောင်းဈေးနှုန်းတွေက ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်ဆန်ဈေးတွေထက် အမြဲတမ်းလျော့နည်း နေရတာ ကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံတွေက တင်ပို့နေတဲ့ ဆန်အရည် အသွေးစုံ ထဲက မြန်မာနိုင်ငံက အများဆုံးကုန်သွယ်မှုပြုနေတဲ့ ၂၅ မှတ်ဆန် ပျမ်းမျှ ဈေးနှုန်းကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ မှာ မြန်မာ့ဆန်ဈေးက ထိုင်းဆန်ဈေးထက် ဒေါ်လာ ၇ဝ ကျော်လျော့ နည်းပြီး၊ ဗီယက်နမ်ဆန်ဈေးထက် ဒေါ်လာ ၄ဝ ကျော်လျော့နည်း ရရှိခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ မှာလည်း ထိုင်းဆန်ဈေးထက် ဒေါ်လာ ၅ဝ ကျော်လျော့ပြီး၊ ဗီယက်နမ်ဆန်ဈေးထက် ဒေါ်လာ ၄ဝ ကျော် လျော့နည်းဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုအရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက်ခြင်းတူတဲ့ ဆန်ရောင်းဈေးနှုန်းတွေ ကွာခြားရခြင်းကို မြန်မာ့လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးက ပြည်ပဆန်တင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းမှာ အတွေ့အကြုံအများ အကြီးရှိခဲ့တဲ့ အရာရှိကြီးတစ်ဦးနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာတော့ မြင်သာတဲ့ အကြောင်းအချက်တွေကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ၂၅ မှတ်ဆန် ပြည်ပရောင်းဈေးကွာခြားမှု ခုနှစ် ထိုင်းဆန် ဗီယက်နမ် မြန်မာ ထိုင်းဆန် ဗီယက်နမ် ဆန် ဆန် ထက် ဆန်ထက် လျော့နည်းမှု လျော့နည်းမှု၂ဝ၁ဝ-၁၁ ၄၃၉ ၄၁၁ ၃၆၅ (-)၇၄ (-)၄၆၂ဝ၁၁-၁၂ ၄၅၅ ၄၄၅ ၄ဝဝ (-)၅၅ (-)၄၅ဆန်အရည်အသွေးနဲ့ ဆန်အရွယ်အစားညီမျှမှုမရှိခြင်း ထိုင်းနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့မှာ ပြည်ပကို အများဆုံးတင်ပို့တဲ့ ဆန်အမျိုးအစားဟာ လုံးသွယ်ဆန် အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနိုင်ငံ တွေမှာ တောင်သူအများစုဟာ စိုက်ပျိုးစဉ်ကတည်းက မျိုးစပါးကို ကြုံသလို မစိုက်ဘဲ မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းက မျိုးစေ့တွေ ဝယ်ယူပြီး၊ ဧရိယာအလိုက် အမျိုးအစားတူ မျိုးတူစပါး ကို သီးသီးသန့်သန့်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တာဖြစ်လို့ စပါးမှာ မျိုးကွဲများများ မပါဝင်သလို ဆန်အရွယ်အစားကလည်း ညီညာမှုရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆန်အရွယ်အစား ညီညာမှုရှိတာကြောင့် ဆန် အရောင်သွေး (Appearance)လည်း ပိုမိုကောင်းမွန်တာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာဆန်ဟာလည်း လုံးသွယ်ဧည့်မထအမျိုးအစားဖြစ်ပေမဲ့ စပါးမျိုးကို မိရိုးဖလာအတိုင်း မိမိလယ်က စပါးကိုပဲ မျိုးအဖြစ်ပြန်စိုက်၊ မျိုးကွဲတွေ မဖယ်ရှားဘဲ စပါးမျိုးကွဲပေါင်းများစွာ စိုက်ပျိုးတာဖြစ်လို့ ကြိတ်ခွဲထွက်ရှိလာတဲ့ဆန်မှာလည်း အရွယ်အစား မညီမညာ၊ အရောင်အသွေးကောင်းမွန်မှု မရှိဖြစ်ရပါတယ်။ အဲဒီလို အမြင်လှပမှုမရှိတဲ့အချက် ဟာလည်း ဆန်ဈေးနှုန်းလျော့နည်းရတဲ့ အကြောင်း အရင်း တစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ စက်ကြိတ်အရည်အသွေးကောင်းမွန်မှု ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဆန်နဲ့ဆန်ကွဲကို သီးခြားစီခွဲထုတ်သိုလှောင်ပြီးမှသာ မိမိလိုချင်တဲ့ ဆန်အမျိုးအစား၊ အရည်အသွေးကိုလိုက်ပြီး အချိုးအစားအလိုက် တွက်ချက်ရောနှောတဲ့စနစ်ကို သုံးတယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲဒီလို အချိုးအစားမှန်မှန်ရောထားတဲ့အတွက် တင်ပို့တဲ့ဆန် အားလုံးဟာ စက်ကြိတ်အရည်အသွေးနဲ့ ဆန်ကွဲပါဝင်မှု ညီညာပြီး၊ ၁၅ မှတ်၊ ၂၅ မှတ် စတဲ့ ဆန်အမျိုးအစားအလိုက် အရည်အသွေး မှန်ကန်မှုရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ အများအားဖြင့် ဆန်စက်အသစ်၊ ဆန်စက်အဟောင်းမျိုးစုံ၊ ဒေသအစုံက ကြိတ်ခွဲထွက်ရှိတဲ့ဆန်များကို စုစည်းသိုလှောင်ပြီး၊ တင်ပို့တာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ တချို့သောဆန်တင်ပို့သူများဟာ ဘုရင့်နောင် ကုန်စည်ဒိုင်လိုဈေးကွက်အတွင်းက ဝယ်ယူပြီး၊ တင်ပို့မှုတွေပါရှိလို့ ပါဝင် တဲ့ဆန်များမှာ စက်ကြိတ်အရည်အသွေး၊ နိမ့်မြင့်ညီညာမှုမရှိသလို ဆန်ကွဲပါဝင်မှု အချိုးအစားကျနမှုမရှိ ဖြစ်ရပါတယ်။ အဲဒီလို ဆန်အမျိုးအစားအလိုက် အရည်အသွေးမှန်ကန်ညီညာမှု မရှိခြင်းဟာ လည်း ဆန်ဈေးနှုန်းလျော့နည်းရတဲ့ အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်္ဘောငှားရမ်းခများ ကွာခြားခြင်း မြန်မာ့ဆန်များ သယ်ယူရာမှာ ကုန်ဝယ်သူဟာ သင်္ဘောငှားရမ်းတဲ့အခါ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအခြေအနေ၊ ရေစူးကန့်သတ်ချက်တို့နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် သင်္ဘောကို ရွေးချယ်ငှားရမ်းရပါတယ်။ အဲဒီလို ကန့်သတ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် သင်္ဘောရရှိဖို့ ခက်ခဲတာကြောင့် ငှားရမ်းခ (Freight Rate) ဟာ အခြားနိုင်ငံတွေ ထက်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့် တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သယ်ယူစရိတ် ကြီးမြင့်မှုတွေကြောင့်လည်း မြန်မာ့ဆန်ဈေးကို လျော့ပြီးဝယ်ယူမှုတွေ ရှိလာတဲ့အတွက် ဈေး လျော့ရတာလည်း တစ်ချက်လို့ဆိုပါတယ်။ ဆန်ရောင်းချတဲ့ ငွေလွှဲစနစ် ပြည်ပဆန်ဝယ်လက်များနဲ့ ချိတ်ဆက်ရောင်းဝယ်ရာမှာ ငွေပေးချေမှုကို LC (Letter of Credit) နဲ့(Telegraphic Transfer) စနစ်များနဲ့ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ LC စနစ်ဆိုတာ ကတော့ ကုန်ပစ္စည်းကို သင်္ဘောတင်ပြီးကြောင်း အထောက်အထားများနဲ့ ပေးပို့မှ ကြားခံဘဏ်မှတစ်ဆင့် ငွေပေးချေခြင်းဖြစ်ပြီး၊ 100% Advanced TTစနစ်ကတော့ ပစ္စည်းမတင်မီကတည်းက ၁ဝဝ ရာခိုင်နှုန်း ကြိုတင်ငွေ ပေးချေတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ 100% Advanced TT စနစ်ကတော့ ယုံကြည်မှုကို အဓိက ထားဆောင် ရွက်ရတာဖြစ်ပြီး၊ စွန့်စားရမှုအတွက် LC နဲ့ပေးချေတဲ့ ဈေးနှုန်းထက် ၁ဝ ဒေါ်လာခန့် လျော့နည်းရရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မြန်မာ ကုန်ရောင်းသူများက TT စနစ်ဖြင့်သာ ကုန်ရောင်းတာဖြစ်လို့ အဲဒီ ငွေပေးချေတဲ့စနစ်ကလည်း ဈေးလျော့ရတဲ့အကြောင်းထဲက တစ်ချက်လို့သိရပါတယ်။ ပုံမှန်ဖောက်သည်မရှိခြင်း ဆန်တင်သွင်းတဲ့ နိုင်ငံအများစုဟာ တစ်နှစ် လိုအပ်ချက်ကို ကြိုတင်စီမံချက်ရေးဆွဲလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုရေးဆွဲရာမှာ သူတို့ အတွက် ပုံမှန်ရောင်းချပေးနိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီ၊ နိုင်ငံတွေကို ဦးစားပေး ထည့်သွင်းစဉ်းစားလေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာ့ဆန်တင်သွင်းမှု ထိပ်ဆုံးစာရင်းဝင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဟာ ပုံမှန် ပမာဏများများ တင်ပို့နိုင်တဲ့ ထိုင်းနဲ့ ဗီယက်နမ်တို့နဲ့ရေရှည်ကုန်သွယ် မှုစာခုျပ်တွေ ချုပ်ဆိုထားပါတယ်။ အဓိကကတော့ တင်သွင်းနိုင်ငံတွေမှာ အရေးပေါ်ဆန် လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်မယ့် အာမခံနိုင်တဲ့ ရောင်းသူတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဆန်တင်သွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ ပုံမှန် ဖောက်သည်အဖြစ်ရောင်းဝယ်လိုမှုအပေါ် မြန်မာဘက်က ကုန်သည် တွေက ပုံမှန်ဖောက်သည် (Regular Supplier Buyer ) အဖြစ် ကာလကြာကြာ ချိတ်ဆက် ရောင်းဝယ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက် ပုံမှန်ဖောက်သည်နိုင်ငံတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရောင်းဝယ်တဲ့အခါ ၎င်းတို့ရရှိတဲ့ ဈေးနှုန်းထက်လျော့ပြီး ဈေးပေးဝယ်ယူမှုတွေ လုပ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပုံမှန်ဖောက်သည် မရှိခြင်းဟာလည်း ဈေးနှုန်းလျော့နည်း လာတဲ့ အကြောင်းတစ်ရပ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တိုက်ရိုက်စားသုံးနိုင်(End User) ကို တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက် ရရှိမှု နည်းခြင်း မြန်မာ့ဆန်တင်ပို့တဲ့ ကုန်သည်များအနေနဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ နဲ့ ဘဏ်ငွေကြေးလွဲှပြောင်းရာမှာ အခက်အခဲများရှိနေခြင်း၊ ပြည်ပ နိုင်ငံတွေမှာ ရုံးခွဲဖွင့် လှစ်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုနည်းနေသေးခြင်း၊ အမှန် စားသုံးတဲ့နိုင်ငံ (End User)နဲ့ ချိတ်ဆက်မှု အားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် တစ်ဆင့်ခံပွဲစား ကုမ္ပဏီများကိုသာ အားကိုးဆောင်ရွက်နေရပါတယ်။ ဒီလိုကြားခံပွဲစားကို တစ်ဆင့်ခံရောင်းချရခြင်းကလည်း ဈေးလျော့ နည်းရတဲ့ အကြောင်းတစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်က ကမ္ဘာမှာ ဆန်အများဆုံး တင်ပို့ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အနေနဲ့ လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ အားနည်းချက်များကို ပြင်ဆင် ဖြည့်ဆည်းနိုင်မယ်ဆိုရင် မြန်မာ့ဆန် ပြည်ပရောင်းဈေးဟာ ကမ္ဘာ့ ဆန် ထိပ်တန်းတင်ပို့နိုင်ငံတွေနဲ့ တန်းတူ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအားနည်းချက်တွေကို တစ်ဦး တစ်ယောက်ထဲ၊ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုထဲကသာ ပြီးမြောက်အောင် ကျော်လွှားနိုင်မယ့်ကိစ္စရပ်များ မဟုတ်ပါဘူး။ ပုဂ္ဂလိကပိုင်းဆိုင်ရာ ကရော သက်ဆိုင်ရာဌာနပေါင်းစုံ၊ ကဏ္ဍစုံကပါ ဝင်ရောက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရမယ့် တစ်နည်း အားဖြင့် Public Private Partnership အစီအစဉ်နဲ့ဆောင်ရွက် နိုင်မယ့်ကိစ္စရပ်သာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့နိုင်ငံအနေနဲ့ ဆန်ကိုပြည်တွင်းမှာ ဖူလုံတဲ့အပြင် ပိုလံျှ အောင် ထုတ်လုပ်ပြီး ဆန်တိုးတက်တင်ပို့နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်နေ တာဖြစ်သလို ဒီလိုတိုးတက်တင်ပို့မယ့် ပမာဏများလေလေ ဈေးနှုန်း လျော့တဲ့အတွက် နစ်နာဆုံးရှုံးရမယ့် ပမာဏကလည်း ကြီးမားလေ ဖြစ်လို့ ဈေးနှုန်းတစ်ပြေးညီရရှိရေးဟာ ပိုပိုပြီး အရေးပါလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် အထက်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းလျော့ကျရတဲ့ အကြောင်း ရင်း အားနည်းချက်တွေထဲက ချက်ချင်းပြင်ဆင်နိုင်တာကို ချက်ချင်း ဆောင်ရွက်ပြီး ရေရှည်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စကို လက်ရှိအချိန်က စပြီး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်အတွက် ပြည်သူတွေ အတွက် နစ်နာဆုံးရှုံးမှု လျော့နည်းပပျောက်အောင် မဖြစ်မနေ ဆောင်ရွက်ကြဖို့ အချိန်အခါသင့်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း တိုက်တွန်းရေး သားလိုက်ရပါတယ်။
သတ္တုဈေးကွက်မှာ နေရာရလာတဲ့ ငွေသတ္တု
သတ္တုဈေးကွက်မှာ နေရာရလာတဲ့ ငွေသတ္တု ငွေသတ္တုရဲ့ ဈေးနှုန်းတွေဟာ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်အတွင်းမှာ အဆ မတန် မြင့်တက်လျက်ရှိပါတယ်။ ကုန်စည်ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှုမှာ နာမည်ကြီးသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဂျင်ရောဂျားက ငွေဈေးနှုန်း မြင့်တက်လာတာကို ထောင်လိုက်မြင့်တက်မှု Parabolic Move အဖြစ်တင်စားခေါ် ဝေါ်ခဲ့ပါတယ်။ နယူးယောက် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး အိပ်ချိန်းရဲ့ comex ဌာနခွဲမှာ ရွှေရဲ့ ဇွန် ကြိုပွိုင့်ဈေးနှုန်းက တစ်အောင်စကို ၁၅ဝ၃ ဒသမ ၈ဝ ဒေါ်လာထိ မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ ရက်သတ္တပတ် အလိုက်တိုးတက်မှုက ၁ ဒသမ ၁၈ ရာ ခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ ရွှေဈေး နှုန်းဟာ တစ်အောင်စကို ၁၅ဝ၉ ဒသမ ၆ဝ ဒေါ်လာထိ အမြင့်ဆုံး ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မေအတွက် ငွေသတ္တုကြိုပွိုင့်ဈေးနှုန်းက တစ်အောင်စကို ၄၆ ဒသမ ဝ၅၉ ဒေါ်လာနှုန်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီး တိုးတက်နှုန်း ၇ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်းထိရှိခဲ့ပါ တယ်။ ငွေသတ္တုဈေးဟာ တစ်အောင်စ ကို ၄၆ ဒသမ ၃၈၅ ဒေါ်လာထိအမြင့် ဆုံးကိုရောက် ခဲ့ပါတယ်။ ငွေသတ္တု၏ လတ်တလောအခြေအနေ ကမ္ဘာ့နေရာဒေသ အတော်များများမှာ ငွေကြေးဖောင်းပွနှုန်း ဆက်တိုက် မြင့်မားနေတဲ့အတွက် ရွှေနဲ့ ငွေသတ္တု အပါအဝင် အဖိုးတန် သတ္တုတွေဟာ ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နံှသူတွေအတွက် မျက်စိကျစရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒေါ်လာတန်ဖိုးကျဆင်းတာနဲ့ အာရှ နိုင်ငံတွေက ငွေသတ္တုအတုံးလိုက်ဝယ်လိုအား (Physical Demand) မြင့်တက်လာမှုတို့ကြောင့် ငွေသတ္တုဈေးဟာ ကမ္ဘာ့လက်ငင်းဈေး ကွက်ထဲမှာ တစ်ကြိမ်မှမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ တစ်အောင်စကို ၄၉ ဒသမ ၃၁ ဒေါ်လာနှုန်းထိ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်တဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့ အာဖရိကမြောက်ပိုင်းရဲ့ မငြိမ်သက်မှုနဲ့ ယူရို ငွေကြေးသုံးစွဲတဲ့ နယ်မြေမှာရှိနေတဲ့ အစိုးရရဲ့ ေြွကးမြီကိစ္စတွေ ကြောင့်လည်း သတ္တုတွေကို ပိုမိုသဘောကျစရာ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံခြားအရန်ငွေကြေးကို အများဆုံး လက် ဝယ်ထားရှိတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံက အထုအထည်လိုက် ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံခြားအရန်ငွေကြေးတွေကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ ခွဲခြားထား ဖို့စဉ်းစား လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် စွမ်းအင်နဲ့ အဖိုးတန်သတ္တုလို နယ်ပယ်တွေ မှာ သီးခြားရန်ပုံငွေထားရှိဖို့ စတင် ဆောင်ရွက်လာပါတယ်။ လက်ရှိခက်ခဲကျပ်တည်းတဲ့ကာလနဲ့ရှေ့မှာ ကြုံတွေ့ရမဲ့ အကျပ် အတည်း အခက်အခဲတွေရှိနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာ ဘယ်နေရာ ဘယ်လို ရင်းနှီးမြှုပ်နံှရမယ်ဆိုတာကို လူတွေအစဉ်းစားရ ကျပ်လာတတ်ပါတယ်။ တစ်နည်းတစ်လမ်းအားဖြင့် ငွေကြေးကို ရင်းနှီးမြှုပ်နံှကြသလို ငွေသတ္တုကိုဝယ်ယူစုဆောင်းပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နံှရတာကလည်း လူကြိုက်များလာပါတယ်။ ငွေကရင်းနှီးစရိတ်နည်းပေမဲ့ အကျိုးအမြတ်များများရပါတယ်။ ပြီးတော့ ရင်းနှီးမြှုပ်နံှရာမှာလည်း လုံခြုံစိတ်ချရပါတယ်။ ငွေသတ္တုကို အချောင်းလိုက်ရနိုင်ရုံသာမက အတုံးလိုက်နဲ့ ငွေပြား လိုက်လည်း ရနိုင်ပါတယ်။ ငွေသတ္တုအချောင်းတွေက ရင်းနှီး မြှုပ်နံှဖို့အတွက် လူကြိုက်အများဆုံး နည်းလမ်းဖြစ်ရုံသာမက ငွေ အဖြစ်လည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ ငွေအတုံးတွေက ကိုင်တွယ်ဖို့လွယ်ကူပြီး သိုလှောင်သိမ်းဆည်းဖို့ အဆင်ပြေ ညီညွှတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငွေပြန် ဖော်ချင်တဲ့အခါမှာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တဲ့နည်းလမ်းက အလွယ်တကူဆောင် ရွက်လို့ရ လာပါပြီ။ ထိုမျှမက ဒီသတ္တုတွေက သိုသိုသိပ်သိပ်ရှိတဲ့အတွက် ဒီသတ္တုကို လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေအတွက် ဓနဥစ္စာအဖြစ် သိမ်းဆည်းထားဖို့အဆင်ပြေစေပါတယ်။ ငွေသတ္တုကို လူကြိုက်များလာရတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့ စက်မှုလုပ်ငန်းအားလုံးလောက်နီးနီးပါ ငွေ သတ္တုကဇာတ်လိုက်လို ပါဝင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေသတ္တုကို ဆောက်လုပ် ရေးမှာ သုံးပါတယ်။ အီလက်ထရွန်းနစ်နဲ့ ကွန်ပျူတာပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရာမှာ လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ငွေသတ္တုကို ငွေသတ္တုအဖြစ်ရှိနေနိုင်တဲ့ တန်ဖိုး ထက် ကျော်လွန်ပြီး နည်းမျိုးစုံ၊ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ရောင်းလို့ရနေတာကလည်း တစ်မူထူးနေပါတယ်။ အခုချိန်မှာ ငွေသတ္တုကို ရောင်းဝယ်ချင်ရင် ဘဏ်ကြီးတွေမှာ ရောင်းဝယ်လို့ ရသလို ဝယ်ရောင်းသမားတွေဆီက လည်း ဝယ်လို့ရနေပါပြီ။ ကမ္ဘာအနံှ့မှာ ရောင်းလက်တွေရှိနေပါပြီ။ ဒီသတ္တုက ဘေးကင်း လုံခြုံအောင် သိမ်းဖို့လွယ်တဲ့အတွက် သိမ်းဆည်းခ အပိုမကုန်ဘဲ ထိန်းသိမ်းလို့ရနေပါတယ်။ ငွေရဲ့တန်ဖိုးက ရွှေလိုမဟုတ်ပါဘူး၊ တခြား စီးပွားရေးပြဿနာတွေရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုနည်းတဲ့အတွက် ဈေးကျဖို့ခဲ ယဉ်းပါတယ်။ ငွေသတ္တုသိုက်တွေ နေ့စဉ်တန်နဲ့ချီပြီး တွေ့နေတဲ့တိုင် အောင် ဝယ်လိုအားမြင့်မားနေတော့ ဈေးနှုန်းက တက်နေဆဲဖြစ်ပါ တယ်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု၊ အတိုးနှုန်းကျဆင်းမှု၊ ငွေတန်ဖိုးကျ ဆင်းမှုစတဲ့ စီးပွားရေးကျဆင်းတာနဲ့ ငွေတန်ဖိုး ထိခိုက်မှု မဖြစ်စေပါဘူး။ နိုင်ငံစီးပွားရေးအကျပ်အတည်းကြုံပြီဆိုရင် စတော့ရှယ်ယာဈေးတွေ ထိုးကျတတ်ပါတယ်။ ဒီအချိန် ရောင်းထုတ်ဖို့ မလွယ်ကူတဲ့အတွက် ဆုံးရှုံးမှုများပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ယခုကြုံတွေ့နေရတဲ့ စီးပွားရေး ပြဿနာတွေကြောင့် ဒေါ်လာတန်ဖိုးက တအိအိကျဆင်း နေပါတယ်။ ဆက်ကျဦးမဲ့ လက္ခဏာတွေရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဖိုး တန် သတ္တုတွေက စွမ်းအင်တွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက် ငွေချောင်း၊ ငွေတုံး၊ ငွေပြားတွေပိုင်ဆိုင်ထားတာဟာ စီးပွားရေးကျဆင်းတဲ့ဒဏ် မခံရအောင် သုံးနိုင်တဲ့ အကာအကွယ်တစ်ခုလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ငွေသတ္တုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာဟာ နိုင်ငံစီးပွားရေး ကျဆင်းချိန် မှာပင် ပုံမှန်ဝင်ငွေရနေတဲ့ သဘောကို ဆောင်နေပါတယ်။ ယခုနှစ်အတွင်း ငွေဈေးတက်ရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်း ငါးချက် လွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကစပြီး ငွေသတ္တုက ရွှေထက် စွမ်းဆောင်ရည် ပိုမိုမြင့်မားလာပြီး ကာလလတ်အတွင်းမှာလည်း ဒီအတိုင်းဆက်ပြီး အကျိုးဖြစ်ထွန်းသွားမဲ့ အလားအလာရှိနေပါတယ။် လွန်ခဲ့တဲ့သုံးလအတွင်းမှာ ရွှေဈေးနှုန်းက ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက် ခဲ့ပါတယ်။ ရွှေရဲ့ဈေးနှုန်းက တစ်သက်နဲ့ တစ်ကိုယ်မကြုံဘူးတဲ့ ဈေးနဲ့မြင့် တက်ခဲ့သလို ငွေကလည်း ၃၁ နှစ်အတွင်း အမြင့်ဆုံးနှုန်းထိ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး တစ်ကြိမ်မှမဖြစ်ဘူးတဲ့ ဈေးနှုန်းထိ မြင့်တက်ဖို့ တာစူနေပါတယ်။ ငွေဈေးတက်တာက မတ်မတ်ထောင်တဲ့ အတွက် မကြာမီပြန် ကျတဲ့အခါ ဇောက်ထိုးကျမှာ စိုးရိမ်သူတွေလဲ ရှိပါတယ်။ ဇန်နဝါရီလ က ရှိတဲ့ အနိမ့်ဆုံး ဈေးတစ်အောင်စ ၂၆ ဒသမ ၆၈ ဒေါ်လာနှုန်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ၁၉ ဒသမ ၅၈ ဒေါ်လာမြင့်တက်လာပါတယ်။ ရာခိုင်နှုန်း နဲ့ ကြည့်ရင် ၇၃ ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ ယခုနှစ်အတွင်း ငွေသတ္တုဈေး မြောက်ခဲ့ရတဲ့ အဓိကအချက် တွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ယေဘုယျအားဖြင့် အချက် ၅ ချက်ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ ငွေသတ္တုရဲ့ ဝယ်လိုအားမြင့်တက်နေခြင်း ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ပထမနှစ်လအတွင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ထုတ်ရောင်းတဲ့ ငွေပြားက ရွှေပြားထုတ် ရောင်းသလောက်ရှိနေပါ တယ်။ ဒီကာလအတွင်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ဝယ်လိုအားတစ်ခု တည်းကပဲ ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ အခုချိန်ထိ တရုတ် နိုင်ငံက တင်သွင်းတဲ့ ငွေပမာဏက အောင်စ ၁၁၂ သန်းရှိနေပါ တယ်။ ဒါကို ကြည့်ရင်ပဲ ငွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍမသေး တာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၂။ နည်းပညာကဏ္ဍမှာ ငွေရဲ့ဝယ်လိုအားမြင့်တက်လာခြင်း ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ်အတွင်းမှာ စက်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍက ငွေရဲ့ဝယ်လိုအားက ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာ၊ ဆဲလ်ဖုန်းနဲ့ တခြား အီလက်ထရွန်းနစ် ကိရိယာတွေမှာ ငွေကို တိုးတက်သုံးစွဲ လာတာကို တွေ့နေရပါတယ်။ ကွန်ပျူတာ၊ ဆဲလ်ဖုန်းအပါအဝင်ခေတ်သစ်အသုံးအဆောင်တွေရဲ့ ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းက တစ်ဟုန်ထိုး မြင့်တက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီပစ္စည်းတွေမှာ ထည့်သွင်း အသုံးပြုနေတဲ့ ငွေသတ္တုရဲ့ ဝယ်လိုအားကလည်း ကွဲျကူးရေပါမြင့်တက်လျက် ရှိနေပါတယ်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းမှာ ငွေရဲ့ အသုံးပြုမှုပိုမို လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပြည်သူလူထုအတွင်း ကျန်းမာရေး အသိပညာ ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့အမျှ ပဋိဇီဝ ဂုဏ်သတ္တိတွေရှိနေတဲ့ ငွေသတ္တုဟာ ကျန်းမာရေးလောကထဲကို တစစတိုးဝင်လာ နေပါတယ်။ ငွေကို အဝတ်အထည်တွေမှာ သုံးသလို မြောက်မြားစွာသော ကျန်းမာရေးသုံး ကိရိယာတန်ဆာတွေ ထုတ်လုပ်ရာမှာ ငွေကို အသုံးပြု လာပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာ တရုတ်နိုင်ငံက ဝယ်ယူနေတဲ့ ငွေသတ္တု ဝယ်လိုအားရဲ့ ၇ဝ ရာခိုင်နှုန်းဟာ စက်မှုကဏ္ဍအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်မီ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ တိုးတက်လာခြင်း၊ ဆဲလ်ဖုန်းလို အီလက်ထရွန်းနစ် ထုတ်ကုန်တွေမှာပါနေတဲ့ ငွေသတ္တုရဲ့ အသုံးကလည်း တစ်ဟုန်ထိုး ကျယ်ပြန့် လာပါတယ်။ ၂ဝ၁ဝ ပြည့်မှာ တရုတ် နိုင်ငံရဲ့ ဆဲလ်ဖုန်းထုတ်လုပ်မှုဟာ နှစ်အလိုက် ၃၅ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက် နေပြီး လုံးရေသန်း ၉ဝဝ အထိ ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်လုံးမှာ ငွေပါဝင်မှု သုည ဒသမ ၅၈ ရမ်ပါနေတာကို ကြည့်ရင် ငွေသတ္တုရဲ့ ဝယ်လိုအား ကို ခန့်မှန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မကြာမီနှစ်များအတွင်းက ငွေသတ္တုရဲ့ ဝယ်လိုအားက ဆေးဘက် ဆိုင်ရာမှာသာမက နေစွမ်းအင်နဲ့ ရေသန့် စင်ရေးလုပ်ငန်း တွေမှာပါ ပါဝင်လာပါတယ်။ ၃။ ငွေသတ္တု ပြတ်လပ်မှု ရောင်းလိုအားထက် ဝယ်လိုအားကများလာတဲ့အခါ အဲဒီကုန် ပစ္စည်းမျိုးတွေ ပြတ်လပ်သွားတတ်တာ ဓမ္မတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြေအောက် သယံဇာတအဖြစ်နဲ့ ငွေသတ္တုသိုက်တွေဖြစ်တည်နေတာ အောင်စ သန်းပေါင်းများစွာ ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လောလောဆယ်မှာ ဈေးကွက်ထဲကို ဝင်ရောက်လာနိုင်မဲ့ အနေ အထားတော့ မရှိသေးပါဘူး။ ငွေပြားအဖြစ် ထုတ် လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ရက်သတ္တနှစ်ပတ် လောက်စောင့်နေရတာကို ကြည့်ရင် လောလော ဆယ်မှာ ငွေလက်ကျန် ပေါပေါများများရှိမနေသေးဘူးဆိုတာကို သက်သေပြနေပါတယ်။ ၄။ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်မှာ ငွေစက္ကူအဆမတန်များနေခြင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဗဟိုဘဏ်နဲ့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ ဗဟိုဘဏ်တွေ အားလုံးက လည်ပင်းနစ်နေတဲ့ ေြွကးမြီကိစ္စတွေနဲ့ နပန်းလုံးနေရပါတယ်။ ေြွကးမြီဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက် လှည့်ပတ် ငွေကြေးမြင့်တက်လာအောင် ဆောင်ရွက်နေရပါတယ်။ ငွေစက္ကူတွေ ကို လှိမ့်ပြီး ထုတ်ရင်းထုတ်ရင်းနဲ့ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်ထဲမှာငွေစက္ကူတွေ ဖောင်းပွပြီး ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငွေစက္ကူတန်ဖိုး ဆက်လက်ကျဆင်းနေမယ်။ ရွှေငွေသတ္တုအပါအဝင် အခြား အက် ဆက် တန်ဖိုးတွေက ဆက်လက် မြင့်တက်နေပါမယ်။ အမေရိကန် ဗဟိုဘဏ်ကို တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၁ဝဝ ကျော်အတွင်း ဒေါ်လာ တန်ဖိုးက တအိအိကျ ဆင်းနေပါတယ်။ အခုဆိုရင် ဒေါ်လာရဲ့ တန်ဖိုးဟာ ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ကျခဲ့ပြီးပါပြီ။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့ အမျှ ဆက်လက်ကျဆင်းနေမဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငွေသတ္တုရဲ့ တန်ဖိုးကလည်း ဆက်လက်တက်နေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၅။ ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်အတည်း ဖြစ်နေခြင်း ရွှေနဲ့ငွေလို ခိုင်မာတဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေ တန်ဖိုးမြင့်တက်ရတာဟာ ငွေကြေး ဖောင်းပွတာက အဓိကအကြောင်းရင်း ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆကြတာများပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမြဲတမ်းအဲဒီလိုဖြစ်နေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နှစ်စဉ်ငွေဖောင်းပွနှုန်း ၁ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၆ ရာခိုင်နှုန်း အထိ မြင့်တက်နေတဲ့ ၁၉၉ဝ ပြည့်လွန်နှစ်တွေကို ပြန်ကြည့်ပါ။ အဲဒီကာလအတွင်းမှာ ငွေနဲ့ရွှေသတ္တုဈေးက အများကြီးမြင့်တက် ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ ဝယ်လိုအားမရှိလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကာလက အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက စန်းထနေတဲ့ ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယခုအချိန်မှာ အမေရိကန်စီးပွားရေးက စန်းထနေတဲ့ ကာလ မဟုတ်ပါဘူး။ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်တုန်းက လူတွေရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အရာရာဟာ ပြိုကျနေတယ်လို့ ခံစားနေရတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကြီးမားပြင်းထန်တဲ့ ပြဿနာတော့ ရှိနေပြီဆိုတဲ့ အသိနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နံှသူတွေက ရွှေနဲ့ငွေလို ခိုင်မာတဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေကို ရွေးချယ်လာကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငွေသတ္တုရဲ့ ဈေးနှုန်း မိုးထောင်တက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေသတ္တုရဲ့အနာဂတ် ငွေသတ္တုကို ရှေးပဝေသဏီကတည်း က အဖိုးတန်သတ္တုအဖြစ် သုံးစွဲ ခဲ့ပါတယ်။ ငွေသတ္တုကို အဆင်တန်ဆာ လက်ဝတ်လက်စား အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သလို စားပွဲခင်း၊ အသုံးအဆောင်လို ငွေ ထည် ပစ္စည်းအဖြစ် သုံးခဲ့ရုံမက တစ်ခေတ်တစ်ခါက ငွေသား အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ပစ္စည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေရဲ့ဈေးနှုန်းကို လေ့ လာ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဧပြီလ အတွင်းမှာ ထရိုင်တစ်အောင်စကို ၄၉ ဒေါ်လာနှုန်းဝန်းကျင်ထိ ရှိလာပါတယ်။ ရွှေဈေးနဲ့ အချိုးအစားအားဖြင့် ၃ဝ ပုံတစ်ပုံရှိပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁ဝဝ အတွင်းမှာ ၁၅ ပုံ တစ်ပုံကနေ ၁ဝဝ ပုံတစ်ပုံအထိ အမျိုးမျိုး အချိုးအစားပြောင်းလဲမှု ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈ဝ ပြည့်နှစ်က ဈေးကွက်မှာ ဈေးကစားမှုကြောင့် ငွေသတ္တုတစ်အောင်စကို ၄၉ ဒသမ ၄၅ ဒေါ်လာနှုန်းထိ အထွတ် အထိပ်ကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ တစ်အောင်စကို ၁ဝ ဒေါ်လာထိ ကျဆင်းခဲ့ရာမှ ၂ဝဝ၁ ခုနှစ်မှာ တစ်အောင်စကို ၄ ဒသမ ၁၅ ဒေါ်လာထိ ထိုးဆင်းခဲ့ပါတယ်။ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ် မေလမှာ တစ်အောင်စကို ၁၅ ဒသမ ၂၁ ဒေါ်လာအထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် မေလမှာ တစ်အောင်စကို ၂၁ ဒသမ ၃၄ ဒေါ်လာနှုန်းထိ တက်လာပါတယ်။ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဧပြီလမှာ ၄၉ ဒသမ ၇၆ ဒေါ်လာ ထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဈေးနှုန်းဟာ သက်တမ်းတစ်လျောက်အမြင့် ဆုံးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ငွေသတ္တုရဲ့ ဈေးနှုန်းကိုကြည့်ရင် အတက်အကျပြင်းထန် မှုရှိခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်အတွင်း ငွေသတ္တုရဲ့ဈေးနှုန်း ဟာ အတက်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ မြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ငွေဈေးနှုန်းရဲ့ အတက်ခပ်ကြမ်းကြမ်းအတက်ကို Parabolic Move လို့ကျွမ်းကျင်သူတို့က သတ်မှတ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ အတက် ကြမ်းတဲ့ ကုန်စည်တို့ရဲ့ သဘောအတိုင်း ဈေးပြန်ကျချိန်မှာ ဇောက် ထိုး စိုက်ဆင်းနိုင်တယ်လို့ လေ့လာဆန်းစစ်သူတို့က သုံးသပ်ပါတယ်။ သို့သော် ငွေသတ္တုရဲ့တန်ဖိုးကို အဆုံးအဖြတ်ပေးရာမှာ ငွေသတ္တုသက်သက်အဖြစ် ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်သုံးသပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ငွေသတ္တုဟာ ရှေးဂရိနဲ့ ရောမခေတ်ကတည်းက ကူးစက် ပိုးတွေကို ကာကွယ်တဲ့ပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးတော်ခံခဲ့ပြီး၊ အစဉ်အလာ ကြီးခဲ့တဲ့သတ္တုဖြစ်ပါတယ်။ ငွေသတ္တုကို ဆေးဝါးလောကမှာ အသုံး ပြုမှုက အလယ်ခေတ်မှာ တစ်ခေတ်ပြန်ဆန်းခဲ့ပါတယ်။ ငွေသတ္တုရဲ့ဈေးနှုန်းကို ထိန်းသိမ်းပေးရာမှာ ခိုင်မာတောင့် တင်းတဲ့ ကျောထောက်နောက်ခံက စက်မှုလုပ်ငန်းပိုင်းက ဝယ်လိုအား ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေသတ္တုဟာ ခေတ်သစ် အခန်းကဏ္ဍနဲ့ နယ်ပယ် အတော်များများမှာ ဝင်ဆံ့လာတဲ့သတ္တုဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်သစ်မှာ အသုံး တွင်ကျယ်လာတဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်း၊ ဆိုလာပြား ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာ ငွေသတ္တုက တစ်ခန်းတစ်ကဏ္ဍမှာ ပါဝင်လျက်ရှိပါ တယ်။ စက်မှုလုပ်ငန်းဝယ်လိုအားကို အရအမိ ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ငွေသတ္တုရဲ့ ရှေ့ အလားအလာက ခန့်မှန်းရ ခက်ခဲဖွယ်ရာ မရှိနိုင်ပါ။Source:wikipedia;ibtimes;kitco.News;goldseek
Sunday, 24 Apr 2011
ပေးကားပေး၏ မရအံ့သြစရာ ကျွန်တော်ပြန်နေကျလမ်းမှာပြန်ရင်း ဓာတ်ဆီတန်းစီနေတဲ့ကားတွေကို တွေ့တာက ညအချိန်မတော်ကြီးပါ။ ပုဂ္ဂလိကဓာတ်ဆီဆိုင်ကြီးက ညမို့ပိတ်နေပေမယ့် ကားတွေကတော့ တန်းစီထားဆဲပါ။ ကျွန်တော် ဒီလူတွေ ဒီလောက် ဇွဲကောင်းစွာ တန်းစီနေတဲ့အတွက် ချီးကျူးရမှာလား၊ သူတို့ နောက်နေ့ကား မောင်းစရာ မရှိလို့ တန်းစီနေတာလား၊ သိချင်စိတ်က တဖွားဖွား။ ဓာတ်ဆီသွားထုတ်မလို့ သိချင်စိတ်လေးနဲ့အတူ သတိရမိတာက ထိထိမိမိကာတွန်းလေးတစ်ခုကို သတိရသွားမိတယ် ''မိသားစု တွေ စားစရာသောက်စရာ အပြည့်အစုံ ဖတ်စရာ စာအုပ်တွေနဲ့ ဘယ်လဲ''လို့မေးတော့''အော် ဓာတ်ဆီ သွားထုတ်မလို့ပါတဲ့''။အင်း.. ဒင်း ပြောတာမမှားဘူး၊ အိပ်ရာလိပ်ပါ ယူသွားရမလို ဖြစ်နေပြီလို့ စိတ်ထဲက တွေးနေမိပါတယ်။ အတိတ်က လက်တွေ့ဘဝ အတိတ်ကို တူးဆွမိတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ကိုယ်ပိုင်ကားစီးပါတယ်။ အရင်က တစ်နေ့ ၂ ဂါလံနှုန်း ၃ ရက်စာထုတ်ရပါတယ်။ အစိုးရက တိုက်ရိုက် ကိုင်တွယ်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီအချိန်တွေတုန်းက ဓာတ်ဆီထုတ်ဖို့ တန်းစီးရရင် အလွန်ဆုံး အဆိုးဆုံးက နာရီဝက်လောက်ပါ။ ဆီစာအုပ်နဲ့ ထုတ်ရတယ်။ သတ်မှတ်ခွဲတမ်းပေး တဲ့ဆိုင်မှာ ထုတ်ရပါတယ်။ ဘာမှ ပြဿနာမရှိပါဘူး။ အဆင်ပြေပါတယ်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်တော့ ၁၅ မိနစ် ၂ဝ မိနစ်လောက်အတွင်းမှာ ထုတ်လို့ပြီးပါတယ်။ အဲဒီတုန်းကတော့ ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာ အော် ငါတို့မလဲ ဒုက္ခလို့ တွေးခဲ့မိပါတယ်။ ဆီထည့်ချင်တဲ့နေရာမှာ လွတ်လပ်စွာထည့်လို့ရရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ တောင့်တ ခဲ့ပါတယ်။ ဆန္ဒပြည့်ဝပျော်ရွှင်ရ ပြောင်းလဲမှုအစကတော့ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁ဝ ရက်နေ့မှာတော့ နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ စက်သုံးဆီ ရောင်းဝယ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပုဂ္ဂလိကလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ စက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင်တွေကိုလည်း ပုဂ္ဂလိကကိုလွဲှပြောင်းပေးလိုက် ပါတော့တယ်။ လွဲှပြောင်းပေးတဲ့အချိန်မှာ ပုဂ္ဂလိက စက်သုံးဆီ သမားတွေကို ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်။ နိုင်ငံတော်တွင် စက်သုံးဆီ လုံလောက်စွာဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေး၊ သင်တင့်မျှတသော ဈေးနှုန်းဖြစ် စေရေးအတွက် အဓိကပါဆိုတာ သိရပါတယ်။ ပျော်ရွှင်မှုက တစ်ခဏတာ ပုဂ္ဂလိကကို စတင်လွဲှပြောင်းပေးစဉ်က အရင်လို သတ်မှတ်ဆိုင်မှာ ဆီစာအုပ်နဲ့ ထုတ်စရာမလို၊ ကြိုက်တဲ့နေရာ ကြိုက်တဲ့ ဆိုင်မှာ ကြိုက်သလောက်ထုတ်လို့ရတော့ စိတ်ချမ်းသာ လိုက်တာ၊ ကောင်းလိုက်တာ၊ ခရီးဝေးသွားတော့ ကိုယ့်ရောက်တဲ့နေရာ ရောက်ရာမြို့က ဆီဆိုင်မှာ ဝင်ထည့်လို့ရခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် တာရှည် မခံလိုက်ပါ၊ ပျော်ရွှင်စိတ်ချမ်းသာခဲ့ရတာ ခဏတာပါပဲ။ ဒုံရင်းက ဒုံရင်းသို့ အလွယ်တကူ ထည့်ရနေတာကနေ ဓါတ်ဆီဆိုင်တွေမှာ ဓာတ်ဆီတန်းစီရတဲ့ပြဿနာဟာ ၂ဝ၁၁ နှစ်ဆန်းလောက်မှာ ပြန်စတော့တာပါပဲ။ ဓာတ်ဆီတွေ တန်းစီဝယ်ကြရပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်တို့လို တန်းစီဖို့ ဘယ်လိုမှ အချိန်မပေးနိုင်သူတွေက မဖြစ်မနေ ကားသုံးနေရတော့ တန်းမစီရဘဲ အလွယ်တကူဝယ်ရတဲ့ အောက်တိန်းဆီ ဝယ်ထည့်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ဓာတ်ဆီဝယ်ဖို့ တန်းစီတာ မှ အံ့သြစရာပါပဲ။ ဘယ်လောက်ထိ ရှည်သလဲဆိုရင်တော့ ဖော်ပြထားတဲ့ ပုံတွေသာ ကြည့်ပါတော့လို့ပဲ ပြောရတော့မှာပါပဲ။ မောင်းဖို့မဟုတ် ရောင်းဖို့ထုတ် တစ်ချို့က ဒီလောက်ဓာတ်ဆီ တန်းစီပြီး ထုတ်နေတာ ဘာလို့လဲ၊ ဘာကြောင့်လဲ သိချင်လာတယ်။ စက်သုံးဆီတွေ ထဲမှာ ပြဿနာက ဓာတ်ဆီပဲ ကျန်တာတွေ အဆင်ပြေတယ်။ ဓာတ်ဆီကို ဘာကြောင့် တန်းစီရတာလဲ တွေ့ပါလေပြီ။ အဖြေက မောင်းဖို့ မဟုတ် ရောင်းဖို့ အတွက် ထုတ်နေကြတာတဲ့။ တစ်ဆိုင်ပြီး တစ်ဆိုင် ဓာတ်ဆီ ထုတ် ရောင်းတာ တစ်နေ့ကို ၂ဝဝဝဝ ကျပ်လောက်တောင် ကိုက်နေပြန်သတဲ့။ အော် သူတို့တွေ မစဉ်းစားတာဘဲ။ ဆီရောင်း လို့တော့ မြတ်ပါရဲ့ တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းဖြစ်လာမယ့် ကုန်ဈေးနှုန်း တက်လာမယ့် အခြေအနေကို မစဉ်းစား၊ တစ်ကိုယ် ကောင်းသမား တွေပါပဲ။ ဆီတိုးရောင်းစားတဲ့ အုပ်စုက အလွန်ဆုံးရှိမှ ထောင်ဂဏန်း ပေါ့ သူတို့တွေကြောင့်ကျန်တဲ့သူ သန်းခြောက်ဆယ် ဘယ်လောက် ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာ မစဉ်းစား၊ ကိုယ်ချင်း စာတရားမရှိသူများ လို့ပဲ ပြောရမှာလား၊ နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးအစီအစဉ်တွေကို မအောင်မြင်အောင် လုပ်နေတာလို့ပဲ ပြောရမလား၊ စေတနာနဲ့ မတန်သူများ လို့ ပြောရမှာလား။ လုံလောက်အောင် မရောင်းနိုင်တာလား/မရောင်းတာလား ပုဂ္ဂလိကကို လွဲှပြောင်းရောင်းချခွင့်ပြုတဲ့အချိန်မှာ စက်သုံးဆီကိုလိုတဲ့အချိန်မှာ လိုသလောက် တင်သွင်းခွင့်ပြု ခဲ့တယ်ဆိုတာ သိရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လေ့လာကြည့်မိ သလောက်တော့ အောက်တိန်း ဓာတ်ဆီ 92 Rom ဆိုတာကို ပင်လယ်ရေကြောင်းကရော နယ်စပ်ကရော တင်သွင်းထားခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ ၂ဝ၁ဝခုနှစ် စက်တင်ဘာကနေ ၂ဝ၁၁ခုနှစ် ဧပြီလဆန်းအထိ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍကနေ တင်သွင်းခဲ့တာဟာ စုစုပေါင်း 92 Rom ဂါလံ ၂၃ဝ သိန်းကျော်တင်သွင်းခဲ့တာပါ။ ဒါက အရင်ပြည်တွင်းမှာ ပေးနေကျ ဓာတ်ဆီအပြင် ပြည်ပက ပိုသွင်းလာတဲ့ အခြေအနေပါ။ တင်သွင်းသမျှ အကုန်ဖြန့်သလား ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍကနေ တင်သွင်းလိုသမျှ ခွင့်ပြုခဲ့လို့ ပုဂ္ဂလိကနေ တင်သွင်းတဲ့ဆီက များပြားလှပါတယ် ။ဒီဆီတွေအားလုံး ကို တင်သွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီကဆိုင်မှာ အကုန်ရောင်းသလား...? ၊ တခြားနည်းလမ်းနဲ့ ရောင်းချမှုတွေကောရှိသလား...? ၊ တင်သွင်းသမျှအကုန်ဖြန့်သလား...? ဆိုတာတွေကို ဆက်စပ်စဉ်းစား ကြည့်တဲ့အခါ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အဖြေထုတ်လို့ မရခဲ့ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စက်သုံးဆီဈေးနှုန်း ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ၂ဝ၁၁ ဧပြီ ၈ ရက်က စက်သုံးဆီရောင်းဈေးတွေကိုကြည့်တဲ့အခါ ပုဂ္ဂလိက စက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင်မှာ ဓာတ်ဆီတစ်ဂါလံ ၂၅ဝဝ ကျပ်၊ ဒီဇယ်တစ်ဂါလံ ၄ဝဝဝ ကျပ်နဲ့ ရန်ကုန်မှာ ရောင်းချတာပါ။ လမ်းကြားပြင်ပ အရောင်းဆိုင်တွေက ဓာတ်ဆီ တစ်ဂါလံ ၅ဝဝဝ ကျပ်၊ ဒီဇယ်ဆီ တစ်ဂါလံ ၃၈ဝဝ ကျပ်ပါ။ နေပြည်တော်နဲ့ မန္တလေးမှာတော့ ပုဂ္ဂလိကဓါတ်ဆီဈေးတူပြီး၊ ဒီဇယ်ဈေးက ၄၄ဝဝ ကျပ်နဲ့ ရောင်းတာပါ။ လမ်းဘေးပြင်ပအရောင်းဆိုင်တွေက ဓါတ်ဆီ ၅၄ဝဝ ကျပ်၊ ဒီဇယ်တစ်ဂါလံ ၄၅ဝဝ ကျပ်နဲ့ ရောင်းချနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီဈေးတွေကို ဧပြီ ၈ ရက်နေ့က ပြင်ပမှာ ရောင်းဝယ် ဖြစ်နေတဲ့ 1 US$ ရောင်းဝယ်ဈေး၊ ၈၆၅ ကျပ်နဲ့တွက်ချက်တဲ့အခါ ဓါတ်ဆီဈေးက ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရောင်းဈေး 3.47 US$ နဲ့ ပြင်ပဈေး 4.50 US$ ဖြစ်ပြီး၊ ဒီဇယ်ကတော့ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနဈေး 2.89 US$ နဲ့ ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ဈေး 4.15 US$ ဖြစ်တာတွေ့ရပါ တယ်။ ပြည်ပနိုင်ငံတွေရဲ့စက်သုံးဆီဈေးနှုန်း ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံရဲ့ ဈေးနှုန်းတွေမှာတော့ ဘရူနိုင်း နိုင်ငံကလွဲရင် ကျန်နိုင်ငံရဲ့ ဈေးနှုန်းတွေဟာ ဓါတ်ဆီတစ်ဂါလံ ၃.၈ US$ ကနေ ၇.၅၃ US$ထိရှိပြီး၊ ဒီဇယ်တစ်ဂါလံရဲ့ ဈေးနှုန်းဟာ ၅.၈၉ US$ ကနေ ၈.၂၄ US$ထိရှိတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဥရောပနိုင်ငံတွေထဲမှာတော့ ဓာတ်ဆီတစ်ဂါလံ ၈.၉၁ US$ ကနေ ၁ဝ.၇၄ US$ ထိရှိတာ တွေ့ရပြီး၊ ဒီဇယ်ဆီကတော့ ၈.၈ဝ US$ ကနေ ၁ဝ.၃၉ US$ ထိဖြစ်ပေါ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ ဧပြီ ၇၊ ၈ ရက်နေ့က နိုင်ငံတကာ စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းတွေကို သိရှိနိုင်ဖို့ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ အဖြေ သေချာပြီပေါ့ စက်သုံးဆီ တင်သွင်းတဲ့အရေအတွက် နိုင်ငံတော်က တာဝန်ယူတုန်းကထက် များတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြည်တွင်းမှာ ပုဂ္ဂလိက ကနေ ပြန်ရောင်းတာက သုံးပုံတစ်ပုံပဲရှိပြီး၊ သုံးပုံနှစ်ပုံ ပျောက်နေတယ်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းတွေက မြန်မာ့စက်သုံးဆီ ဈေးနှုန်းထက် များနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ စီးပွား ရေး ပညာမှာလည်း ကုန်စည်သည် ဈေးနှုန်းနိမ့်ရာမှ ဈေးနှုန်းမြင့်ရာ သို့ စီးဆင်း၏လို့ ဆိုထားတော့.. သေချာတာက ပြည်တွင်းမှာ မရောင်းတဲ့ စက်သုံးဆီတွေဟာ ? ? ? ? ? ဓါတ်ဆီဆိုင်မှာ ကားတန်း စီပြီး၊ အမြတ်နဲ့ရောင်းစားနေတဲ့ စက်သုံးဆီတွေရော ဘာလဲ၊ ..ဘယ်လဲ၊ မိမိနိုင်ငံကလွဲရင် ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေက ဈေးပိုကြီးတာတွေ့ရပါတယ်။ ဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့ စက်သုံးဆီ ဈေးနှုန်းက ၂ ဆလောက်ပိုမိုမြင့်မားနေပါတယ်။ ပေးကာ ပေး၏မရ နိုင်ငံတော်သည် အစစ အရာရာ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရာ မှ တံခါးဖွင့်ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နှင့် အညီ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ မြှင့်တင်ပြီး ပုဂ္ဂလိကသို့ လုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျဖြင့် ငြင်သာစွာ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါဟာလည်း ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးအတွက် စစ်မှန်တဲ့စေတနာ၊ နိုင်ငံတော်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာပါပဲ။ အခုထိ ဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းတွေ မတက်ရလေအောင် ၂၅ဝဝ ကျပ်ဈေးနဲ့ နိုင်ငံတော်က ပုဂ္ဂလိကဆိုင်တွေဆို ရောင်းချပေးနေဆဲပါ။ ဒီအခြေ အနေကို အခွင့်ကောင်းယူအတ္တဆန်တဲ့ တစ်ကိုယ်ကောင်း သမား တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးမျက်နှာမထောက် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး ရဲ့ဒုက္ခကို ဂရုမစိုက်ဘဲ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း၊ မှောင်ခိုရောင်းခြင်းဆိုတဲ့ အလုပ်ကို အတ္တသမားလူနည်းစုက ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဓါတ်ဆီဆိုင် တန်းစီဆီထုတ် မှောင်ခိုရောင်းချခြင်းအလုပ်ကို လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့် ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး အစစအရာရာ အဆင်ပြေစိတ်ချမ်းသာအောင် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပေမယ့် နိုင်ငံတော်ရဲ့ စေတနာဟာ ပြည်သူလူထုထံမရောက် ဘေးက အတ္တ သမား လက်တစ်ဆုတ်စာ လူတန်းစားများကြောင့်......။ ပေးကားပေး၏ မရပါတကား....။ ၇-၃-၁၁ ရက်နေ့မှ ၈-၄-၁၁ ရက်နေ့အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏ စက်သုံးဆီရောင်း ဈေးနှုန်းများ နှိုင်းယှဉ်ချက် Source: Ministry of Foreign Affairsမှတ်ချက်။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့၏ ရောင်းဈေးနှုန်းများမှာ ၈-၄-၁၁ ရက်နေ့ ရောင်းဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။ * စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ လက်ရှိရောင်းဈေးနှုန်းများဖြစ်သည့် ဒီဇယ်ဆီ တစ်ဂါလန် လျှင် ၃ဝဝဝ .ဝဝ ကျပ်၊ ဓာတ်ဆီ တစ်ဂါလန်လျှင် ၂၅ဝဝ .ဝဝ ကျပ်နှင့် ဂျက် လေယာဉ်ဆီတစ်ဂါလန်လျှင် ၂၅ဝဝ .ဝဝ ကျပ်တို့ကို ၈-၄-၁၁ ရက်နေ့ရှိ ပြင်ပ ဈေးကွက်ငွေလဲလှယ်နှုန်း ၁ US$ = ၈၆၅ ကျပ်နှုန်းဖြင့်တန်ဖိုးသင့် တွက်ချက် ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဥရောပနိုင်ငံများ၏ စက်သုံးဆီရောင်းဈေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်ချက် ၇-၄-၂ဝ၁၁ နေ့ အဓိကမြို့ ကြီးများ၏ စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းများစာရင်း
လက်တလော ကမ္ဘာ့စားအုန်းဆီဈေးကွက် နဲ့ အလားအလာ
လက်တလော ကမ္ဘာ့စားအုန်းဆီဈေးကွက် နဲ့ အလားအလာ စားသုံးဆီအတွက်သာမက မာဂျရင်း၊ ချောကလက်စတဲ့ စားသောက်ကုန်မှအစပြုပြီး အလှကုန်ပစ္စည်းများနဲ့ ဇီဝ လောင်စာ အတွက်ပါ အသုံးဝင်တဲ့ စားအုန်းဆီကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းဝယ်လိုအား ကြီးထွားမှုက မြန်ဆန်လို့နေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သဘာဝတွင်း ထွက်လောင်စာဆီရှားပါးမှုတွေ ကြုံတွေ့လာရတာနဲ့အမျှ ဇီဝ လောင်စာ အတွက်ဝယ်လိုအားကလည်း ပိုလို့လာနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်လိုအားတက်လာတာနဲ့အညီ ရာသီဥတုအခြေအနေတွေ၊ သဘာဝဘေးဒဏ်တွေအရ ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်အောင် လိုက်မထုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ကုန်ဈေးနှုန်းတွေက ဖောင်းပွမြင့်တက်နေဦးမှာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အခင်းအကျင်း ၂ဝ၁၁ ရဲ့ ကမ္ဘာ့စားအုန်းဆီဈေးကွက်အခင်းအကျင်းကို လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် အများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့ အင်ဒို နီးရှားနဲ့ မလေးရှားတို့မှာ ၂ဝ၁ဝ နှစ်ကုန်ပိုင်းက လာနီညာကြောင့် မိုးရွာသွန်းခဲ့ လို့ စားအုန်းဆီထုတ်လုပ်မှုထိခိုက်ခဲ့ပြီး ပဲပုပ်ဆီအများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့ အာဂျင်တီးနားမှာလည်း ရာသီဥတုပူပြင်းခြောက်သွေ့လို့ ပဲပုပ် အထွက်လျော့တဲ့ အခြေအနေတွေအရ ၂ဝ၁၁ နှစ်ဆန်းမှာ ၃ နှစ် ကျော်အတွင်း စားအုန်းဆီဈေးဟာ ပထမအကြိမ်အနေနဲ့ ပဲပုပ်ဆီ ဈေးထက် မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ ဇန်နဝါရီပထမပတ်ထဲမှာ သန့်စင်ပြီး စားအုန်းဆီဈေးက တစ်တန်ကန်ဒေါ်လာ ၁၂၂ဝ ကျော်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဲဒီအချိန်မှာဘဲ ဖေဖော်ဝါရီလဆန်း မှာ ကျရောက်မယ့် တရုတ်နှစ်ကူးပွဲတော်အတွက် ဝယ်လိုအားတက်နိုင်လို့ တစ်တန်ကို ရင်းဂစ် ၄ဝဝဝ (ကန်ဒေါ်လာ ၁၃ဝ၈) ထိမြင့်တက်နိုင်တယ်လို့လည်း ခန့်မှန်းခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ဒုတိယပတ်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ငွေကြေးမူဝါဒတင်းကျပ်ခဲ့ပေမဲ့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ပဲပုပ် ဝယ်လိုအားခိုင်မာမယ့် အလားအလာများအရ စားအုန်းဆီဈေးကလည်း တက်ပြီးရင်း တက်လာခဲ့ကာ သန့်စင်ပြီး စားအုန်းဆီဈေးက တစ်တန် ၁၂၉ဝ ဒေါ်လာကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလလယ်ပိုင်းမှာ ရေနံ ထုတ်လုပ်တဲ့ လစ်ဗျားမှာ နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုကြောင့် ရေနံဈေးနှုန်း တွေ မြင့်တက်လာခဲ့တာနဲ့အမျှ ဘိုင်အိုဒီဇယ်နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ သန့်စင်ပြီး စားအုန်းဆီဈေးကလည်း တစ်တန်ကို ကန်ဒေါ်လာ ၁၃ဝဝ နီးပါးအထိမြင့်လာခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နံှသူတွေ က စိုက်ပျိုးရေးကုန်စည်တွေကို ယုံကြည်မှုခိုင်မာလာခဲ့တဲ့အတွက် ဈေးပိုလာတာလို့လည်း ဆစ်ဒနီအခြေစိုက် ကုန်စည်လေ့လာ ဆန်းစစ်သူတွေက ဆိုပါတယ်။ ပထဝီနိုင်ငံရေးတင်းမာမှုနဲ့ စားအုန်းဆီ အနောက်အာရှနဲ့ မြောက်အာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာ မသေချာတဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့် ဇီဝလောင်စာအတွက် စားအုန်းဆီဝယ်လိုအားဟာ အနည်းဆုံးတန်ချိန် ၂ ဒသမ ၅ သန်း အထိ တိုးနိုင်တယ်လို့ မတ် လ ၇ ရက်ကနေ ၉ ရက်အထိကျင်းပတဲ့ စားအုန်းဆီညီလာခံနဲ့ ၂ဝ၁ဝ ပြပွဲမှာလည်း လေ့လာဆန်းစစ်သူ တွေက သုံးသပ်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ရေနံဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှု၊ စားအုန်းဆီလက်ကျန်နည်းပါးမှုနဲ့ ဝယ်လိုအားတိုးတက်မှုတွေအရ စားအုန်းဆီကြမ်းဈေးနှုန်းက စံချိန်သစ်တင်လောက်တဲ့အထိ မြင့်တက် နိုင်တယ်လို့လည်း ခန့်မှန်းခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယေဘုယျဘဏ္ဍာ ရေးအခြေအနေ ကျဆင်းတာမိုျးနဲ့ ရုတ်တရက်ဈေးကွက်ကျသွားတာ မိုျး မရှိ ဘူးဆိုရင် ဒီနှစ်ရဲ့ စားအုန်းဆီကြမ်းဈေးနှုန်းက ရင်းဂစ် ၃ဝဝဝ (ကန်ဒေါ်လာ ၉၈၉) အောက်ရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ လည်း ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ဆူနာမီနဲ့ စားအုန်းဆီ အဲဒီလိုဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာ မမျှော်လင့်ပဲ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ငလျင်နဲ့ ဆူနာမီဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ကုန်စည်ဈေးနှုန်းတွေ ကျဆင်းခြင်းနဲ့အတူ စားအုန်းဆီဈေးလည်း လိုက်ပါကျဆင်းခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံဟာ လစဉ် စားအုန်းဆီတန်ချိန် ၄ဝဝဝဝ-၅ဝဝဝဝ လောက်ဝယ်ယူနေပြီး ယခုလိုဆူနာမီကြောင့် နျူကလီးယားစက်ရုံ ပေါက်ကွဲပြီး ဝယ်လိုအားတွေကျဆင်းခဲ့တဲ့ ဂယက်က စားအုန်းဆီ ကြိုပွိုင့်ဈေးတစ်တန်ကို ကန်ဒေါ်လာ ၄ဝ-၅ဝ လောက် လျှော့ချ လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မတ်လကုန်တဲ့အထိ စားအုန်းဆီကြိုပွိုင့်ရော လက်ငင်းဈေးပါ အကျဘက်ကို ဆင်းလာခဲ့တာ တွေ့နေရပါတယ်။ ဒါတွေက လတ်တလောဖြစ်ပျက်နေတဲ့ စားအုန်းဆီဈေးကွက်ပါ။ ကမ္ဘာ့ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ စားသုံးမှု ကမ္ဘာ့စားအုန်းဆီထုတ်လုပ်မှုကို လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် အမေရိကန်စိုက်ပျိုးရေးဌာနရဲ့ ခန့်မှန်းတွက်ချက် မှုအရ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ မှာ စုစုပေါင်းကမ္ဘာ့စားအုန်းဆီထုတ်လုပ်မှု တန်ချိန် ၄၇- ၄၈ သန်းခန့်မှာ အင်ဒိုနီးရှားက တန်ချိန် ၂ဝ-၂၃ သန်းဝန်းကျင်နဲ့ အများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်နေပါတယ်။ မလေးရှားကတော့ တန်ချိန် ၁၇-၁၈ သန်းနဲ့ ဒုတိယနေရာမှာရှိပြီး ထိုင်းနိုင်ငံက တန်ချိန် ၁ ဒသမ ၅ သန်း၊ နိုက်ဂျီးရီးယားက တန်ချိန် ၈ ဒသမ ၅ သိန်း ကျော်၊ ကိုလံဘီယာက တန်ချိန် ၈ ဒသမ ၂ သိန်းနဲ့ အခြားနိုင်ငံတွေက တန်ချိန် ၃ သန်းကျော်ထုတ်လုပ်မှုရှိတယ် လို့ လေ့လာသိရှိရပါတယ်။ ကမ္ဘာ့စားအုန်းဆီစုစုပေါင်းတင်သွင်းမှုက တန်ချိန် ၃၆ သန်းကျော်ရှိပြီး လူဦးရေအများဆုံးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယက တန်ချိန် ၇ ဒသမ ၂ သန်းနဲ့ အများဆုံးတင်သွင်းရပါတယ်။ ဒုတိယကတော့ တန်ချိန် ၆ ဒသမ ၂ သန်း ကျော်တင်သွင်းတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး EU-27 က တန်ချိန် ၅ ဒသမ ၂ သန်းကျော်နဲ့ တတိယ၊ ပါကစ္စတန် က တန်ချိန် ၂ ဒသမ ၃ သန်းနဲ့ စတုတ္ထနေရာကအများဆုံး တင်သွင်းမှုရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မလေးရှားစားအုန်းဆီတင်ပို့မှုမှာ တရုတ်နိုင်ငံကို နှစ်စဉ် တန်ချိန် ၃ ဒသမ ၄၈ သန်းနဲ့ အများဆုံး တင်ပို့ရပြီး၊ အဓိကတင်ပို့ရတဲ့ ကျန်နိုင်ငံတွေကတော့ ပါကစ္စတန်၊ ဥရောပ၊ အိန္ဒိယ၊ အမေရိကန်၊ အီဂျစ်နဲ့ ဂျပန်တို့ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါ တယ်။ စားအုန်းဆီအများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံတွေမှာ ယခင် ၂ နှစ်ဆက်တိုက် လာနီညာ အကျိုး ဆက်ကြောင့် အထွက်နှုန်းတွေကျဆင်းခဲ့ပေမဲ့ ယခုနှစ်မှာတော့ ရာသီဥတုအခြေအနေ ပြန်ကောင်းလာလို့ အထွက်နှုန်း ပြန်မြင့်တက်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ အဓိကစိုက်ပျိုးရာ ဆာဗားပြည်နယ်မှာ အထွက်နှုန်းမြင့်တက်လို့ မတ်လမှာ စားအုန်းဆီထုတ်လုပ်မှု ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းထိမြင့်တက်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထား တာ လည်း ကြားနေရပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံဟာ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်မှာ တန်ချိန် ၁၆ ဒသမ ၉ သန်း ထွက်ရှိခဲ့ရာက ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်မှာ တန်ချိန် ၁၇ ဒသမ ၈ သန်းအထိထွက်နိုင်ပြီး အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံကလည်း ယခင်နှစ်က တန်ချိန် ၂၁ ဒသမ ၉ သန်းထွက်ရှိခဲ့ရာက တန်ချိန် ၂၃ ဒသမ ၇ သန်းကို တိုးလာနိုင်တယ်လို့ လန်ဒန်အခြေ စိုက် ွGodrej International မှဒါရိုက်တာ Dorcb Mistry က မတ်လ ၉ ရက်မှာ ခန့်မှန်းပြောကြားထားပါတယ်။ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဆီစားသုံးမှုအနေနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံက ၈ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်နိုင်ပြီးဆီထွက်ရှိမှုနဲ့ လက်ကျန်စာရင်းတွေ ထုတ်ပြန်တဲ့အချိန် ရင်းနှီးမြှုပ်နံှ သူတွေက ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲလုပ်လာဖွယ်ရှိတယ်လို့လည်း ဆိုပါ တယ်။ ဒီနှစ်စားအုန်းဆီထုတ်လုပ်မှုက မနှစ်ကထက် ပိုမယ့်အခြေအနေတွေ ရှိနေသလို ဝယ်လိုအားကလည်း ဆက်လက်မြင့်တက်မယ့် လက္ခဏာတွေတွေ့နေရပါတယ်။ မတ်လထဲမှာ စားအုန်းဆီဈေး ပြန်လည်ကျဆင်းလာတယ်ဆိုပေမဲ့ မလေးရှားဘာဆာကုန်စည်ဒိုင်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဈေးနှုန်းတွေအရ ၂ဝ၁ဝ ဒီဇင်ဘာလမှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ပျှမ်းမျှ ဈေးထက် ပိုနေသေးတာတွေ့နေရပါတယ်။ လာမယ့်အလားအလာ အနေနဲ့ ရေနံဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေအုံးမယ်ဆိုရင် ဂျပန်ဆူနာမီ အကျပ်အတည်းကြောင့် ဝယ်လိုအားပါးသွားပေမဲ့ စားအုန်းဆီ ဈေးနှုန်းက များများ မကျဆင်းနိုင်ဘူးလို့ ဈေးကွက်လေ့လာ ဆန်း စစ်သူတွေက သုံးသပ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရင်းနှီး မြှုပ်နံှသူတွေအနေနဲ့ကတော့ ပြောင်းလဲနေတဲ့ ရာသီဥတု အခြေ အနေနဲ့ ထုတ်လုပ်မှု၊ ရေနံဈေးနှုန်း၊ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအပြောင်းအလဲ၊ နိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေအရ ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ ကုန်စည်ဈေးနှုန်း တွေကို မပြတ်လေ့လာစောင့်ကြည့်ဖို့တော့လိုကြောင်းပါ။ ယုဇန Source : palmoilhq, USDA, mpob
ဆင်းရဲခြင်းမှလွတ်ကင်းအောင် လမ်းပြဖော်ဆောင်ပေးမယ့် Microfinance အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်း
Wednesday, 30 Mar 2011
ဆင်းရဲခြင်းမှလွတ်ကင်းအောင် လမ်းပြဖော်ဆောင်ပေးမယ့် Microfinance အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ လူဦးရေတွေ တိုးပွားနေတာပါ။ အဲဒီလို လူဦးရေတွေ တိုးပွားလာမှုနဲ့အတူ ဆင်းရဲ နွမ်းပါးသူ အရေ အတွက်ဟာလည်း နေ့စဉ်တိုးပွားလျက်ရှိနေတာကို လေ့လာ တွေ့ရှိရပါတယ်။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ သန်းပေါင်း ၇ဝဝဝ နီးပါးအနက် ဆင်းရဲမွဲတေ သူဦးရေဟာ သန်းပေါင်း ၁ဝဝဝနီးပါး ခန့်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှာ ဆင်းရဲ မွဲတေမှု တိုက်ဖျက်ရေးကို အထူးကိစ္စရပ် တစ်ရပ်အနေနဲ့ စီမံချက်တွေ ချမှတ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပပျောက်ရေးသို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသမဝါယမအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့လည်း ''အသေးစားချေးငွေ လုပ်ငန်းကို သမဝါယမပြု ကြစို့''ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကို ချမှတ်ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ရှိတဲ့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကို အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ကြဖို့ အစဉ်တစိုက် တိုက်တွန်း လျက် ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂစီးပွား ရေးနှင့်လူမှုရေး ကောင်စီကလည်း၂ဝဝ၅ ခုနှစ်ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသေးစား ချေးငွေလုပ်ငန်းနှစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အသေးစားချေးငွေ လုပ်ငန်းများ တိုးတက်အောင်မြင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ၁၉၉၇ခုနှစ်က အမေရိကန် နိုင်ငံ၊ ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းထိပ်သီးအ စည်း အဝေးမှလည်း ''၂ဝ၁၅ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အဆင်းရဲဆုံးမိသားစု သန်း ၁ဝဝကိုအသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းနှင့် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးနိုင်ရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန်''ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချမှတ်ခဲ့ ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ အာရှငွေချေးသမဝါယမ အသင်းစုချုပ်များအဖွဲ့ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့မှာ အခြေစိုက်ထားတဲ့ အာရှငွေချေးသမ ဝါယမအသင်းစုချုပ်(ACCU- Asssociation of Asian Confederation of Credit Union) ကို ၁၉၇၁ခုနှစ်မှာ စတင်ဖွဲ့ စည်းခဲ့ရာ အာရှနိုင်ငံမှ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံပေါင်း ၂ဝမှ အသင်းပေါင်း ၅၆၁၆၇ သင်း၊ အသင်းသား ၄၈သန်းတို့နဲ့စတင် ဖွဲ့စည်းလုပ်ကိုင်လျက် ရှိတာကို သိရှိရပါတယ်။ ACCU ဟာ ၂ဝ၁၅ခုနှစ်မှာ ဒေသတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ဆင်းရဲသား သန်း ၈ဝဝအနက်မှ တစ်ဝက်ကိုဆင်းရဲနွမ်းပါး မှုလျှော့ချနိုင်ရေး ဦးတည်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံ ဟာလည်း ACCU ရဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများကို အထိုက်အလျောက် အကူအညီပေးပြီး ကောင်း မွန်တဲ့အနာဂတ်ကို ပုံဖော်လာစေရန် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိတာကို ဗဟိုသမဝါယမအသင်းလီမီတက်ရဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းက သက်သေပြနေပါပြီ။ ဆင်းရဲမွဲတေမှုလျော့နည်းလာသည် နှင့်အမျှ ဆင်းရဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခိုး၊ ဆိုး၊ လုယက်မှုများ၊ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများဟာလည်းလျော့နည်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။မကောင်းတဲ့ အနိဋ္ဌာရုံ တွေ လျော့ပါးပပျောက်လာတာနဲ့အမျှ ကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ခရီးလမ်းဟာ ချောမွေ့သာယာနေမှာအမှန်ပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ဗဟိုသမဝါယမအသင်းလီမီတက်ဟာ အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုနှေးကွေးလွန်းတဲ့ မြန်မာ့အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းများ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အသေးစားချေးငွေ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာမှာ အပေါင်ဆိုင်လုပ်ငန်း၊ ဋ္ဌာနဆိုင်ရာ ငွေစုငွေချေး သမဝါယမအသင်းများ၊ ဈေးသမဝါယမအသင်းများသာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းတွေဟာ အသင်းသားပါဝင်မှုကို ကန့်သတ်ထားသလို မိမိရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်း ဒါမှမဟုတ် မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင် စုဆောင်းငွေရှိမှသာ ငွေချေးယူနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ပစ္စည်းမဲ့လူတန်း စားများ၊ တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့စားရတဲ့ လက်လုပ်လက်စား အခြေခံ လူတန်းစားများအတွက်မူအသုံးမဝင်တဲ့ ငွေချေးလုပ်ငန်းများသာ ဖြစ် ခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း အဲဒီအသေးစား ချေးငွေ လုပ်ငန်းများမှာ လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုနှေးကွေးသလို ချေးယူသူများ အနေနဲ့လည်း တိုးတက်မှု မရှိတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ အောင်မြင်မှုကင်းမဲ့ခဲ့တဲ့ ရောင်းဝယ်ရေးသမဝါယမအသင်းများ တစ်ခေတ်တစ်ခါက သမဝါယမလုပ်ငန်းဟာ လျှမ်းလျှမ်း တောက် အောင်မြင်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပေါ်ထွန်းဖြစ်တည်ခဲ့တဲ့ သမဝါယမအသင်းများအနက် ရောင်းဝယ် ရေး သမဝါယမ အသင်းများဟာ အခြေခံကျတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် အောင်မြင်မှု အရှိဆုံးသောလုပ်ငန်းတစ်ခု အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လည်းအောင်မြင်မှုအရှိန်အဟုန်ကောင်းခဲ့တဲ့ ရောင်းဝယ်ရေး သမဝါယမ အသင်းများဟာ ဝိသမလောဘသမား မှောင်ခို လူတန်းစားများ ကြောင့်လည်းကောင်း၊ အလွဲသုံးစား လုပ်သူများကြောင့်လည်းကောင်း အောင်မြင်မှုအရှိန်အဟုန် ကျဆင်းမှေးမှိန်ခဲ့ရပါတယ်။ ဗဟိုသမဝါယမအသင်းနှင့် အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်း ဗဟိုသမဝါယမအသင်း လီမီတက်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းဆင်းရဲမှု လျော့ပါးရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရန် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေခဲ့ရာမှာ ဆင်းရဲသူများအတွင်း၌ အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းကို အတိုးနှုန်း သက်သာစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်စီစဉ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ သို့သော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးဥပဒေအရ နိုင်ငံတော် မှ ခွင့်ပြုတဲ့အဖွဲ့များသာ အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခွင့်ရကြောင်း ဗဟိုသမဝါယမ အသင်းလီမီတက်မှ ဒုတိယ အထွေထွေ မန်နေဂျာဦးတင်အေးမှ ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ''ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Microfinance ဆိုတာ အတိ အကျ မရှိသေးဘူး။ ဗဟိုဘဏ်က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ဘဏ်ဥပဒေ အရ ဒီ Microfinance လုပ်ငန်းကို ပြင်ပလူတွေ လုပ်လို့မရဘူး။ အပေါင်ဆိုင်တွေ၊ UNDP အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အဲဒါနဲ့ဆက် စပ်ပြီး NGOs တွေ၊ ရုံးတွေမှာရှိတဲ့ ငွေစုငွေချေး သမဝါယမ အသင်းတွေပဲ လုပ်ခွင့်ရတာ။Microfinance ဆိုပြီးအများ ပြည်သူတွေနဲ့လုပ်ဖို့ကျ တော့ အကန့်အသတ်တွေ ရှိလာတယ်'' ''ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေမှာလည်း ဆင်းရဲ မွဲတေမှု လျော့ပါးရေးကို အများကြီးလုပ်လာကြပြီ။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ ထိုင်းတို့၊ ကမ္ဘောဒီးယားတို့ လာအိုစတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ လုပ်လာကြပြီ။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့လည်း လုပ်သင့်တယ်လို့ သုံးသပ်လာကြ တယ်။ ဆင်းရဲမွဲတေမှုကို လျော့နည်းအောင် ကြိုးစားတဲ့အခါမှာ တစ်ဖက်ကလည်း ဥပဒေက ကန့်သတ်ထားတယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ ဗဟိုသမဝါယမအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်၊ သမဝါယမဘဏ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ ဦးခင်မောင်အေးကအထက် အဆင့်ဆင့်ကို တင်ပြပြီး ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံတဲ့အခါ ဘဏ္ဍာ/အခွန် ဝန်ကြီးဌာနက ဒီလုပ်ငန်းဟာ ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်း ဖြစ်နေတယ်။ ချေးငွေတွေနဲ့ လုပ်တဲ့အခါ အမှားအယွင်း မဖြစ်အောင်တော့ ကြီးကြပ်ပေးပါဆိုပြီး အကြောင်းပြန်ကြားလာတဲ့အတွက် အခုလို လုပ်ခွင့်ရခဲ့တာပါ''လို့ အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း စတင်ခဲ့ရပုံကို ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ စတင်ဖွဲ့စည်းပြီ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ဗဟိုသမဝါယမအသင်းလီမီတက်ဟာ အာရှငွေချေးသမဝါယမ အသင်းစုခုျပ်များအဖွဲ့နဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး အသင်းဖွဲ့စည်းခွင့်ရ ကြောင်းအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ အာရှငွေချေးသမဝါယမ အသင်း စုခုျပ်များ အဖွဲ့မှလည်း အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပေါ် တိုးတက်ရေး အမျိုးသားအဆင့်သင်တန်း(Natioanl Training on Credit Co-operative Microfinance Innovation) ကို ကျင်းပ ပေးခဲ့တဲ့အပြင် သူ့ရဲ့လက်ရှိအတွေ့အကြုံတွေ ကိုလည်း ဆွေးနွေး ပြောပြခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ၂ဝဝ၇ခု နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှာ ဗဟိုသမဝါယမအသင်းလီမီတက် အနေနဲ့ အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းကို စတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ မြို့နယ်ကတော့ သာကေတမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက် ဆင်းရဲမွဲတေမှုရဲ့အဓိကအကြောင်းအရင်းက ငွေကို မစုတတ်ခြင်း၊ အလုပ်ကို ကြိုးကြိုးစားစား လုပ်ကိုင်လိုစိတ်မရှိခြင်း၊ ငွေရလွယ်တဲ့ လောင်းကစား လုပ်ငန်းများကိုသာ လုပ်ကိုင်နေကြခြင်းတို့ကြောင့်ပါပဲ။ ဒါကြောင့်လည်း ဗဟိုသမဝါယမအသင်း လီမီတက် အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းဟာ မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းမှာရော၊ သမဝါယမသမိုင်းမှာရော၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများ သမိုင်းမှာပါ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ဖူးခြင်း မရှိသေးတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ အောက်ခြေလူတန်းစားများအား ဆင်းရဲတွင်းမှ လွတ်ကင်းအောင် မည်သည့်အာမခံတစ်စုံတစ်ရာမှ ရယူခြင်းမရှိဘဲ တစ်နေ့လုပ်မှတစ်နေ့စားရသော ဈေးသည်များ၊ အထူးသဖြင့် အလုပ် လက်မဲ့ခင်ပွန်းသည်ထံမှ ဈေးဖိုးကိုပင် လုံလောက်စွာမရတဲ့အတွက် ကလေးတွဲလောင်းနဲ့ မိမိဝမ်းစာမိမိရှာဖွေစား သောက်ရတဲ့ အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီးများကို ဦးစားပေးသောလုပ်ငန်း ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိ၏မိသားစုအား စားဝတ်နေရေးကို ဖြေရှင်းရန် ခက်ခက်ခဲခဲ ရှာဖွေ ရမယ့်အရင်းအနှီးကို အလွယ်တကူ လက်လှမ်းမီအောင် ဖြေရှင်း ပေးနိုင်ရန်ဆိုတဲ့ ဦးတည်ချက်နဲ့ အရင်းမပျောက် မတည်ငွေ ထုတ်ပေးတဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်ကြောင်း ဗဟိုသမဝါယမအသင်း လီမီတက်မှ စီအီးအိုဖြစ်သူ ဦးကျော်သိန်းက ပြောကြားခဲ့တာပါ။ မွန်မြတ်တဲ့ဦးတည်ချက်ကို ချမှတ်ပြီး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့ အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းကို ရည်ရွယ်ချက်သုံးရပ်နဲ့ စတင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဦးတင်အေးက ဆက်လက် ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ''ကျွန်တော်တို့ ဒီအသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းကို ရည်ရွယ်ချက် သုံးရပ်နဲ့ စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီရည်ရွယ်ချက်တွေကတော့ ဝင်ငွေနည်းပါးတဲ့ မိသားစုများရဲ့စားဝတ်နေရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ လူမှုရေးအခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်၊ တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရရင် ဆင်းရဲမွဲတေမှုလျော့နည်းပပျောက်ရေးလုပ်ငန်းကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန်၊ ပြည်သူများအတွင်း ခြိုးခြံချွေတာ စုဆောင်းတတ်သည့်အလေ့ အထများ ဖြစ်ပေါ်ပြန့်ပွားလာစေရန်၊ လူမှုဘဝအတွင်း အဖွဲ့လိုက်တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်တတ်စေသည့် အလေ့အထ ရှိလာစေရန်တို့ပါပဲ။'' ရိုးသားကြိုးစားသူ မည်သူမဆို အသင်းဝင်ခွင့်ရှိသည် အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းဟာ ဆင်းရဲမွဲတေမှု လျော့နည်း ပပျောက်ရေးကို ဦးတည်ဆောင်ရွက် နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဆင်းရဲ သော်လည်း အလုပ်ကို ရိုးရိုးသားသား ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ကိုင် လိုစိတ်ရှိခြင်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိခြင်း၊ စုပေါင်းတာဝန်ယူတတ်ခြင်း စတဲ့ အချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံသူ မည်သူမဆိုပါဝင်ခွင့်ရှိကြောင်း သိရပါ တယ်။ အသင်းကို စတင်နိုင်ရန်အတွက် အသင်းတစ်သင်း လျှင်အနည်းဆုံး လူ ၅ဝ ရှိရမှာဖြစ်ပြီး အဆိုပါလူ ၅ဝတွင် ငါးဦးလျှင် တစ်ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းကာ ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အစပထမတွင် လူ ၅ဝ သာ သတ်မှတ်ထားသော်လည်း နောက်ထပ်ဝင်မည့် လူ စာရင်းမှာ အနည်းဆုံး ၁ဝဝအထက် ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဗဟိုသမဝါယမ အသင်းလီမီတက် အသေးစားချေးငွေ လုပ်ငန်းမှ သတ်မှတ် ထားသည့်အချက်များနှင့် ပြည့်စုံမှုရှိပါက အဖွဲ့သို့ဝင်ခွင့်ပေး မည်ဖြစ်ပြီး ပထမဦးဆုံးအသုတ်အဖြစ် အဆိုပါ လူ ၅ဝအား တစ်ဦး လျှင် ချေး ငွေ ကျပ်သုံးသောင်းဖြင့် လူ ၅ဝအတွက် ချေးငွေ ကျပ်၁၅ သိန်း စတင် ထုတ်ချေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးလျှင် ကျပ် သုံးသောင်း ထုတ်ချေးခဲ့ရာ နေ့စဉ်တစ်နေ့လျှင် အတိုးရောအရင်းပါ ကျပ် ၆ဝဝ ဖြင့် ရက်ပေါင်း၆ဝဆပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ နေ့စဉ် ဆပ်သည့် ကျပ် ၆ဝဝတွင် အတိုး ၃ဝကျပ် ၊ စုဆောင်းငွေ ကျပ် ၇ဝ၊ အရင်း ၅ဝဝကျပ်တို့ ပါဝင်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ နေ့စဉ်သတ် မှတ်ချိန်အတွင်း မပျက်မကွက် လာရောက်ပေးဆပ်သော အသင်း သားများကို ရက်ပေါင်း၆ဝပြည့်ပါက နောက်ထပ် ကျပ်လေးသောင်းခွဲ ကို တိုးမြှင့် ထုတ်ချေးပေးကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ နေ့စဉ်မပျက်မကွက် ပေးဆောင်သော အသင်းသား များအား နှစ်လလျှင်တစ်ကြိမ် ကျပ်သုံးသောင်းမှ လေးသောင်းခွဲ၊ ခြောက်သောင်း၊ ကိုးသောင်း၊ တစ်သိန်းခွဲစသည်ဖြင့် တိုးမြှင့် ထုတ်ချေးပေးကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ထို့ပြင် အသင်း၏အောင်မြင်မှုပေါ် မူတည်၍ အသင်းမှ အထူးချေးငွေများ၊ ကျန်းမာရေးချေးငွေ၊ ပညာ ရေးချေးငွေ၊ သာရေးနာရေးချေးငွေများကိုလည်း ထုတ်ချေးပေး လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ အောင်မြင်သည့်အသင်းတစ်သင်းသည် တစ်နှစ်ပြည့်သည့်အခါ တွင် အသင်းသားပေါင်း ၆၆၄ဦးရှိပါက ချေးငွေပေါင်း ၁၁၂၈ သိန်း ရှိပြီး ပြန်ဆပ်ငွေ ပေါင်းမှာ ၉၁၄ ဒသမ ၆၈ သိန်းရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချေးငွေကျန်ပေါင်းမှာ ၂၁၃ ဒသမ ၃၂ သိန်းဖြစ်ပြီးစုဆောင်းငွေပေါင်း မှာ ၁၂၈ ဒသမ ၈၅ သိန်း ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ အသင်း၏ အသားတင် အမြတ်မှာ ၂၇ ဒသမ ၈၁သိန်း ရရှိနေပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကောင်းစွာ ရပ်တည်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော အသင်းမိုျးကို ဗဟိုသမဝါယမအသင်းမှ ကြီးကြပ်၍ ငွေချေး သမဝါ ယမ အသင်းအဖြစ် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါ တယ်။ ငွေကြေးလုံခြုံစိတ်ချရစေရန် ငွေနဲ့ပတ်သက်လာလျှင် ကိုယ်ကကျူး ကိုယ့်ဒူးတောင်မယုံရဆို သလို ငွေပမာဏများပြားလာပါက လူတို့၏ သဘာဝအလျောက် သော်လည်းကောင်း၊ စိတ်ရင်းအရမဟုတ်သော်လည်း ပတ်ဝန်းကျင် ဘေးပယောဂ၏နှောင့်ယှက်မှုများအရသော်လည်းကောင်း ဝိသမ လောဘတက်လာမှုကြောင့် ငွေကြေး ဆုံးရှုံးမှုများဖြစ် တတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို ငွေကြေး ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် ငွေချေးသမဝါယမ အသင်းအနေနဲ့ ကာကွယ်မှုများ ပြုလုပ်ထားကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ဗဟိုသမဝါယမအသင်းလီမီတက်မှ ဒုတိယအထွေထွေ မန်နေဂျာ ဦးတင်အေးက ''ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အခုလို ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုက ကာကွယ်ဖို့အတွက် အရှုံးကာကွယ်ရေးရန်ပုံငွေ၊ သမာဓိ အာမခံ၊ လုပ်ငန်းစွန့်စားမှုရန်ပုံငွေဆိုပြီး ငွေကို ထိန်းသိမ်းထားရှိပါတယ်။ အရှုံးကာကွယ်ရေးရန်ပုံငွေက တစ်နှစ်ပြည့် အသားတင်အမြတ်ရဲ့ ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ဗဟိုသမဝါယမအသင်းရဲ့ ငွေချေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့မှာ ထားရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး အသားတင်အမြတ်ရဲ့ ၄ဝရာခိုင်နှုန်းကို လည်း အရှုံးကာကွယ်ရေးရန်ပုံငွေဆိုပြီး အသေးစားငွေချေးအဖွဲ့မှာ ထားရှိပေးပါတယ်။ သမာဓိအာမခံကတော့ နယ်မြေတာဝန်ခံတွေနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ နယ်မြေ တာဝန်ခံအဖွဲ့က တစ်ဦးကို ငွေကျပ် ၁ဝ သိန်း ထားရှိရပါမယ်။ အဲဒီ ၁ဝသိန်းက ပရီမီယံကြေး ၂ရာခိုင်နှုန်းကို ဗဟိုသမ က ၁ရာခိုင်နှုန်း၊ တာဝန်ခံက ၁ ရာခိုင်နှုန်း သွင်းရပါမယ်။ ဒါက မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး လုပ်ရတာပါ။ နောက် တစ်ခါ လုပ်ငန်း စွန့်စားမှုရန်ပုံငွေ ဆိုတာရှိသေးတယ်။ အဲဒီရန်ပုံငွေက ငွေ ချေးတိုင်းချေးတိုင်းမှာ ၂ရာခိုင်နှုန်းကို ဒီ Microfinance အဖွဲ့မှာ ထားရှိရမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အသင်းတစ်သင်း သင်းက တစ် ခုခု ဖြစ်ခဲ့ရင် အဲဒီအထဲက ထုတ်ယူပြီး သုံးစွဲသွားမှာပါ'' ''ထုတ်ချေးထားတဲ့ငွေတွေလည်း မဆုံးရှုံးရအောင် အထပ်ထပ် ဝိုင်းရံပြီး ကာကွယ်ထားတာပါ။ ၁၅ရက်တစ်ကြိမ် သွားပြီးစစ်ဆေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့တော့ One Day Checking လုပ်တယ်လို့ ခေါ်တယ်။ ရက်ပေါင်း ၆ဝ ပြည့်တဲ့အခါကျတော့ ဒုတိယ တစ်ကြိမ် ထုတ်ပေးတယ်။ နောက်တစ်လတစ်ခါ၊ သုံးလတစ်ခါ စစ် တယ်။ တစ်နှစ် ပြည့်ရင်တော့ စာရင်းစစ်ဝင်ရတယ်။ တကယ့် လက် တွေ့မှာ အောင်မြင်နေတဲ့ အဖွဲ့တွေ အများကြီးရှိတယ်''လို့ ရှင်းပြ ခဲ့ပါတယ်။ အောင်မြင်နေကြပြီ ဗဟိုသမဝါယမအသင်းလီမီတက်မှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့ အသေးစားငွေ ချေးလုပ်ငန်းများ အနက်မှ လုပ်ငန်း အောင်မြင်လျက် ရှိသည့် အသေးစားငွေချေးအသင်းများကို အသေးစားငွေချေး သမဝါယမ အသင်းများအဖြစ် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ယနေ့ အချိန်အထိ ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ငါးခုရှိ မြို့နယ်ပေါင်း ၄၂မြို့နယ်တွင် သမဝါယမအသင်းပေါင်း ၅၂သင်းကို သမဝါယမ အသင်းလီမီတက်အဖြစ် ဖွဲ့ စည်းပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ အဆိုပါသမဝါယမအသင်းလီမီတက်များမှ မတည်ငွေ (Seed Money) ကျပ် ၁၁၅၁၃ ဒသမ ၉၄သိန်း၊ အသင်းသား ဦးရေ ၂၆၃၃၈ ဦး ရှိပြီး စုဆောင်းငွေ ပေါင်းမှာ ၁၄ဝ၆၅ဒသမ၄၁သိန်းရှိ ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ အဆိုပါ အသင်းများ၏အသားတင်အမြတ်မှာ ၇၉၇ ဒသမ ဝ၆သိန်း ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း သိရှိရပါတယ်။ ယခုအခါတွင်ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ရှစ်ခုရှိ မြို့နယ်ပေါင်း ၆၉ မြို့နယ်တွင် အဖွဲ့ပေါင်း ၁၂၁ဖွဲ့မှ အသင်းသားပေါင်း ၅၅၃၁၃ဦး က မတည်ငွေပေါင်း ၃၂၃၈ဒသမ၆၁သိန်းဖြင့် လုပ်ငန်းများ ဆောင် ရွက်လျက်ရှိရာအသားတင်အမြတ်ကျပ်သိန်းပေါင်း၂၃၁၉ဒသမ ၅၃ ကို ရရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။ အောင်မြင်နေတဲ့ ပန်းသဇင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အင်းစိန်မြို့နယ်၊ မင်းစေတီရပ်ကွက်မှာ တည်ရှိတဲ့ ပန်းသဇင်ကတော့ နာမည်နဲ့လိုက် အောင် ထင်ပေါ်လျက် ရှိပါတယ်။ လက်ရှိကာလမှာ အသင်းသားပေါင်း ၂ဝဝ၆ ဦးရှိသလို နေ့စဉ် အတိုးရရှိငွေဟာ ကျပ်တစ်သိန်းနှစ်သောင်းနဲ့ တစ်သိန်းသုံး သောင်းကြားမှာ ရှိကြောင်း သိရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလကုန် အထိအမြတ် ငွေဟာကျပ်သိန်းပေါင်း ၁၄၂ သိန်း အထိရှိပြီး စီဘီ ဘဏ်အပ်ငွေမှာ ၃၁၆ သိန်း ရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ အဆိုပါပန်းသဇင်အသင်းရဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းစကို ရှာဖွေပေးခဲ့ တဲ့ ပန်းသဇင် အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်နီနီဝင်းကအသင်း စတင်ဖြစ်ပေါ် ခဲ့ ချိန်မှစ၍ ယနေ့အချိန်အထိ အောင်မြင်မှုသရဖူဆောင်းခဲ့ပုံများကို ပြောပြခဲ့ရာမှာ - ''ကျွန်မတို့ ပန်းသဇင်အသင်းကို စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်က လူ ၅ဝ၊ ချေးငွေ ၁၅ သိန်းနဲ့စတင်ခဲ့တာပါ။ စခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကတော့ ဒီ ၁၅သိန်းနဲ့ ဖြစ်ပါ့မလားလို့ စိုးရိမ်ရတာပေါ့။ အသင်းကို ဝင်ချင်လာ အောင်လည်း စည်းရုံးရေးမှူးက တာဝန်ယူပေးတယ်။အသင်းသား တွေကပထမပိုင်းမှာတော့ ပြောရခက်တာတွေရှိတယ်။ နောက်ပိုင်း ကျတော့ ယုံကြည်မှုနဲ့လုပ်ကြတာဆိုတော့ အသင်းသားတွေက လည်း မပျက်မကွက်လာပြီး နေ့စဉ်ပေးကြတယ်။ အမှုဆောင်တွေ ဘက်ကို လည်း ယုံကြည်မှုရှိလာတဲ့အတွက် အားမျှခြေရှိတော့ အောင်မြင် တာပေါ့။ တစ်နှစ်ကျော်ကျော်လောက်မှာ လူ ၅ဝနဲ့ စတင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မတို့အသင်းက အသင်းသားပေါင်း ၁၂ဝဝ ဖြစ် သွားတယ်။ အဲဒီမှာတင် အမြတ်က ၂ဝ၇သိန်းဖြစ်သွားရော။ အဲဒါနဲ့ပဲ အသေးစား ငွေချေးသမဝါယမအသင်းအဖြစ် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တယ်'' ''အသင်းက အောင်မြင်လာတဲ့ အခါကျတော့ အသင်းသား တွေကို ချေးငွေအပြင်သားရေးနာရေးကိစ္စတွေမှာလည်း ငွေထုတ်ချေး ပေးတာတို့၊ ထောက်ပံ့တာတို့ လုပ်ပေးတယ်။ အသင်းသား ကိုယ်တိုင် သေဆုံးရင် ကျပ် ၃ဝဝဝဝ ထောက်ပံ့ပေးတယ်။ ဒါက ပြန်ဆပ်စရာ မလိုဘူး။ နာမကျန်းဖြစ်ရင် တစ်နေ့ကျပ်သုံးရာဆပ်နဲ့ အတိုးမဲ့ ကျပ် ၃ဝဝဝဝ ထုတ်ချေးပေးတယ်။ ပညာရေးအတွက်ဆိုရင်လည်း အဝေးသင်နဲ့ နေ့ကျောင်းတက်နေသူတွေအတွက် ၄၅ဝဝဝကျပ် ထုတ် ချေးပေးတယ်။ ပြန်ဆပ်တာလည်း မှန်တယ်၊ အသင်းသားကလည်း ဆက်ချေးဖို့ ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင် ထပ်တိုးပြီး ချေးပေးသေးတယ်။ အခု ဆိုရင် ကျွန်မတို့အသင်းပိုင် မြေကွက်တစ်ကွက် ဝယ်ထားပြီးပြီ။ ဒီလကုန်လောက်ဆောက်မယ်လို့ မှန်းထားတယ်''လို့ အသင်းရဲ့ အောင်မြင်မှုကို အားရပါးရပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဆိုင်သေးမှ ဆိုင်ကြီးသို့ မင်းစေတီရပ်ကွက်မှာ နေထိုင်တဲ့ မအေးအေးလှိုင်တို့ မိသားစု ဟာ အရင်က ရပ်ကွက်အတွင်းမှာ ကုန်စုံဆိုင်လေးဖွင့်ထားခဲ့ ပေမယ့် မိသားစုစားဝတ်နေရေးကို အဆင်ပြေအောင် ဖန်တီးနိုင်မှု မရှိခဲ့ပါဘူး။ ရရစားစားဘဝနဲ့ နေထိုင်ရာကနေ ပန်းသဇင်ငွေချေး အသင်းနဲ့တွေ့တဲ့ အခါ ဆိုင်အသေးကလေးကနေ ဆိုင်အကြီးကြီးအထိ ဖွင့်နိုင်တဲ့ အပြင် တီဗွီ၊ အောက်စက် စသဖြင့် ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ ဘဝကို ဖန်တီး တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ မအေးအေးလှိုင်က''ကျွန်မတို့ အရင်တုန်းက အထည်ရောင်း တာပါ။ နောက်တော့ကုန်စုံဆိုင် ပြောင်းပြီးရောင်းတယ်။ ပစ္စည်းနဲတဲ့ အခါကျတော့အမြတ်က နည်းတော့ မိသားစု စားဖို့လောက်ပဲ ရတာ။ စုဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အခု ပန်းသဇင်အသင်းကိုဝင်လိုက် တဲ့အခါကျတော့ ပစ္စည်းကိုလည်း အရင်ကထက် ပိုပြီး စုံစုံလင်လင် တင်လာနိုင်တယ်။ အရင်းများလာတဲ့အခါကျတော့ အမြတ်လည်း များလာတာပေါ့။ အခုတော့ ကုန်စုံဆိုင်မရောင်းတော့ဘူး။ နေရာက ကျဉ်းတော့ အခုလို ပစ္စည်းစုံပဲ တင်ရောင်းတော့တယ်။ မေးသမျှ ပစ္စည်းရှိနေလေ ကိုယ့်အတွက် မလွတ်တမ်း ရောင်းရလေပဲ။ အခုဆို ကျွန်မတို့ သုံးသိန်းချေးတဲ့ အဆင့်ကို ရောက်ပြီ''လို့ ဂုဏ်ယူဝင့်ြွကားစွာ ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ဝက်တွေတိုးပြီး မွေးနိုင်ခဲ့ပြီ ပန်းသဇင်အသင်းမှ အသင်းသား တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မဋ္ဌေးဋ္ဌေးလွင် ကလည်း ''ကျွန်မ ဒီအသင်းကိုမဝင်ခင်က ဝက်မွေးတာ၊ အဲဒီတုန်းက လေးငါးကောင်လောက်ပဲမွေးနိုင်တာ။ အသင်းကို မဝင်ခင်တုန်းက တော့ ဝက်က လေးကောင်ကနေကို မတက်တော့ဘူး။ တစ်ခါတစ်လေ ဝက်စာဖိုး မတတ်နိုင်တာနဲ့၊ အများကြီးပါ။ ဒီအသင်းကို မဝင်ခင်က အရုဏ်ဦးဆိုတဲ့အသင်းကို ဝင်ခဲ့ဖူးသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းက ပြောနေကြတယ်။ ဒီအသင်းက ကောင်းတယ်ပေါ့ ဆိုတာ နဲ့ အသင်းကို ဝင်ခဲ့တာ။ အခုဆိုရင် အသင်းကရတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ လုပ်ငန်း ကို ခဲျ့လာနိုင်ခဲ့တယ်။ အခုဆိုရင် ဝက်အကောင်ပေါင်း ၃ဝ လောက် ရှိပြီ။ ကျွန်မသမီးလည်း ဒီအသင်းကို ဝင်ထားတယ်။ သမီးက ကုန် ခြောက်ရောင်းတယ်။ နောက်ဖိနပ်လည်းရောင်းတယ်။ သူတို့ လည်းအစက ဒီလိုပဲ ရလိုက်စားလိုက်နဲ့ အခုအသင်းကရတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ခဲျ့နိုင်တာပေါ့။ လုပ်ငန်းခဲျ့နိုင်တာနဲ့အမျှ ငွေပိုငွေလံျှ တွေ ရှိလာတော့ အားလုံးအဆင်ပြေကြတာပေါ့'' တေးရေးဆရာ ရွှေတိုင်ညွန့်ရဲ့ နဂါးနီသီချင်းထဲကလို ''ဆင်းရဲတွင်းလွတ်ကင်းအောင် လမ်းပြဆောင်ပါမည်၊ ရတနာ ခုနစ်သွယ် တကယ်ပင်စုံညီ ဒို့အမျိုးသားတိုင်းညီ မွဲတဲ့သူတွေလူတိုင်း ကူညီ၊ ကျောင်းဆောက်ကာ ဘုရားတည်၊ ဘိုး ဘိုးအောင်နဲ့ ရှင်အဇ္ဇဂေါဏတို့ မ,တဲ့ကိန်းဆိုက်မည်''ဆိုသလိုပါပဲ။ ဗဟိုသမဝါယမအသင်းဟာ ဆင်းရဲသား လက်လုပ်လက်စားများကို ဆင်းရဲတွင်းနွံတွင်းမှ ကင်းလွတ်အောင် ကိုယ်စွမ်းÓဏ်စွမ်းရှိသမျှ ဖော်ဆောင်ပေးလျက်ရှိနေတာကို တွေ့မြင်ခဲ့ရပါပြီ။ ယုံကြည်မှု စေတနာအမှန်နဲ့ လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိတဲ့ အသေးစားငွေချေးသမဝါယမအသင်းဟာ ဆင်းရဲ မွဲတေမှုကို လျှော့ချပေးတဲ့အပြင် အကျင့် စာရိတ္တကောင်းမွန်မှုကိုလည်း လျှော့ချပေးနိုင်မယ့် အသင်းတစ်သင်းအဖြစ် ရပ်တည်နေမှာအမှန်ပါ။ မြန်မာ့ငွေရေးကြေးရေးသမိုင်းမှာ မှတ်တိုင်တစ်ရပ်ကို စိုက်ထူနိုင်ပြီး ရေရှည်ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက် အသင်း သားများ၊ တာဝန်ရှိသူများအပါအဝင် အားလုံးက ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြလျင်ဖြင့် များမကြာမီကာလအတွင်းမှာ ဆင်းရဲ မွဲတွေမှုတွေပပျောက်တဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ထင်ထင်ရှားရှား ရပ်တည်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါကြောင်း ရေးသား တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ငလျင်ကြောင့် ဂျပန်ရေနံချက်စက်ရုံများ ထိခိုက်ပြီးနောက် ရေနံဈေးကွက်
ငလျင်ကြောင့် ဂျပန်ရေနံချက်စက်ရုံများ ထိခိုက်ပြီးနောက် ရေနံဈေးကွက် ဂျပန်နိုင်ငံမှာ မတ် ၁၁ ရက်က ပြင်းအား ၉ အဆင့်ရှိ ငလျင် လှုပ်ပြီးနောက် နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဘက် ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာ ဆူနာမီ ရေလှိုင်းကြီးတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဒဏ်ကြောင့် အဓိက ရေနံချက် စက်ရုံတစ်ရုံ မီးလောင်ပြီး နျူကလီးယားစက်ရုံအချို့ကို ပိတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် တိုကျိုမြို့ရှိ အဆောက်အအုံ သန်းပေါင်းများစွာ လျှပ်စစ်မီး မှောင်ကျခဲ့ရပါတယ်။ မြေငလျင်လှုပ်ပြီးတဲ့နောက် ပိတ်လိုက်ရတဲ့ ရေနံချက်စက်ရုံ ခြောက်ခုရှိပြီး ဂျပန်နိုင်ငံရေနံချက်လုပ်မှုရဲ့ ၃၁ ရာခိုင် နှုန်းလောက် ရှိပါတယ်။ ဒီရေနံချက်စက်ရုံတွေကို ဘယ်တော့ပြန်ဖွင့်နိုင်မယ်ဆို တာ မသေချာသေးဘူးလို့ ရိုက်တာသတင်းဌာနက သတင်းပေးပို့ပါတယ်။ ဒီလိုရေနံချက်စက်ရုံတွေ ပိတ်လိုက်လို့ ရေနံစိမ်းတင်ပို့မှု ကျ ဆင်းမယ်။ ဒါကြောင့် ရေနံစိမ်းဈေးနှုန်းကျဆင်းမယ်လို့ တချို့မီဒီယာ တွေက ပြောပါတယ်။ မြေငလျင်လှုပ်ပြီးတဲ့နောက် ပိတ်လိုက်ရတဲ့ နျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖို ၁၂ ခုနဲ့ အပူစွမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ်စက်ရုံ ၂၁ ရုံရှိပါတယ်။ ဒီစက်ရုံတွေကထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ စွမ်းအင်က တစ် နိုင်ငံလုံးစွမ်းအင်ရဲ့ ၉ ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေက အစဉ် အလာအားဖြင့် ဈေးသက်သာတဲ့ နျူကလီးယား၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့နဲ့ ကျောက်မီးသွေးတွေကိုသုံးပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ကြပါ တယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံက ဆာလဖာအပါနည်းတဲ့ လောင်စာဆီကို အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ မလေးရှားက ဝယ်ယူတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ စက်ရုံတွေက လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရဖို့ ကိုယ်ပိုင်လျှပ်ထုတ်စက်တွေကို သုံးတဲ့အတွက် ဒီဇယ်လိုလောင်စာဆီမျိုးက ဝယ်လိုအားမြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ မစ်ဆု အိကုမ္ပဏီက မစ္စတာကာမိယာမက ပြောပါတယ်။ မြေငလျင်လှုပ်ပြီး တဲ့နောက်ပိုင်း စင်ကာပူမှာ ပရီမီယံဒီဇယ်ကနေ ဒူဘိုင်းရေနံစိမ်း အထိ ရေနံစိမ်းဈေးတွေဟာ လေးရက်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် အဖြစ် မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ PVM Oil Associate ရဲ့စာရင်းဇယား တွေအရ မတ်လ ၁၁ ရက်က တစ်စည်အပေါ် ၁၉ ဒသမ ၇၇ ဒေါ်လာအထိ ဈေးတက်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံက စွမ်းအင်တင်သွင်းမှု တိုးမြှင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှာသုံးစွဲနေတဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ရဲ့ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းက နျူကလီးယားစွမ်းအင်ကနေ ရယူသုံးစွဲတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငလျင်လှုပ်ပြီးတဲ့နောက် နျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖို ၁၂ လုံးကို ပိတ် လိုက်ရတဲ့အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံက ရေနံထွက်ပစ္စည်းနဲ့ တခြားစွမ်းအင် ရင်းမြစ်တွေကို တင်သွင်းရတော့မဲ့သဘောရှိပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုက အများအားဖြင့် ကျောက် မီးသွေးနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့အပေါ် မှီခိုနေရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဇယ် (လျှပ်ထုတ်စက်တွေအတွက်) နဲ့ တခြားရေနံထွက်ပစ္စည်း (ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှု ရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အတွက်)တွေ အဓိကတင် သွင်းရပါမယ်။ ဒီ့အပြင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရည်(LNG) နဲ့ ကျောက်မီး သွေးတွေလည်း လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လောင်စာဈေးနှုန်း ဂျပန်ကို ရေနံတင်သွင်းတာရပ်ဆိုင်းတဲ့အတွက် ရေနံစိမ်းဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေတဲ့ အရှိန်အဟုန်ကို ရပ်တန့်စေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဂျပန်ရေနံချက်စက် ရုံတွေပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်ဟာ တရုတ်နဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ နှစ်စဉ်စက်ကြံ့ခိုင်ရေးအတွက် ပုံမှန်ပြုပြင်ဖို့ ပိတ်ရမဲ့ အချိန်နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဧပြီ-ဇွန် သုံးလပတ်မှ တစ်ရက်ထုတ်လုပ်မှုက ၂ ဒသမ ၁၂ သန်းထိ ကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီပမာဏက ဒေသတွင်းထုတ်လုပ်မှု စုစုပေါင်းရဲ့ ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင် နှုန်းရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒုတိယသုံးလပတ်က ထုံးစံအားဖြင့် ရေနံချက်စက် ရုံတွေ နှစ်တစ်ပတ်လည်ပြင်ဆင်မှုအဖြစ် ထုတ်လုပ်မှုရပ်ဆိုင်းထား ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဇယ်၊ ဓာတ်ဆီ၊LNG နဲ့ ကျောက် မီးသွေးဈေးတွေ တက်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တောင်ကိုရီးယား၊ တရုတ်(တိုင်ပေ)၊ တရုတ်နဲ့ ဒေသတွင်းရှိ တခြားရေနံချက်စက်ရုံတွေ အတွက် ပွပေါက်တိုးတတ်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကို အကြီး အကျယ်လုပ်ရမှာဖြစ်လို့ ဆောက်လုပ်ရေး၊ အင်ဂျင်နီယာနဲ့ စက်မှု ကုန်ကြမ်းနဲ့ ယန္တရားကုမ္ပဏီတွေအတွက် အကျိုးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အနုတ်အသိမ်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု စွမ်းအင်ပြန်ကြားရေး စီမံခန့်ခွဲမှု ဌာန စာရင်းအရ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ရေနံတင်သွင်းမှုက တစ်ရက်ကို စည် ၄ ဒသမ ၇ သန်း ရှိပါတယ်။ ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ်မှာ စက်ရုံ ၂၉ ခုက ပြန်လည်သန့်စင်ကြိုချက်နိုင်တဲ့ ပမာဏက ၄ ဒသမ ၆ သန်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ရိုက်တာသတင်းဌာနအဆိုအရ ရေနံချက်စက်ရုံ ခြောက်ရုံကို ပိတ်လိုက်ရတဲ့အတွက် တစ်ရက်ကို ရေနံစည် ၁ ဒသမ ၄ဝ သန်း ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီပမာဏက ကမ္ဘာ့ဝယ်လို အားရဲ့ ၁ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံဟာ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်က အမေရိကန်နိုင်ငံပြီးလျှင် ရေနံ ဒုတိယအများဆုံး တင်သွင်းတဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။ မြေငလျင်ကိစ္စ အတွက် တင်သွင်းမှုလျော့တာကြောင့် ကမ္ဘာ့ရေနံဈေးကွက်ကို ထူးထူးခြားခြား ထိခိုက်မှုမရှိနိုင်လောက်ပါဘူး။ မတ် ၁၆ ရက်မှာ ယေဘုယျအားဖြင့် စွမ်းအင်ဈေးနှုန်းတွေ အနည်းငယ် မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် မြောက် အာဖရိကမှာ မငြိမ်မသက်မှုက ရေနံစိမ်းဖြန့်ဖြူးမှုကို အခက်အခဲ တွေ့စေမည်ဆိုတဲ့ ယူဆချက်နဲ့ မြေငလျင်နှင့် ဆူနာမီက ရေနံဝယ်လို အားကို ကျဆင်းစေမယ်ဆိုတဲ့ ယူဆချက်ကြောင့် ပထမပိုင်းဆုံးရှုံးမှု တွေကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ Standard New York Securities Inc မှ James Zhang က ပြောပါတယ်။ ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှာ စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်က ပထမပိုင်းမှာ ကျဆင်းပေမဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့နဲ့ ကျောက်မီးသွေး တင်သွင်းမှုတွေကို နောက်ပိုင်းမှာ တိုးမြှင့်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သာမန်အားဖြင့် နျူကလီး ယားဓါတ်ပေါင်းဖို ၅ဝ က ဂျပန်လျှပ်စစ်လိုအပ်ချက်ရဲ့ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ဖြန့်ဝေပေးပါတယ်။ နျူကလီးယားစက်ရုံ လေးခုက ဓာတ်ပေါင်းဖို ၁၂ ခုကို ပိတ်ထား ရတယ်လို့ ဂျပန်နျူကလီးယားအေဂျင်စီက ပြောပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုရဲ့ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့ ၂၈ ရာခိုင်နှုန်းက ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံတွေက ရပါတယ်။ ဒီထဲက မြေငလျင်ကြောင့် စက်ရုံငါးခုကိုပိတ်ထားပါတယ်။ ဂျပန်မှာ ကျောက်မီးသွေးကထုတ်နေတဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရဲ့ ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ချ ခဲ့ရပါတယ်။ ဂျပန်မှာ ဓာတ်ငွေ့ရည် LNG နဲ့ ရေနံစိမ်းတို့နဲ့ လည်ပတ် နေတဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်တဲ့ ဂျင်နရေတာတွေရှိပါတယ်။ လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံက တစ် ရက်ကို ကျောက်မီးသွေးတန် ၇၈ဝဝ နဲ့ လောင်စာဆီ (Fuel Oil) စည် ၁၄၃ဝဝဝ လိုအပ်မယ်လို့ Barclays Capital က ခန့်မှန်းပါတယ်။ နောက် ထပ်ပြီး ရေနံစိမ်းအပိုတစ်နေ့ စည် ၆၇ဝဝဝ နဲ့ LNG ကုဗပေ သန်း ၆၇ဝဝဝ လိုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သြဂုတ်လမှစပြီး ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ပြည့်မီဖို့ တစ်ရက်ကို ရေနံစည် ၁၅ဝဝဝဝ မှ ၂ဝဝဝဝဝ ထိ ပိုမိုသုံးစွဲမယ်လို့ JP Margan က ခန့်မှန်းထားသည်။ ယခင်နှစ်က ဤကိစ္စအတွက် တစ်ရက်ရေနံစည် ၃ဝဝဝဝဝ အသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။ မင်္ဂလာသတင်းတွေ ဂျပန်ရေနံချက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီတွေက ငလျင်ဒဏ်ခံရတဲ့ သူတို့စက်ရုံတွေကို ပြန်လည်လည်ပတ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့ စက်ရုံ ခြောက်ခုအနက် သုံးခုကို မတ် ၁၆ ရက်ကစပြီး ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်နေပါပြီ။ တိုကိုျပင်လယ်အော်ဒေသ ချီဘားမှာရှိတဲ့ အိချီဟာရရေနံချက်စက်ရုံကို ပြင်ဆင်နေပြီလို့ Kyokuto Petroleum Industries ကုမ္ပဏီက ကြေညာပါတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီက နောက်ဆုံး ကြေညာတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး တစ်နေ့ကို ရေနံစိမ်း စည် ၁၇၅ဝဝဝ ကို ချက်လုပ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်အချိန်မှာ ကုန်ပစ္စည်းထွက်မယ် ဆိုတာတော့ မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ ယခုလိုကြေညာတဲ့အထဲမှာ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အကြီးဆုံး ရေနံချက် လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ JX လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာ Cosmo Oil ရဲ့ရေနံသိုလှောင်ကန်က မီးလောင်နေဆဲဖြစ်ပြီး မီးငြိမ်းဖို့ နောက်ထပ်ရက်အတန်ကြာဦးမယ်လို့ ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ လက်ရှိလည်ပတ်နေတဲ့ ရေနံချက်စက်ရုံတွေရဲ့ ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းအားက တစ်ရက် စည် ၃ ဒသမ ၁၂ သန်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအထဲက ဘယ်လောက်ကို သုံးနေတယ်ဆိုတာကို မသိရပါဘူး။ မြေငလျင်မလှုပ်မီ မတ် ၅ ရက်မှာ ကုန်ဆုံးတဲ့ ရက်သတ္တပတ်မှာ ဂျပန်ရဲ့ ရေနံချက်လုပ်မှုက ၃ ဒသမ ၉၅ သန်းရှိပြီး တစ်ပြည်လုံး စုစုပေါင်းလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ ၈၇ ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့ ဂျပန်ဓာတ် ဆီအသင်းက ပြောပါတယ်။ Sources:plattsenergyweektv.com, ogjonline.com, Reuters,marketoracle. co.uk;gogle.com;
တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်မှ ဈေးကောင်းရမယ်
Tuesday, 15 Mar 2011
တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်မှ ဈေးကောင်းရမယ် မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပဲမျိုးစုံနှင့် ပြောင်းနှမ်းများကို ပြည်ပသို့တင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိပြီး ဒုတိယပဲ အများ ဆုံး တင်ပို့ရောင်းချတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကွက်နဲ့ စားသုံးမှုပုံစံပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှ ပြည်တွင်းရှိ ပဲ ထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင် တွေကလည်း ပဲများကို ခေတ်မီစက်ကြီးတွေ ခေတ်မီနည်းပညာတွေနဲ့ ပြည်ပဈေးကွက်ဝင်ပဲများဖြစ်အောင် ပြည်တွင်းမှာ အပြိုင်အဆိုင်ထုတ်လုပ်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ ပဲများကို ကုန်ကြမ်းအတိုင်းသန့်စင်ပြီး တင်ပို့ခြင်းထက် အဆင့်မြင့် ခေတ်မီစက်ကိရိယာများနဲ့ သန့်စင်မယ်၊ အခွံချွတ်မယ်၊ အဆင့်တွေခွဲခြားမယ်။ အရောင်တွေခွဲခြားမယ်။ ဒါ့အပြင် ခွဲခြမ်းတွေပါ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန် (Value Added) အဖြစ် ထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချခြင်း ဖြင့် ဈေးနှုန်းတွေပိုမိုရရှိမှာဖြစ်သလို နိုင်ငံတော် အတွက်လည်း ဝင်ငွေပိုမိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပြည်တွင်း မှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိလာမှာဖြစ်သလို စက်မှုလုပ်ငန်းတွေလည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကို ကျင့်သုံးနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီး လယ်ယာကဏ္ဍဟာ နိုင်ငံရဲ့အခြေခံကျတဲ့ စီးပွားရေး ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်က ဒီလယ်ယာထွက်ကုန်သီးနံှတွေကို သမားရိုးကျစက်တွေကိုသာအသုံးပြုပြီး ပြည်ပဈေးကွက် တင်ပို့ ရောင်းချတဲ့အခါမှာ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ ဈေးနှုန်းတွေ မရရှိခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ ပြည်တွင်းပဲထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင် တွေက ခေတ်မီနည်းပညာ၊ ခေတ်မီစက်ကြီးတွေနဲ့ ပဲမျိုးစုံအား သန့်စင်ခြင်း၊ အဆင့်ခွဲခြားခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပြီးမှ ပြည်ပဈေးကွက်သို့ တင်ပို့ရောင်းချကြတဲ့အတွက် အရည်အသွေးမြင့်ပဲတွေကို ပိုမိုတင်ပို့ရောင်းချနိုင်တဲ့အပြင် ဈေးနှုန်းလည်း ယခင်ထက်ပိုမို ရရှိလာပြီလို့ သိရပါတယ်။ ခေတ်စနစ်တွေပြောင်းလဲလာတာနဲ့အတူ ပြည်တွင်းရှိ ပဲထုတ်လုပ်သူလုပ်ငန်းရှင်များကလည်း ပြည်ပကို ပဲကုန်ကြမ်းအတိုင်း သန့်စင်ပြီး တင်ပို့ခြင်းထက် ပဲများကို (Value Added) တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်အဖြစ် တိုးတက် ထုတ်လုပ်လာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းရှိ စက်မှုဇုန်များမှာ ပဲများကို (Value Added) တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်တဲ့ စက်ရုံ ၃၅ ရုံထဲမှ ပြည်ပဈေးကွက်သို့ ခေတ်မီစက်ကြီးတွေနဲ့ ခွဲခြမ်းထုတ်လုပ်နေတဲ့ ASY ကုမ္ပဏီနှင့် အာကာဦး ကုမ္ပဏီရဲ့ စက်ရုံ ၂ ရုံကို သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ခေတ်မီနည်းပညာ၊ခေတ်မီစက်ကြီးတွေနဲ့ တိုးမြင့် ထုတ်ကုန်အဖြစ် ထုတ်လုပ်လာ AYS ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ''ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီတစ်ဦးအနေနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန် (၄) ရှိမြေဧက ၆ ဒသမ ၃ ဧကပေါ်မှာ အိန္ဒိယ BUHLER စက်ကြီးတွေနဲ့ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဇွန်လမှာ စတင်လည်ပတ်ခဲ့တာပါ။ နည်းပညာကတော့ အိန္ဒိယနည်းပါပဲ။ အဓိက တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်တဲ့ ပဲတွေကတော့ မတ်ပဲနှင့် ပဲစင်းငုံနီပါ။ ပဲတွေကို Value Added ထုတ်လုပ်ရာမှာ လုပ်သားအင်အား ၁ဝဝကျော် နဲ့ စပြီးထုတ်လုပ်ခဲ့တာပါ'' လို့ ရှင်းပြပါတယ်။ စက်ယူနစ်များကို ပဲတီစိမ်းတစ်လိုင်း၊ ပဲစင်းငုံတစ်လိုင်း၊ နှစ်လိုင်းတပ်ဆင်ထားပြီး တစ်လိုင်းကို ကုန်ကြမ်းတစ်ရက် တန် ၁ဝဝ ခန့် ကြိတ်ခွဲ ထုတ်လုပ်နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်ကဘဲ ထပ်မံရှင်းပြရာမှာ ''မတ်ပဲနဲ့ ပဲစင်းငုံနီကို Value Added အဖြစ်ထုတ်လုပ်ရာမှာ စက်တွေကို PLC Controal System နဲ့ လည်ပတ်ခဲ့တာပါ။ ဒီ PLC Controal System ကိုMain Control ခန်းကနေ Opeartor ၂ ဦးနဲ့ တစ်စက်ရုံလုံးကို ထိန်းထားပါတယ်။ ဒီ System ရဲ့ အားသာချက်က Quality ကောင်းမယ်''လို့ ပြောပြပါတယ်။''ခေတ်မီစက်ကြီးတွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ရာမှ ထွက်ရှိလာတဲ့ ပဲစင်းငုံအခြမ်းခွဲများအား ခေတ်မီ Colour Sorter ဖြင့် Sorted (ရွေးထုတ်) ပြီးနောက် သန့်စင်၍ အနာအဆာကင်းသော အရောင်အဆင်းညီညာတဲ့ ပဲစင်းငုံကုန်ချောအဖြစ် ရောက်ရှိလာပါတယ်။ ကုန်ချောအဖြစ် ထွက်ရှိလာ တဲ့ ပဲစင်းငုံအခြမ်းအချောများကိုQ.C Test ပြုလုပ်ပြီး Grading Machine ဖြင့် ထပ်မံရွေးချယ်အဆင့်ခွဲပြီးမှ Polishing Machine ဖြင့် အရောင်တင် လိုက်တဲ့အခါမှာ ပြည်ပဈေးကွက်အဆင့်မီ ကုန်ချောတွေအဖြစ် ရောက်ရှိလာပါတယ်'' လို့ အဆိုပါစက်ရုံတာဝန်ခံက ရှင်းပြပါတယ်။ အဆိုပါ စက်တွေမှာ Colour Sorter နှစ်လုံးတပ်ဆင်ပြီး အဆင့်မြင့်ကုန်ချောတွေကို တောက်လျောက်ထုတ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် AYS ပဲခွဲစက်ရုံအနေဖြင့် ဘေးအန္တရာယ်စိစစ်ရေးနဲ့ ထိန်းချုပ်ရေးသတ်မှတ်ချက်Harzard Analysis and Critical Control Point (ISO HACCP) လက်မှတ်များရရှိထားပြီးဖြစ်လို့ စက်ယူနစ် အဆင့်တိုင်းတွင် အသုံးပြုကြိတ်ခွဲတဲ့ ဆီနဲ့ ရေတို့ဟာISO Standard ဖြင့် အညီ Q.C Test ပြုလုပ်ထားသလို စက်ယူနစ်များမှာ သုတ်ထားတဲ့ သုတ်ဆေးကအစISO Standard ပါအသုံးပြုရတယ်လို့ ထပ်မံသိရှိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လက်ရှိပဲတန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်အဖြစ် ထုတ်လုပ်နေတဲ့ မတ်ပဲနဲ့ ပဲစင်းငုံအပြင် ပဲတီစိမ်းကိုပါ တစ်နေ့ကို တန် ၁ဝဝ ခန့်ကို BUHLER ခေတ်မီစက်ကြီးဖြင့် တိုးခဲျ့ ထုတ်လုပ်သွားမှာပါလို့ သိရပါတယ်။ အာကာဦီးပဲခွဲွဲစက် နောက်ထပ်ခေတ်မီစက်ဖြင့် ပဲတန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန် ထုတ်လုပ်နေတဲ့စက်ကတော့ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန် (၄) ရှိ အာကာဦး ပဲခွဲစက်ရုံ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်ရုံကို ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်မှာ BUHLER စက်ယူနစ် များတပ်ဆင်သုံးစွဲပြီး အိန္ဒိယနည်းပညာဖြင့် မြန်မာပညာရှင်များက ပဲစင်းငုံနီ၊ မတ်ပဲနဲ့ ပဲတီစိမ်းတို့ကို တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်ကုန်အဖြစ် ထုတ်လုပ်လျက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ စက်ရုံမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ရှင်းပြရာမှာ အခုလို ခေတ်မီတဲ့ စက်ယူနစ်တွေနဲ့ ပဲမျိုးစုံကို Value Added တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ရာမှာ ပဲများရဲ့ အရည်အသွေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်း၊ အလေအလွင့်နည်းပါးခြင်း၊ ပဲခွဲခြမ်းများ ထုတ်လုပ်ရာမှာလည်း ပဲခွဲခြမ်းတွေ တိကျစွာ ခွဲလာနိုင်ခြင်းစတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိလို့ ပြည်ပဈေးကွက်မှာ ယခုလိုထိုးဖောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ ပြောပြ ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီက ပဲတန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်စက်ရုံ ၂ ရုံသာရှိပြီး လှိုင်သာယာဇုန် (၁) မှာ မတ်ပဲနဲ့ ပဲတီစိမ်း အခွံချွတ်အခြမ်းခွဲတစ်နေ့ကို ၄၈ တန်ခန့် ထုတ်လုပ်နေသလို လှိုင်သာယာဇုန်(၄) မှာလည်း ပဲစင်းငုံနီ အခွံချွတ် အခြမ်းခွဲတစ်နေ့ကို ၂၄ တန်ခန့် ပုံမှန်ထုတ်လုပ်ပေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပဲကုန်ကြမ်းများ ဝယ်ယူစုဆောင်းမှု အခြေအနေ မတ်ပဲနဲ့ ပဲစင်းငုံနီကို တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ရာတွင် လိုအပ်သော မတ်ပဲ(ကုန်ကြမ်း)နဲ့ ပဲစင်းငုံနီ (ကုန်ကြမ်း)တွေအတွက် ရွှေမေတ္တာကုမ္ပဏီမှ ပဲထွက်ရှိရာဒေသများမှာ သတ်မှတ်စံနှုန်းနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့ ပဲကုန်ကြမ်းတွေကို လိုက်လံဝယ်ယူစုဆောင်းပြီး ASY ပဲခွဲစက်ရုံကို စက်လည်ပတ်နိုင်အောင် စီစဉ်ပေးပါတယ်လို့ စက်ရုံမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပြပါတယ်။ စက်ရုံမှ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ပဲတန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန် ထုတ်လုပ်ရာမှာ လိုအပ်တဲ့ ပဲကုန်ကြမ်းတွေကို ပစ္စည်းပြတ်လပ်မှုမရှိအောင် ပဲထွက်တဲ့ ရာသီချိန်မှာ ဝယ်ယူစုဆောင်းရပါတယ်လို့ အဆိုပါ တာဝန်ခံ ကပဲ ထပ်မံရှင်းပြပါတယ်။ အာကာဦးပဲခွဲစက်ရုံကတော့ ပဲတန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ရာမှာ လိုအပ်တဲ့ပဲကုန်ကြမ်းတွေကို ပဲထွက်ရှိတဲ့ ဒေသ အသီးသီးမှာ တိုက်ရိုက်ဆင်းဝယ်လေ့ရှိသလို တစ်ခါတစ်လေ မြို့ပွဲစားများနဲ့ ဘုရင့်နောင်ဈေးကွက်မှလည်း ဆင်းဝယ်ရတာတွေရှိတယ်လို့ စက်ရုံမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ရှင်းပြပါတယ်။ ပဲ(ကုန်ကြမ်း) ဝယ်ယူစုဆောင်းတဲ့အခါမှာ ၁ လစာ ၂ လစာအမြဲတမ်း ဖြည့်တင်းထားရပါ တယ်။ ပြည်တွင်းမှာ ပဲကုန်ကြမ်းတွေကို ဝယ်ယူတဲ့အခါမှာလည်း ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Quality ကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူရလို့ အဆင်ပြေပါတယ်လို့ အဆိုပါ တာဝန်ခံကပဲ ထပ်မံပြောပြပါတယ်။ ပြည်ပဈေးကွက်သို့ တင်ပို့မှု အခြေအနေ ASY ကုမ္ပဏီက မတ်ပဲ (အလုံး) ရော (အခြမ်း) ပါပြည်ပတင်ပို့နေပြီး၊ ပဲစင်းငုံနီကတော့ အခြမ်းဘဲ ပြည်ပတင်ပို့ရောင်းချပါတယ်။ အဓိကပို့တဲ့ တိုင်းပြည်တွေကတော့ ကနေဒါ၊ ဆော်ဒီ၊ စင်ကာပူ၊ သြစတြေးလျ၊ ဆစ်ဒနီ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ကူဝိတ်၊ ဘာရိန်း၊ ဒူဘိုင်းနဲ့ ကာတာနိုင်ငံတွေကိုပါ၊ မတ်ပဲကတော့ ပဲစင်းငုံနီထက်စာရင် ပြည်ပဈေးကွက်အနေအထားအရ တင်ပို့ရတာနည်းပြီး ပဲစင်းငုံနီကတော့ ပိုများတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အာကာဦးကုမ္ပဏီကတော့ မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်းနဲ့ ပဲစင်းငုံ နီတန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်ကုန်တွေကို ဥရောပနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလန်၊ ကနေဒါ၊ အမေရိကန်နဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွေကို အဓိကတင်ပို့ရောင်းချပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စင်ကာပူ၊ မလေးရှားနဲ့ တရုတ်ကိုလည်း တင်ပို့ရောင်းချနေတယ်လို့ ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ခံတစ်ဦးက ရှင်းပြပါတယ်။ ကိုယ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ပဲတွေက ပြည်ပအဆင့်မီ Quality ကောင်းတဲ့ ပဲတွေဖြစ်လို့ ပြည်ပ ဈေးကွက်မှာ အခုထိ နေရာရနေလို့ ဒီနှစ်လည်း ဆက်လက် တင်ပို့ရောင်းချသွား မှာပါလို့ အဆိုပါတာဝန်ခံကဘဲ ထပ်မံရှင်းပြပါတယ်။အဆိုပါကုမ္ပဏီကအရင်က ပဲ တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်တွေကို ပြည်ပတင် င်ပို့ရာမှာ 25 Kgအိတ်များ၊ ပလတ်စတစ်အိတ် နှစ်ထပ်နဲ့ တင်ပို့ခဲ့ရာမှ အခုအခါ ဈေးကွက်တောင်းဆိုချက်အရ 1 Kg ၊2Kg ၊5Kg၊ ပလတ်စတစ်အိတ်များနဲ့ ထည့်ပြီး ပါကင်တံဆိပ် မျိုးစုံ ရိုက်နှိပ်ကာ ဂျပ်ဖာဘူးများဖြင့် ပြည်ပသို့ တင်ပို့လာတာသိရပါတယ်။ ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်အရ ပဲစင်းငုံခွဲ ခြမ်းများကို စက်ယူနစ်များဖြင့် ပဲများကို ဆီလူးပြီး ဆီလူးပဲ 1 Kg အိတ်များ၊ ပါကင်ထုပ်ပိုးစက်များဖြင့် ထုပ်ပိုးကာ ဂျပ်ဖာများဖြင့်ထည့်ပြီး ပြည်ပဈေးကွက်ကို တင်ပို့လာတာ တွေ့ရပါတယ်။လုပ်သားများရဲ့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ASY ကုမ္ပဏီရဲ့ ပဲခွဲစက်တွေမှာတော့ တစ်နှစ်ပတ်လုံးလည်ပတ်နေလို့ လုပ်သားများရဲ့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေကလည်း ပိုမိုတိုးတက်လာပါတယ်။ ပြည်ပဈေးကွက်လိုအပ်ချက်အရ စက်ရုံမှ စဉ်ဆက်မပြတ် ပဲတွေကိုValue Added လုပ်နေတာကြောင့် စက်ရုံရဲ့ အနီးအနားလှိုင်သာယာမှာရှိတဲ့ လုပ်သားတွေလည်း အလုပ်အကိုင်တွေ ရရှိလာပါတယ်။ ယခင်က စက်ရုံကိုလုပ်သားအင်အား ၁ဝဝ ခန့်နှင့် လည်ပတ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ရာမှ အခုဆိုရင် လုပ်သားအင်အား ၁၅ဝ ခန့်အထိရှိလာပြီလို့ စက်ရုံမှ တာဝန်ခံတစ်ဦးကရှင်းပြပါတယ်။ လုပ်သားများလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်ဖို့အတွက် စက်ရုံမှ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာများက သင်တန်းတွေ မကြာခဏပေးထားတာကြောင့် လုပ်သားတွေ စက်ယူနစ်ကိုင်တွယ်ရာမှာ ပိုမိုအဆင်ပြေလာပြီလို့ အဆိုပါတာဝန်ခံကဘဲ ထပ်မံရှင်းပြပါတယ်။ အလားတူ အာကာဦးပဲခွဲစက်မှာလည်း ပဲတန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန် တွေကိုပြည်ပဈေးကွက်လိုအပ်ချက်အတိုင်း ထုတ်လုပ်နေတာကြောင့် လုပ်သားတွေရဲ့ အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းတွေ ပိုမိုရရှိလာတယ်လို့ သိရပါတယ်။တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် စက်ရုံများ တိုးချဲ့ရန်လိုအပ်နေသေး ASY ကုမဏီရဲ့ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက `ကျွန်တောတို့ပဲမျိုးစုံကို Value Added တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန် ထုတ်လုပ်ရာမှာ ပဲ(ကုန်ကြမ်း) တွေကို ပြည်တွင်းပဲထွက်ရှိရာဒေသများမှာ ဝယ်ယူရတာ အဆင်ပြေလို့ ကုန်ကြမ်းအတွက် အခက်အခဲမရှိပါဘူး။ မတ်ပဲက ပြည်ပဈေးကွက် လိုအပ်ချက်အရ Demand နည်းနေတယ်။ ပဲစင်းငုံနီလောက်ပဲ အားထားပြီး ပြည်ပ ဈေးကွက်ပို့နေရတယ်။ အရင်က မီးမမှန်လို့ စက်လည်ပတ်ရတာ အခက်အခဲရှိပေမယ့် အခုတော့မီးပုံမှန်လေး လာနေတော့ စက်ရုံလည်ပတ်ရတာ ပိုပြီးအဆင်ပြေလာတယ်'' လို့ပြောပါတယ်။ အာကာဦးကုမ္ပဏီရဲ့တာဝန်ခံတစ်ဦးက ''အရင်ကမတ်ပဲ(အလုံး)ပဲ ဈေးကွက်ရှိပြီး အခြမ်းဈေးကွက်မရှိလို့ ပဲတွေကို တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်ကုန် ထုတ်လုပ်ရာမှာ ပဲခြမ်းအကွဲတွေမဖြစ်အောင်လို့ ဂရုစိုက်ပြီး ခွဲရပါတယ်။ အခုတော့ ပဲအခြမ်းဈေးကွက်ရှိလာလို့ လုပ်ရကိုင်ရတာ အဆင်ပြေလာတယ်'' လို့ ပြောပြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက ရာသီဥတုအနေအထားအရ ပဲကနှစ်စဉ်ထွက်ရှိလို့ ပဲတွေကို Value Added ပြုလုပ်ပြီး ပြည်ပဈေးကွက်ကို ထိုးဖောက်ဖို့ နိုင်ငံတော်အပိုင်းမှ အားပေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသလို ပဲထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်း ကိုယ်ထုတ်လုပ်တဲ့ကုန်ချောတွေကို ပြည်ပ ဈေးကွက် အဆင့်အတန်းမီပဲတွေအဖြစ် ထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပဲတွေကို (ကုန်ကြမ်း) အတိုင်း ပြည်ပတင်ပို့ရင်လည်း အခွန် ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းဆောင်ရသလို ပဲတွေကို Value Added တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ် ကုန်ထုတ်လုပ်ပြီး ပို့တော့လည်း အခွန် ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းဆောင်ရတဲ့အတွက် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာမှာ အခက်အခဲတွေရှိလာတယ်လို့ အာကာဦးကုမ္ပဏီရဲ့ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ရှင်းပြပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပဲတွေကို ကုန်ချောအဖြစ် ထုတ်လုပ်ရာမှာ ထုတ်လုပ်မှုတွေ အဆင့်ဆင့်ရှိသလို (ဥပမာ- လုပ်သားအင်အား Packing အပိုင်း)စတာတွေမှာ ကုန်ကျစရိတ်တွေ ရှိလို့ပါပဲ၊ ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ရင် ပြည်ပဈေးကွက်မှာ ပဲတန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်ဈေးကွက်မပျောက်အောင် တာဝန်ရှိသူများက ပြည်တွင်းပဲ တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေကို လုပ်သာကိုင်သာရှိအောင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရင် လုပ်ငန်းများ ဒီထက်ပိုမိုအဆင်ပြေလာမယ်လို့ အဆိုပါကုမ္ပဏီ ရဲ့တာဝန်ခံတစ်ဦးက ထပ်မံပြောပြပါတယ်။ ခေတ်စနစ်တွေ ပြောင်းလဲလာတာနှင့်အမျှ စက်မှုနည်းပညာတွေလည်း တိုးတက်လာသလို ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးရှိ စက်မှုဇုန် အသီးသီးမှာလည်း ခေတ်မီစက်ကြီးတွေ၊ ခေတ်မီနည်းပညာတွေနှင့် ပဲမျိုးစုံ Value Added ထုတ်လုပ်တဲ့ စက်ရုံတွေ ၃၅ ရုံအထိရှိလာပါတယ်။ အဆိုပါစက်ရုံများထဲမှ colour တပ်ဆင်ထားတဲ့ စက်ရုံ ၉ ရုံနဲ့ ပဲစင်းငုံခွဲစက် ၇ ရုံသာရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ ပြည်ပသို့ ပဲမိုျးစုံ FAQ တင်ပို့နိုင်တဲ့ပမာဏက ၂ဝဝ၈-၂ဝဝ၉ ခုနှစ်မှာ မက်ထရစ်တန် ၁ ဒသမ ၅၆ သန်း၊ ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ မှာ မက်ထရစ်တန် ၁ ဒသမ ၂၉ သန်း၊ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ဖေဖော်ဝါရီလအထိ မက်ထရစ်တန် သုည ဒသမ ၇၅ ၅၉ သန်းတင်ပို့နိုင်ခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ အဆိုပါ ပြည်ပဈေးကွက်သို့ ပဲမျိုးစုံ FAQ တင်ပို့တဲ့အထဲမှ ပဲတန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်က နှစ်စဉ် ၇ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ တင်ပို့နိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် ပဲမျိုးစုံကို Value Added တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်ကုန်အဖြစ် တိုးခဲျ့ထုတ်လုပ်သွားရန် လိုအပ်ပါကြောင်း ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။ကျော်ငွေ-ခင်မောင်မောင်အုန်း
မြန်မာ့သကြား ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်တစ်နေရာရရှိရေး အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်မှု ဂယက်ကြောင့် ရေနံဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှ နောက်ဆက်တွဲမှာ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာဈေးနှုန်းတွေ မြင့်တက်လာနေ တာတွေ့ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကောက်ပဲသီးနံှတွေ မြင့်တက်သလို ဇီဝလောင်စာထုတ်လုပ်တဲ့ ပြောင်းနဲ့ ကြံ၊ သကြားဈေးတွေလည်း လိုက်ပါမြင့်တက်လို့ လာနေပါတယ်။ ကမ္ဘာ့သကြားဈေးကို လေ့လာမယ်ဆိုရင် ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာမှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ သကြားကြမ်း ဈေးဟာ ၁ဝ စုနှစ် ၃ ခုနီးပါးအတွင်း အမြင့်ဆုံးလို့ ဆိုပါတယ် သကြားဈေး တစ်ကျော့ပြန်မြင့်လာ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာမှာ သကြားကြမ်းတစ်တန်ကို ကန်ဒေါ်လာ ၅၄၉ ကို အမြင့်ဆုံးရှိခဲ့ရာက ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်မှာတော့ ကမ္ဘာ့ သကြားအထွက်အခြေအနေကောင်းခဲ့လို့ ဈေးပြန်လည် လျော့ကျခဲ့တာ မေလ ၁ဝ ရက်မှာ တစ်တန်ကို ဒေါ်လာ ၃၃၃ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် သကြားထုတ်လုပ်မှုကို အောက်တိုဘာလ လောက်မှာ စတင်တာဖြစ်လို့ သကြားများများထုတ်လုပ်တဲ့ ရုရှားနဲ့ တရုတ်တို့လို နိုင်ငံကြီးတွေမှာ ရာသီဥတုမမျှမတဖြစ်ခဲ့လို့ အထွက် လျော့တဲ့ ခန့်မှန်းချက်တွေအရ ၂ဝ၁ဝ စက်တင်ဘာလမှာ တကျော့ ပြန် ဈေးမြင့်လာခဲ့ပါတယ်။ ဘူးလေးရာဖရုံဆင့်ဆိုသလို ရာသီဥတုပေါ်မှီပြီး ထုတ်လုပ်ရတဲ့ သီးနံှတွေ ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာ ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲတွေအရ ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းလို့ ဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေတဲ့အပေါ် ၂ဝ၁၁ ဒီကာလအတွင်း ကမ္ဘာ့လောင်စာဆီဈေးနှုန်း မြင့်တက်မှုအရှိန်ကြောင့် ဇီဝလောင်စာ ထုတ်လုပ်ဖို့ သကြားဝယ်လိုအားတွေ တက်စေခဲ့ပြန် ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကမ္ဘာ့သကြားကြမ်းဈေးဟာ ၂ဝ၁၁ ဇန်နဝါရီလမှာ တစ်တန်ကို ကန်ဒေါ်လာ ၇ဝ၇ ထိ ဖြစ်လာခဲ့ပြီး လက်ရှိ မတ်လ ၃ ရက်နေ့မှာလည်း နယူးယောက် သကြားကြမ်း တစ်တန်ကို ကန်ဒေါ်လာ ၆၇ဝ အထက်မှာ စိုးမိုးနေဆဲဖြစ်ပြီး လန်ဒန် သကြားဖြူဈေးက ကန်ဒေါ်လာ ၇၅၇ ဒသမ ၅ဝ ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကမ္ဘာ့သကြားအထွက် အစောပိုင်းထက်လျော့မယ်ခန့်မှန်း နိုင်ငံတကာသကြားအဖွဲ့အစည်း(ISO) က နောက်ဆုံး ထုတ်ပြန်တဲ့ အစီရင်ခံစာအရ သကြားအများဆုံး ထုတ်လုပ်တဲ့ တရုတ် နိုင်ငံရဲ့ အဓိကကြံစိုက်ပျိုးရာဒေသတွေမှာ အအေးပိုပြီး ယူကရိန်းမှာ မိုးခေါင်ခြောက်သွေ့မှုတွေအပြင် သြစတြေးလျမှာလည်း ဆိုင်ကလုန်း ဝင်ရောက်လို့ ရေလွှမ်းမိုးခဲ့တာကြောင့် သကြားထုတ်လုပ်မှုက အစောပိုင်းခန့်မှန်းထားတာထက် တန်ချိန် ၂ သိန်းလျော့ကျပြီး တန် ၁၆၇ ဒသမ ၈ သန်းထွက်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရောင်းလိုအားနဲ့ ဝယ်လိုအား မျှခြေဖြစ်ပေမဲ့ ပိုလျှံနည်း ထိပ်တန်းသကြားတင်ပို့သူ စာရင်းဝင် ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ အထွက်နှုန်းမြင့်လို့ မနှစ်ကထက် ပိုပြီးတန်ချိန် ၇ ဒသမ၈ သန်း လောက်အထိ မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သကြားအများဆုံး စားသုံးတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ မနှစ်က သကြားတင်သွင်းခဲ့ရပေမဲ့ ဒီနှစ် မှာတော့ အထွက်ပိုခဲ့လို့ တန်ချိန် ၅ သိန်း ပြည်ပတင်ပို့ဖို့ စီစဉ်နေတာ သိရပါတယ်။ ကမ္ဘာ့တချို့နိုင်ငံတွေက ထုတ်လုပ်မှုလျော့ပြီး တခိျို့ နိုင်ငံတွေက တိုးတက်နေတာကြောင့် ကမ္ဘာ့သကြား ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ သုံးစွဲမှုအနေနဲ့ ဖူလုံမှုရှိပေမဲ့ ပိုလံျှမှုတော့ နည်းသွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရေနံဈေးနှုန်းနဲ့ ဝယ်လိုအားအရ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲနိုင် နိုင်ငံတကာ ပြည်ပတင်ပို့နိုင်မှု တန်ချိန် ၅ဝ ဒသမ ၆၈၇ သန်း ခန့်မှန်းထားပြီး တင်သွင်းလိုအပ်ချက်ကိုတော့ တန်ချိန် ၅ဝ ဒသမ ၁၅၅ သန်း ရှိတာကြောင့် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်မှုက မျှခြေဖြစ်နေ တယ်လို့ ISO က ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ၂ဝ၁၁-၁၂ အတွက် ထုတ်လုပ်မှုအလားအလာကတော့ ရာသီဥတုနဲ့ ကြံတောင်သူတွေရဲ့ တွက်ခြေကိုက်မှုအပေါ် မူတည်ပြီး ဈေးနှုန်းအလားအလာကတော့ ကမ္ဘာ့ရေနံဈေးနှုန်း၊ ဇီဝလောင်စာသုံးစွဲမှုနဲ့ ကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုး အပြောင်းအလဲများအရ ကမ္ဘာ့သကြား ဝယ်လိုအား ခိုင်မာမှုအပေါ် မူတည် နေတယ်လို့ Consumer Foods Division မှ ဈေးကွက် လေ့လာဆန်းစစ်သူ Mirian Tuomey က သုံးသပ်ထားပါတယ်။ ပုံမှန်ထက် မြန်မာ့သကြားဈေးလျော့ကျမှုနည်း ကမ္ဘာ့အခြေအနေကို လေ့လာပြီးတော့ မြန်မာ့သကြားအခြေအနေကို လေ့လာကြည့်ဖို့ ပွက်ရည်၊ သကာရည် အဓိကဈေးကွက်ကြီး ဖြစ်တဲ့ မန္တလေးကို လေ့လာကြည့်ပါမယ်။ မန္တလေး ဈေးကွက်ကို မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက ပွက်သားများ နိုဝင်ဘာလမှာ စတင်ဝင်လာပြီး ဖေဖေါ်ဝါရီလလောက်မှာ အဝင်လှိုင်ကာ မတ်လကုန်အထိ အဝင်ဆက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီကာလတွေမှာ သကြားကြိတ်ခွဲရာသီဖြစ်လို့ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ တစ်နှစ်လုံး အတက်ဘက်ကိုသွားနေတဲ့ သကြားဈေး ပြန်ကျတတ်တဲ့ ကာလလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ်အနေ အထားကတော့ သကြားလက်ကားဈေး သိသိသာသာမကျဘဲ ရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ မန္တလေး သကြားဖြူထိပ်စ လက်ကားဈေးဟာ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်အနေနဲ့ ဇန်နဝါရီလမှာ တစ်ပိဿာကို ၁ဝဝဝ-၁၁ဝဝ ကျပ်ရှိခဲ့ရာက မတ်လမှာ ၂၆ဝဝ ကျပ်ကို မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ဧပြီလမှာ ၁၄ဝဝ ကျပ် ကို ပြန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။ ဇွန်လအထိ အဲဒီဈေးနဲ့ ငြိမ်နေခဲ့ရာက ဇူလိုင်လမှာ ပြန်လည်မြင့်တက်လာပြီး ဒီဇင်ဘာလမှာ ၁၈ဝဝ ကျပ်အထိ အမြင့်ဆုံးဖြစ်နေခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ ယခုလို ပွက်ရေတွေ ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတစ်ပိဿာ ၂ဝဝ ကျပ်ခန့်သာ ကျဆင်းပြီး ၁၆ဝဝ ကျပ်မှာဘဲ ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပွက်ရည်ဈေးမြင့်ပြီး တင်လဲရည်ဈေး ကျပေမယ့် သကြားဈေးမကျ သကြားဈေးထိုက်သင့်သလောက် မကျဆင်းတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး သကြားအသင်းကို မေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါ ပွက်ရေဈေးက မနှစ်ကထက် တစ်ပိဿာ ၉ဝ -၁ဝဝ ကျပ်လောက် တက်လာလို့လို့ ဆိုပါတယ်။ သကြားအသင်းဥက္ကဌ ဦးဝင်းဌေး ပြောကြားချက်အရ ပွက်ရေကို ချက်တဲ့အခါ သကြား ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ တင်လဲရည် ၄ဝ ရာခိုင်နှုန်းထွက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တင်လဲရည်ကို များသောအားဖြင့် အရက်ချက်ဖို့ အများဆုံးအသုံးပြုတာမို့ ဒီနှစ်အနေအထားအရ အရက်ချက်စက်ရုံတွေဟာ ပြောင်းနဲ့ ဆန်ကွဲကို ပိုသုံးစွဲကြတာကြောင့် တင်လဲရည်ကို ဝယ်လိုအားနည်းသွားတဲ့အတွက် တင်လဲရည်ရောင်းဈေးကျဆင်းသွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မနှစ်က ပွက်ရေကို တစ်ပိဿာ ၇ဝဝ ကျပ်နဲ့ ဝယ်ရပေမဲ့ ဒီနှစ်မှာ ၇၉ဝ ကျပ်နဲ့ ဝယ်ရပြီး တင်လဲရည်ရောင်းဈေးက မနှစ်က ၃၅ဝ ကျပ် ဈေးရှိပေမဲ့ ဒီနှစ်မှာ ၂၈ဝ ကျပ်ကို ကျဆင်းသွားလို့ သကြားဈေး များများမကျတာလို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ် သကြားအထွက်ပိုလာလို့ လာမယ့်ကာလတွေမှာလည်း ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာ ဈေးငြိမ်နိုင်တယ်လို့ ဦးဝင်းဌေးက ခန့်မှန်းပြောကြားပါတယ်။ ကြံတောင်သူတွေအတွက် ရွှေနှစ် ဒီနှစ်ကြံရာသီမှာ ရာသီဥတုမျှတခဲ့တဲ့အတွက် မနှစ်ကထက် အထွက်နှုန်းပိုကောင်းလို့ ကြံတောင်သူတွေအတွက် ရွှေနှစ်ပါလို့လည်း ဆက်လက်ပြောကြားပါတယ်။ မနှစ်က ကြံတစ်ဧကကို ကြံ တန် ၂ဝ ကျော်သာ ထွက်ခဲ့ရာက ဒီနှစ်မှာ တန် ၃၅ နဲ့ ၃ဝ ကြားထိ ပိုထွက် လာတာကတစ်ကြောင်း၊ မနှစ်က ဈေးကောင်းရလို့ တခိုျ့တောင်သူတွေ တိုးစိုက်လာတာကတစ်ကြောင်းကြောင့် အထွက်ပိုမယ်လို့ ခန့်မှန်း ရတာပါလို့ ဆိုပါတယ်။ လာမယ့်နှစ်မှာ ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်းလောက် စိုက်ဧရိယာတိုးလာနိုင်တယ်လို့လည်း ထပ်လောင်းပြောကြားပါတယ်။ ကြံဝယ်ဈေး တစ်ပြေးညီဖြစ်စေလို ဆက်လက်ပြီး ပုဂ္ဂလိကသကြားစက်များက ကြံဝယ်ဈေးဟာ ဒေသအနီးအဝေးအလိုက် တစ်တန်ကို ၃၅ဝဝဝ ကျပ်-၄ဝဝဝဝ ကျပ်ကနေ ၅ဝဝဝဝ ကျပ်အထိ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီဈေးတွေနဲ့ ရောင်းရတော့ တောင်သူတွေ အကျိုးအမြတ် ပိုရတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ တချို့ သကြားစက်တွေကတော့ ကြံတစ်တန်ကို ၁၈ဝဝဝ-၂ဝဝဝဝ ကျပ်နဲ့ ဝယ်ယူကြတဲ့အတွက် ကြံတောင်သူတွေ တွက်ခြေကိုက်မှု နည်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တကယ်လို့သာ သကြားစက်အားလုံးက ကြံဝယ်ဈေးကို ဒေသအလိုက် တစ်ပြေးညီ ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် ကြံစိုက်တောင်သူတွေ အကိုျးအမြတ်ရှိလို့ တိုးစိုက်လာကြမှာပါလို့လည်း ပြောကြားပါတယ်။ စိုက်ပျိုးရာဒေသမှာ ကုန်ချောစက်တည်တာ အားလုံးအကျိုးရှိ သကြားစက်တွေအနေနဲ့ အရင်က မန္တလေးမှာ အသေးစားအလတ်စား သကြားစက်ရုံ ၅ဝ ကျော်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Power မလုံလောက်မှု ၊ လောင်စာအဖြစ်အသုံးပြုရတဲ့ ထင်း၊ ဝါးတွေရဲ့ စရိတ်ကြီးမြင့်မှုအပါအဝင် ၂ဝဝ၇-ဝ၈ ခုနှစ်လောက်က သကြားဈေးနိမ့်ခဲ့တာကြောင့် တွက်ခြေကိုက်မှုနည်းလာလို့ အခုဆိုရင် ပေါင်းသကြားစက် ၂၅-၂၆ လုံးလောက်ဘဲ ကျန်တော့တယ်လို့ ဦးဝင်းဌေးက ဆိုပါတယ်။ စက် ၅ လုံးလောက်ကတော့ ကြံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့ ဒေသတွေမှာ ပြောင်းရွှေ့တည်ထောင်လည်ပတ်နေကြပါတယ်။ အဲဒီစက်တွေအနေနဲ့ ကြံကနေ တိုက်ရိုက်ကုန်ချောအဖြစ်ကြိတ်ခွဲနိုင်တဲ့အတွက် အလေအလွင့်နည်းပါးမှုရှိသလို လောင်စာအဖြစ် ကြံဖတ်ကိုလည်း သုံးစွဲနိုင်လို့ ကုန်ကျ စရိတ်လည်း သက်သာမှုရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တောင်သူတွေအနေနဲ့လည်း ကြံကိုတိုက်ရိုက်ရောင်းရလို့ ပွက်ရေချက်ရာမှာ လေလွင့် ဆုံးရှုံးမှုမျိုးမရှိတော့ဘဲ သယ်ယူပို့ဆောင်ခ သက်သာသလို စက်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့လည်း လတ်ဆတ်တဲ့ ကုန်ကြမ်းရရှိလို့ အထွက်နှုန်း ပိုကောင်း တဲ့အတွက် ဒီနည်းလမ်းကလည်း နှစ်ဦးနှစ်ဖက် စရိတ်လျှော့ချ အကိုျးအမြတ် ပိုရှိပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒေသခံတွေနဲ့ အကျိုးတူဆောင်ရွက်လို့ ရလဒ်ကောင်းတွေရှိလာ လက်ရှိမန္တလေးမှာ ရှိတဲ့ ပေါင်းသကြားစက် ၂၅-၂၆ လုံးအနေနဲ့ ကြိတ်ခွဲနိုင်မှုနဲ့ ဝင်ရောက်တဲ့ ကုန်ကြမ်း မျှတမှုရှိပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကစက်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ဂရိတ်ဝေါနဲ့ ငွေရည်ပုလဲစက်ကြီး နှစ်လုံးက တစ်ရက်ကို သကြားတန် ၄ဝဝ ခန့် ထုတ်လုပ်နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဂရိတ်ဝေါစက်ကြီးကို စစ်ကိုင်းတိုင်း အထက်ပိုင်း ကသာခရိုင် ထီးခိုျင့်မြို့နယ်မှာ တည်ထားပြီး ဒေသခံတောင်သူတွေကို သွင်းအားစု ဓါတ်မြေသြဇာနဲ့ ထုတ်လုပ်မှုစရိတ် ငွေသားထောက်ပံ့ပေးတဲ့အပြင် ထွန်စက်များကိုလည်း အရစ်ကျစနစ်နဲ့ ရောင်းချပေးပြီး တောင်သူတွေဆီက ကြံကို တစ်တန် ၃၅ဝဝဝ ကျပ်နဲ့ ပြန်လည် ဝယ်ယူပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ရလဒ်ကောင်းများအနေနဲ့ ဒေသခံများ စိုက်ပျိုးမှုတိုးတက်လို့ ဒီနှစ်ကြံရာသီမှာ ကြံတန်ချိန် ၂ သိန်းခွဲလောက်အထိ ကြိတ်ဝါးနိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။ ဂရိတ်ဝေါစက်ကြီးဟာ သကြားထုတ်လုပ်တဲ့အပြင် တင်လဲရည်ကလည်း ဇီဝလောင်စာ ထုတ်လုပ်လျက်ရှိတဲ့ ပြည်တွင်းမှာ တစ်ခုထဲသော စက်ရုံ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကစက်တွေထဲမှာ အများဆုံး ကြိတ်ခွဲနိုင်တဲ့ ဂရိတ်ဝေါပြီးရင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာ ရှိတဲ့ ငွေရည်ပုလဲစက်ကလည်း ဒေသခံ တောင်သူတွေနဲ့ ကန်ထရိုက်လယ်ယာစနစ် ဆောင်ရွက်နေတာကြောင့် ယခုရာသီမှာ တန်ချိန် ၁၃ဝဝဝဝ ခန့် ကြိတ်ဝါးနိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်း ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ စက်စွမ်းအားရှိသလောက် ကုန်ကြမ်းကြိတ်ခွဲနိုင်မှုမရှိသေး အသင်းဥက္ကဌ ခန့်မှန်းပြောကြားချက်အရ ပုဂ္ဂလိက ပေါင်း သကြားစက်များအနေနဲ့ ကုန်ကြမ်းရရှိမှုဟာ တစ်နှစ်ကို ၎င်းတို့ကြိတ်ခွဲ နိုင်စွမ်းရဲ့ ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်းခန့် အနည်းဆုံးကြိတ်ခွဲရပြီး အစိုးရပိုင်နဲ့ အခြား ဖက်စပ်ပိုင်စက်များကတော့ စက်စွမ်းအားရဲ့ ၃ဝ-၃၅ ရာခိုင်နှုန်း ဝန်းကျင်ခန့်သာ လည်ပတ်မှုရှိမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဓိကတော့ စက်တည်ရှိရာဒေသနဲ့ ကုန်ကြမ်းရရှိမှု အခြေအနေကြောင့်လို့ ဆိုပါတယ်။ အမှတ်-၁ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှာ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ ပုဂ္ဂလိက သကြားစက် အရေအတွက်ဟာ ၂ဝဝ၇-ဝ၈ မှာ စက်ကြီး၊ လတ်၊ငယ် အားလုံး ၃၄၁ လုံးရှိပြီး အစိုးရပိုင်နဲ့ အစိုးရဖက်စပ်ပိုင် စက်ကြီး တွေက ၁၇ လုံးရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကုန်ကြမ်းတိုးထုတ်နိုင်ဖို့ အကြောင်းရင်းများ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ သကြားစက်၊ ပေါင်းသကြားစက်များအားလုံး စက်စွမ်းအားပြည့် လည်ပတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် ကြံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု မြှင့်တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမြှင့်တင်နိုင်ဖို့ အသင်းဥက္ကဌအကြံပြုသလို တောင်သူတွေ တွက်ခြေကိုက်၊ သကြားစက်လုပ်ငန်းရှင်များ လည်း အကိုျး အမြတ်ရှိနိုင်မယ့် ဈေးနဲ့တောင်သူတွေဆီက ဝယ်ယူတဲ့ ကြံ ချောင်းဈေးကို ဒေသအလိုက် ဈေးနှုန်းကွာခြားမှုမများဘဲ ဝယ်ယူကြ မယ်ဆိုရင် လက်ရှိကြံလျှော့စိုက်တဲ့ ဒေသတွေမှာ ပြန်လည်တိုးမြှင့် စိုက်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ ဂရိတ်ဝေါနဲ့ ငွေရည်ပုလဲတို့လို ကြံတောင်သူတွေနဲ့ အကျိုးတူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းဟာလည်း ကြံထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်တဲ့နည်းလမ်းပါပဲ။ ဒါ့အပြင် စိုက်ပိုျးထုတ်လုပ်ရာ ဒေသမှာဘဲ ကုန်ချောထွက်ရှိအောင် စက်ရုံတွေ တည်ထောင်ခြင်းဟာလည်း ထုတ်လုပ်မှုမြှင့်တင်ယုံသာမက ဒေသခံ တွေရဲ့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းကိုလည်း ဖြည့်ဆည်းပေးရာ ရောက် ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာဌာနနဲ့ အသင်းတို့မှလည်း လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေ ကုန်ကြမ်းထွက်ရှိရာ ဒေသတွေမှာ စက်ရုံများ တည်ထောင်ပြီး တောင်သူများနဲ့ အကျိုးတူ ပူးပေါင်းခြင်း၊ တောင်သူတွေ လိုအပ်တဲ့ နည်းပညာနဲ့ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်တွေ ဖြန့်ဝေပေးမယ်ဆိုရင် ပြည်တွင်း စားသုံးမှု ပိုလံျှပြီး ပြည်ပတင်ပို့နိုင်မယ်လို့ အသင်းဥက္ကဌက ဆိုပါတယ်။ အသင်းအနေနဲ့လည်း လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး မျိုးနဲ့ စိုက်နည်းစနစ်များကို တောင်သူ တွေဆီ အရောက် ဖြန့်ဖြူးပညာပေးတာတွေ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မတ်လ ၄ ရက်နေ့ကလည်း ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း တောင်ကြီးမြို့မှာ ကြံသီးနံှလုပ်ငန်းဌာန၊ ကြံနဲ့ သကြား ထုတ်လုပ်သူများနဲ့ကုန်သည်များအသင်း၊မြန်မာ့ကြံနဲ့သကြားထုတ်လုပ် သူများ၊ ကုန်သည်များတွေ့ဆုံပြီး မြန်မာ့ကြံနှင့် သကြားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ လက်ရှိပြည်တွင်းစက်ကြီးများက ထုတ်လုပ်တဲ့ သကြားအရည် အသွေးဟာ ပြည်ပထိပ်တန်းတင်ပို့နေတဲ့ ထိုင်းသကြားအရည် အသွေးကို ယှဉ်နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ လက်ရှိအနေအထားအရ ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုက လိုအပ်ချက်နဲ့ မျှခြေအနေအထားမှာသာ ရှိနေတဲ့အတွက် တိုးတက်လာတဲ့ လူဦးရေနဲ့ စားသုံးမှုမြင့်တက်မှုကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ဖို့တော့ လိုကိုလိုတဲ့ အနေအထားပါ။ မြန်မာ့ရေမြေ အနေအထား ကောင်းသလို ကြံစိုက်ပိုျးနိုင်တဲ့ မြေဧရိယာအနည်းဆုံး ၅ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိ တိုးခဲျ့နိုင်တဲ့အခြေ အနေပါ။ ကြံကနေ စားသောက်ကုန်တွေမှာ အဓိကထည့်သွင်း အသုံး ပြုနေရတဲ့ သကြားတစ်မျိုးထဲ သာမက သကာရည်၊ အဖျော် ယမကာ၊ ဇီဝလောင်စာဆီနဲ့ စက္ကူစတဲ့ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ်နိုင်တာမို့ ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက် မြင့်နေအုံးမှာဖြစ်သလို ကမ္ဘာ့ ဝယ်လိုအားကလည်း တိုးလို့လာနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာ့ကြံ သကြားလုပ်ငန်းမှာ ကြံစိုက်တောင်သူ တွက်ခြေကိုက်ဖို့ ၊ စက်မှု လုပ်ငန်းရှင်တွေ ထိုက်သင့်တဲ့ အကျိုးအမြတ်ရရှိဖို့၊ စားသုံးသူများ ဈေးနှုန်းမဖိစီးဖို့ အပြင်ပြည်ပဝင်ငွေရရှိရေးအတွက် နေမြေချင်း ဆက် စပ်နေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံလို ကမ္ဘာ့တတိယမြောက်အများဆုံးထိ မတင်ပို့ နိုင်သေးတဲ့တိုင် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်မှာ တစ်နေရာ ယူနိုင်ဖို့ တိုက်တွန်း လိုက်ရပါတယ်။ ယမင်းရွှေစင် Sources, ISO, bloomberg.net,commoditiesonline
၂၀၁၁ ခုနှစ် ရွှေ အလားအလာ
Tuesday, 22 Feb 2011
၂၀၁၁ ခုနှစ် ရွှေ အလားအလာ ရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သဘောထားက အမျိုးမျိုးကွဲပြားပါတယ်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အရှေ့ဖျားဒေသ၊ တောင်အမေရိကနဲ့ အမေရိကန်အလယ်ပိုင်းရှိ နိုင်ငံတို့က ရွှေကိုဥစ္စာဓနအတွက် အကာအကွယ်ပစ္စည်းအဖြစ် သဘောထားကြပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ ရွှေကိုဈေးကစားစရာ ကုန်စည် တစ်ခုအဖြစ်သာ သဘောထားကြပါတယ်။ ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်အတည်းဖြစ်နေတဲ့ ကာလမိုျးမှာပင် ရွှေကိုအလေးအနက် မထားတတ်ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဘဏ္ဍာရေးအရ တင်းကျပ်မှု တွေက ရွှေဈေးကို ဆွဲချနိုင်တယ်။ ရွှေ ဈေးက ပူဖောင်းလိုပေါက်ကွဲနိုင်တယ်။ ရွှေလက်ကျန်အခြေအနေကြောင့် ရွှေဈေးတက်နိုင်စရာမရှိဘူး။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကနာလန်ထူတဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်နေပြီဆိုတဲ့ သဘောထားတွေကြောင့် ရွှေကိုအလေးအမြတ် မထားခဲ့ပါဘူး။ ဒီအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပေမဲ့ ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ်က ရွှေအတွက် ထူးခြားတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ထဲမှာ ရွှေဈေးက ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ ဆယ်နှစ်မြောက် ဆက်တိုက် မြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ထဲမှာ ငွေသတ္တုဈေးက ၇၈ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ငွေကြေးအဖြစ်သုံးစွဲနိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုနေရာယူနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန် ဒေါ်လာ၊ ကနေဒါ ဒေါ်လာ၊ ယူရို၊ ဗြိတိသျှပေါင် နဲ့ တရုတ်ယွမ်ငွေကြေးတို့ရဲ့ ၁ဝ နှစ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေ ကိုကြည့်ရင် ဒီအဓိက ငွေကြေးရဲ့ ရွှေကိုဝယ်ယူနိုင်စွမ်းက ၁ဝ နှစ် အတွင်းမှာ ၇ဝကနေ ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ အမှန် စင်စစ် ရွှေရဲ့ဈေးနှုန်းတက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ငွေတွေရဲ့ တန်ဖိုးကျ တာဖြစ်တဲ့အတွက် ငွေတန်ဖိုးတွေကျနေသမျှ ရွှေရဲ့တန်ဖိုးက မြင့်တက်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇယား - ၁ ရွှေရဲ့တန်ဖိုးက ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်က အတက်ဘက်မှာရှိနေခဲ့သလို ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်မှာလည်း ဆက်တက်နိုင်မဲ့ အလား အလာတွေတွေ့ နေရပါတယ်။ ကာလလတ်မှာ ဆက်တက်နေတဲ့ အလားအလာကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အဓိကအချက်သုံးချက်ရှိနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီသုံးချက်က- ဗဟိုဘဏ်များက ရွှေဝယ်ယူမှု- ဒေါ်လာကို ဖယ်ခွာလာမှုနဲ့- တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေတွေဖြစ်ပါတယ်။ဗဟိုဘုဘဏ်မ်များက ရွှေဝယ်ယူမူ ရွှေကိုသုံးစွဲငွေအဖြစ် ဆောင်ရွက်မှု တစ်နည်းပြောရရင် ဗဟိုဘဏ်တွေက ဝယ်ယူမှုနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှုအတွက် ဝယ်ယူမှုက စက်မှု လုပ်ငန်းအတွက် ဝယ်ယူမှုနဲ့ လက်ဝတ်လက်စားအတွက် ဝယ်ယူမှုထက် ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်မှာ အနှစ် ၂ဝ အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ကျော်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ်မှာ တရုတ်၊ အီရန်၊ ရုရှားနဲ့ အိန္ဒိယဗဟိုဘဏ်တွေက ရွှေကိုအရန်ငွေအဖြစ်သဘောထားပြီး ထူးထူးကဲကဲဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ် တတိယသုံးလပတ်မှာ ရုရှားဗဟိုဘဏ်ရဲ့ ရွှေလက်ဝယ်ထားရှိမှုက ၇ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်ပြီး မက်ထရစ်တန် ၇၅၆ တန်ထိရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၂ဝ၁ဝ ပြည့်မှာ ရုရှားနိုင်ငံက သူ့ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်တဲ့ ရွှေရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံကို ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ၂ဝ၁ဝ ပြည့်ပထမဆယ်လမှာ ရွှေ မက်ထရစ်တန် ၂ဝ၉ ဒသမ ၇ တန်ကို တရုတ်နိုင်ငံက တင်သွင်းခဲ့တယ်လို့ ဒီဇင်ဘာလက ကြေညာပါတယ်။ ၂ဝဝ၉ နှစ်အလားတူ ကာလကထက် ရာခိုင်နှုန်း ၅ဝဝ မြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီပမာဏက ကမ္ဘာ့ရွှေထုတ်လုပ်လုပ်မှုမှာ ရှေ့ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ ထုတ်လုပ်မှုထက် သာလွန်နေပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ၂ဝ၁ဝပြည့်နှစ်အတွက် ရွှေတင်သွင်းမှုဟာ စီးပွားဖြစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွက်ရော ပုဂ္ဂလိကအသုံးအတွက်ပါ စုစုပေါင်း ၆၂၄ တန်ရှိပါတယ်။ ယခင်နှစ်ကရှိခဲ့တဲ့ ၅၉၅ တန်ထက် သာလွန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ စတုတ္ထသုံးလပတ် တင်သွင်းတဲ့ အချိန်မှာ တစ်နှစ်လုံးအတွက် တင်သွင်းမှုက တန် ၇၅ဝရှိခဲ့ပါတယ်။ ဇယား - ၂ ဒေါ်လာကိုဖယ်ခွာလာမှု ရုရှား၊တရုတ်နဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံတွေက အာရပ်နိုင်ငံကရေနံကိုဝယ်တဲ့အခါ ဒေါ်လာကိုမသုံးဘဲ တခြားငွေကြေးကို သုံးဖို့ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလက ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းထွက်ပေါ်လာပါ တယ်။ မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်း ဗဟိုဘဏ်တွေက ဒီသတင်းမဟုတ် ဘူးလို့ အသည်းအသန်ငြင်းပါတယ်။ ၁၉၇၃ ခုနှစ်ကစပြီး ဒေါ်လာ ဟာ ရေနံအရောင်းအဝယ်ပြုရာမှာ သုံးနိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသော ငွေကြေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်က အမေရိကန်နိုင်ငံ လည်ပင်းနစ် အောင် ဒေါ်လာ ၁၃ ထရီလီယံ ေြွကးတင်စေတဲ့ တစ်ခုသော အကြောင်းရင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၂ဝ၁ဝ ပြည့် နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက် နေ့မှာ တရုတ်နဲ့ ရုရှားတို့က ''ဒေါ်လာကနေ လစ်ထွက်'' ပြီး ရေနံအပါအဝင် နှစ်နိုင်ငံအပြန် အလှန် ကုန်သွယ်မှုမှာ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံနှစ်ခုရဲ့ ငွေကြေးကို သုံးဖို့ သဘောတူခဲ့ပါတယ်။ မော်စကိုကMICEX မှာတရားဝင်ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားတာကို ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ် ဒီဇင် ဘာ ၁၅ ရက်မှာ စတင်ခဲ့ပါ တယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အနေအထား ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်နဲ့ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်အလွန် ကာလရွှေဈေးနှုန်းဦးတည်ရာကို နားလည်ချင်ရင် ရွှေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ခံယူချက်ကို နားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုပါမယ်။ရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကွဲပြားတဲ့ခံယူချက် အရှေ့နဲ့အနောက်က အလားတူဘဏ်စနစ်ကို သုံးနေတဲ့ အတွက် စီးပွားရေးအခြေခံမူတွေမှာ တူညီတာများပါတယ်။ လုံးဝ ပြတ်ပြတ်သားသားခြားနားတဲ့ နယ်ပယ်တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ အရှေ့ ကရွှေကို ငွေစက္ကူလိုသဘောထားတဲ့အချက်ပါပဲ။ အနောက်နိုင်ငံတွေက ရွှေကို ကြောက်ပါတယ်။ ရွှေကငွေကြေး ဖန်တီးမှုကို ကန့်သတ်ပေးပါတယ်။ ဘဏ်တွေ ကအနားယူအပန်းဖြေ တာကနေ တရုတ်ကထုတ်လုပ်တဲ့ တယ်လီဗေးရှင်း တွေဝယ်ယူဖို့ အထိ ငွေချေးယူဖို့ အားပေးပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ပြောရင် အနောက်နိုင်ငံတွေက ရွှေကိုစတော့ ရှယ်ယာတွေ၊ ဘွန်းစာချုပ် တွေလို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားစရာအဖြစ် သဘောထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တရုတ်အစိုးရက ရွှေကို အမြတ်တနိုးထားပါတယ်။ ရွှေသတ္တုတူးဖော်ဖို့နဲ့ ရွှေကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြဋ္ဌာန်း ထားတဲ့ ဥပဒေတွေကို ကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာ တရုတ်နိုင်ငံက ရွှေအများဆုံး ထုတ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေပါတယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ဝင်ငွေရဲ့ ၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ရွှေအဖြစ်စုဆောင်းဖို့ အစိုးရက ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု ဒဏ်ခံရသူတွေ အတွက် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနဲ့ ငွေကြေးအကျပ်အတည်းကို အကာအကွယ်ယူဖို့အတွက် ရွှေက အထိရောက်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြော စရာမလိုလောက်အောင် ဖြစ်နေပါတယ်။ တရုတ်အမေရိကန်ငွေကြေးပြသနာ အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်က ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ လှည့်ပတ်ငွေကြေး ပိုမိုလာဖို့ ဆောင်ရွက်တဲ့ ဒေါ်လာ ၆ဝဝ ဘီလီယံ အစီအစဉ်က တရုတ်နိုင်ငံကို ဒေါသဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆောင်ရွက်မှုက တရုတ် နိုင်ငံရဲ့ လက်ဝယ်မှာထားရှိတဲ့ အမေရိကန်ဘဏ်တိုက် စာခုျပ် ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၈၄ဝ ကိုအခြေယိုင်စေရုံမျှမက ဒေါ်လာနဲ့ ချိတ် ဆက်ထားတဲ့ ယွမ်ငွေကြေးကိုလည်း အခြေယိုင်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ငွေကြေးဖောင်းပွမှုဖြစ်ပြီး စားနပ်ရိက္ခာဈေးနှုန်းတွေ မြင့် တက်စေခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဈေးနှုန်း တွေဟာ ၂ဝ၁ဝ ပြည့်က ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ သို့ဖြစ် ရာ ရွှေဈေးက ဆက်လက်တက်မဲ့သဘောကိုဆောင်နေပါတယ်။ ကမ္ဘာရွှေအတွက် ပြိုင်ဆိုင်မှု နောက်ဆုံးသတ္တုချကြည့်ရင် ကမ္ဘာနဲ့ အဝန်းဖြစ်နေတဲ့ ေြွကးမြီထူပြောမှုနဲ့ ငွေကြေးအခြေယိုင်မှုရဲ့ တိုက်ရိုက်အကိုျးဆက်ကြောင့် လူအများစုက ရွှေရဖို့အတွက် ပြိုင်ဆိုင်လာနိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ ရေနံထုတ်လုပ်မှုက အစွမ်း ကုန်အဆင့်ရောက်နေသလို ရွှေသတ္တု သိုက်အသစ်တွေ အတွေ့နည်းလာတဲ့အတွက် ရွှေထုတ်လုပ်မှုက လည်း လက်ကုန်နှိုက်ရမဲ့ အခြေအနေရောက်နေပါတယ်။ ရွှေတွင်းရဲ့ အထွက်က ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်ကစပြီး ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ အရန်အတားအဖြစ် ဝယ်လိုအား တိုးမြင့်လာတာနဲ့အမျှ စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ထရီလီယံ ၂ဝဝ ဖိုးရှိတဲ့ ဘဏ္ဍာရေး အက်ဆက် တွေက မြေပေါ်ရှိရွှေတုံး ဒေါ်လာ ၃ ထရီလီယံဖိုးဘက်ကို ပြောင်း ရွှေ့ဖို့ မျက်စောင်းထိုးလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ မြေပေါ်ရှိ ရွှေတုံး ဒေါ်လာ ၃ ထရီလီယံဖိုးအနက် တစ်ဝက်က ဗဟိုဘဏ်တွေ လက်ထဲမှာရှိပြီး တစ်ဝက်က ပုဂ္ဂလိကလက်ထဲမှာ ရှိနေပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ရွှေအများစုက လူချမ်းသာ တွေ လက်ထဲရောက်နေပြီ ဖြစ်လို့ ဘယ်ဈေးရရ ရောင်းမည့် လက္ခဏာမရှိအောင် ဖြစ်နေပါတယ်။ ယခုအခါ ဗဟိုဘဏ်တွေက အရောင်းမရှိဝယ်သူတွေ (Net Buyers) ဖြစ်နေပါတယ်။ နိဂုံးခုျပ်အနေဖြင့်ဆိုပါက ရွှေနဲ့ ငွေသတ္တုဈေးက ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် မှာ တက်နေပြီး ၂ဝ၁၁ ကျော်ရင်ပိုတက်မည့် အခြေအနေရှိနေတယ် လို့ ဆိုရပါမယ်။ ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ်က ရွှေဈေးက အမြင့်ဆုံးအဖြစ် တစ်အောင်စကို ၁၄ဝ၅ ကျပ်ထိဖြစ်ခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၁ ခု အတွက် ရွှေဈေးက ငါးနှစ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေများကို ထည့် သွင်း တွက်ချက်မယ်ဆိုရင် ရွှေဈေးက တစ်အောင်စ ဒေါ်လာ ၁၇ဝဝ မှ ဒေါ်လာ ၂ဝဝဝ ထိရှိမယ်လို့ လေ့လာ ဆန်းစစ်သူတို့က ခန့်မှန်း ထားကြကြောင်းပါခင်ဗျား။Source:businessinsider.com
အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ တည်ထောင်ခြင်း (Establishing SEZs)
Thursday, 17 Feb 2011
အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ တည်ထောင်ခြင်း (Establishing SEZs) နိုင်ငံများသည် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် လမ်းကြောင်းများရှာဖွေရာတွင် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပို့ကုန်တိုးတက်စေရန် အထူးသဖြင့် စက်မှုကဏ္ဍတိုးတက်မှုအတွက် နည်းလမ်းများရှာဖွေ ရာတွင် အထူးစီးပွားရေးဇုန်များတည်ထောင်၍ ထုတ်လုပ်ရန် ကြိုးပမ်းလာခဲ့ကြသည်။SEZs ဆိုသည်မှာ ပထဝီဒေသတစ်ခုအတွင်း (သတ်မှတ်ထားသော ဦးစားပေးနယ်မြေ) ၌ နိုင်ငံတွင်းတွင် ပြဋ္ဌာန်း ကျင့်သုံးနေသော စီးပွားရေးဥပဒေများထက် လျော့ပေါ့ကာ အထူး အလေးပေးထားသောဥပဒေများဖြင့် စက်မှုစက်ဝန်းတစ်ခု ထူထောင် ထားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဤသို့ထူထောင်ရခြင်းမှာ နိုင်ငံခြားရင်းနှီး မြူပ်နံှမှုများလည်း တိုးတက်လာခြင်းမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုး မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ အထူးစီးပွားရေးဇုန်များကို နိုင်ငံတကာတွငForeign Trade Zone (FTZ), Special Economic Zone (SEZ), Export Processing Zone (EPZ) စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး ခေါ်ဝေါ်ကြသော် လည်း အဓိကအချက်မှာ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ မက်ခရိုစီးပွားရေး မူဝါဒလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှု မူဝါဒဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများတို့ကို ပြင်ဆင်ရန်မလိုဘဲ တည်ဆဲစည်းမျဉ်း ဥပဒေများနှင့် သီးခြားကင်းလွတ်သည့်ပို့ကုန်မြှင့်တင်ရေး ဆောင်ရွက် သော နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှုဇုန်များကို ဆိုလိုပေသည်။ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအသီးသီးအနေဖြင့် ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ် ပီပြင်စွာဖြစ် ပေါ်လာရေးကို တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် အကောင်အထည်မဖော်နိုင်သေးမီ ကြားကာလတွင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှုများကို ဆွဲဆောင်ရန် နိုင်ငံ တကာမှ လက်ခံထားသည့် ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်၏ စံအားလုံး ပါဝင်သော နယ်မြေဒေသတစ်ခုတွင် သီးခြားထူထောင်ပေးခြင်းဖြစ် သည်။နိုင်ငံတကာမှ SEZs အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ(International Definitions) ကုလသမဂ္ဂ စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့(United Nations Industrial Development Organization-UNIDO) ၏အဆိုအရ SEZ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတစ်ခုအတွင်း ပထဝီဝင် အနေအထားအရ သီးခြားခွဲထုတ်ထားသည့် အတန်အသင့် ဧရိယာကျယ်ဝန်းသော နယ်မြေဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြားပို့ကုန်လုပ်ငန်းကို ဦးစားပေးသော စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆွဲဆောင်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ထိုသို့ဆွဲဆောင်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ ကျန်ဒေသများနှင့်မတူသော ရင်းနှီးမြှုပ် နံှမှု အထူးအခွင့်အရေးများနှင့် ကုန်သွယ်ရေးအခြေအနေတို့ကို ကမ်းလှမ်းကြသည်။ အထူးသဖြင့် EPZ ဇုန်တွင်း နိုင်ငံခြားသို့ တစ်ဆင့် တင်ပို့ရန် ပြုပြင်ထုတ်လုပ်မည့် တစ်ပိုင်းကုန်ကြမ်း (Semi finished goods) တင်သွင်းမှုများကို အကောက်ခွန်လွတ် အခြေခံအနေ အထားဖြင့် ဆွဲဆောင်ကြသည်။ ကုလသမဂ္ဂ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကွန်ဖရင့် (United Nations Conference on Trade and Development- UNCTAD) ၏ အဆိုအရ SEZ များသည် နိုင်ငံတစ်ခု၏ အကောက် ခွန်နယ်မြေအတွင်း၌ရှိသော သီးခြားနယ်မြေအတွင်းမှ စက်မှုရပ်ဝန်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် နိုင်ငံတကာလေဆိပ်အနီး (သို့မဟုတ်) ဆိပ် ကမ်းအနီးအနားတွင် တည်ရှိတတ်ပါသည်။ ၎င်းဇုန်မျိုးမှ ထွက်ကုန် အားလုံးနီးပါးကို နိုင်ငံခြားသို့တင်ပို့သည်။ နိုင်ငံခြားပို့ကုန် ထုတ်လုပ် ရေးအတွက် လိုအပ်သောကုန်ကြမ်း၊ တစ်ပိုင်းကုန်ကြမ်း၊ လိုအပ် သောစက်ပစ္စည်းကိရိယာများ တင်သွင်းမှုသည် အကောက်ခွန်ကင်း လွတ်ခွင့်ရရှိ ကြသည်။ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ နိုင်ငံစုံ ကော်ပိုရေးရှင်းများဗဟိုအဖွဲ့ (United Nations Centre on Transnational Corporation- UNCTC) ၏အဆိုအရ SEZ ဇုန်များသည် စက်မှုစီးပွားရေးရပ်ဝန်း များအဖြစ် ရှင်းလင်းစွာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်ပြီး၊ နိုင်ငံတစ်ခု၏ အကောက်ခွန်နှင့် ကုန်သွယ်ရေးအာဏာစက်ကင်းလွတ်ရာနယ်မြေ အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။ အချို့သောဘဏ္ဍာရေးနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ မက်လုံးများကြောင့် နိုင်ငံခြားကုန်ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပို့ကုန်အကျိုး အမြတ်အတွက် လာရောက်လုပ်ကိုင်ကြသောနေရာပင်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်(World Bank)၏ အဆိုအရ SEZ ဆိုသည်မှာ ၁ဝ ဟက်တာမှ ၃ဝဝ ဟက်တာအထိ ခြံစည်းရိုးခတ်ထားသော စက်မှုရပ်ဝန်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြားပို့ကုန်များ ထုတ်လုပ်ရေးကို အထူးပြုသည်။ ၎င်းဇုန်ဒေသမှ ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတို့အား လွတ်လပ် သော ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများနှင့် လွတ်လပ်သော စည်းမျဉ်း ဆိုင်ရာ အခြေအနေများကို ဖန်တီးပေးထားသည်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံခြားပို့ကုန် ထုတ်လုပ်ရေးဇုန်အသင်း (World Export Processing Zone Association-WEPZA) ၏ အဆိုအရ ှနဇ များသည် လွတ်လပ်သော ဆိပ်ကမ်းမြို့တော်၊ လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်ရေးဇုန်၊ အကောက်ခွန် လွတ်ငြိမ်းဇုန်၊ လွတ်လပ်သော စက်မှုဇုန် (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေး (သို့မဟုတ်) အခြား သော ပုံစံအမျိုးမျိုးဇုန်များကဲ့သို့ပင် အစိုးရ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ ပေးထားသည့်ဧရိယာများသာဖြစ်သည်။ ဇုန်ကောင်စီက အချိန်နှင့် အမျှ ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်နေရသောဒေသဖြစ်သည်။ အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ ထူထောင်ရခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်(The Aims of Establishing EPZs) အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ(Special Economic Zones-SEZs) နှင့် လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုဇုန်f(Free Trade Zones-FTZs) နှင့် ပို့ကုန်ဆင့်တက် ထုတ်လုပ်မှုဇုန် (Export Processing Zones- EPZs) ဟူ၍ အမျိုးမျိုးကွဲပြားနေသော်လည်း မည်သို့ဆိုစေ အဆိုပါ ဇုန်များသည် နိုင်ငံခြား (သို့မဟုတ်) ပြည်တွင်းကုန်စည်များသည် တရားဝင် အကောက်ခွန်လမ်းကြောင်း (Formal Customs entry) ဖြတ်စရာမလိုဘဲ (သို့မဟုတ်) အစိုးရသို့ အခွန်ဆောင်ရန် မလို အပ်ဘဲ ကုန်စည်များ ရောင်းချနိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ပို့ကုန်ဆင့်တက် ထုတ်လုပ်မှုဇုန် (EPZs) သည် ပို့ကုန်အတွက် ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်း(Manufacturing for export) အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဇုန(FTZs) သည် သွင်းကုန်ကို ကိုင်တွယ်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ နောက်ဆုံးသုံးကုန်စည် (Final Product) ကိုတင်ပို့ပါ က အကောက်ခွန်ပေးရန်မလိုပါ။ထိုနောက်ဆုံးသုံးကုန်စည်ကို လက်ခံ နိုင်ငံ (Host Country) သို့တင်သွင်းပါက ၎င်းသည် အထူးအခွင့် အရေး (Preferential treatment) ကိုရရှိသည်။ ထို့ကြောင့် FTZs ရော EPZs ကိုပါ နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ခြင်း လက်ခံမှုဇုန် (Foreign Access Zones-FAZs) ဟုခေါ်ပြီး ၎င်းသည် ပို့ကုန် (Export) တိုးတက်ရန်ထက် သွင်းကုန် (Inport) ကို တိုးတက်စေသည်။ နိုင်ငံဒေသအသီးသီးတို့သည် နိုင်ငံခြားသား စီးပွားရေးလုပ် ငန်းကုမ္ပဏီများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှုများ ရရှိစေရန်၊ အကောက်ခွန်နှုန်း လျှော့ချခြင်း၊ အကောက်ခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်း၊ ဘဏ္ဍာရေး ကဏ္ဍတို့အပါအဝင် ဆွဲဆောင်မှုများစွာ ဖြင့် ဆွဲဆောင်လေ့ရှိသည်။ EPZ များထူထောင်ရခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်သည် ရင်းနှီး မြှုပ်နံှမှုကို ဆွဲဆောင်ရန်ဖြစ်ပြီး၊ ထိုသို့မလုပ်ပါက လက်တွေ့တွင် အောင်မြင်လာနိုင်စရာ မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံများသည် ထိုကဲ့သို့သောရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှုကို ပြုလုပ်ရသောအကြောင်းမှာ အောက် ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-- အလုပ်အကိုင်များဖန်တီး၍ လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြှင့်တင်ရန်။- ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် နည်းပညာသစ်များကို ဒေသခံပုဂ္ဂိုလ်များထံသို့ ပြောင်းလဲ ပေးရန်။- နိုင်ငံခြားပို့ကုန်များမြှင့်တင်ရေး။ (အထူးသဖြင့် သမားရိုးကျပို့ကုန်များအပြင် ပို့ကုန်အမိုျးအစားများ ခဲျ့ထွင် တင်ပို့ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိရန်) - စီးပွားဆက်ဆံရေးကွင်းဆက်များကို ဖန်တီး၍ ဇုန်အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နံှသူများထံသို့ ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများပေး နေသော ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်များအား အဆင့်အတန်း မြင့်တက်စေရန်နှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်လာစေရန်။- နည်းပညာသစ်တစ်ခုစီကို မိတ်ဆက် ပေးရန်။- ဖွံ့ဖြိုးမှုနိမ့်ကျနေသော ဒေသများအား ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးစေရန်။- မဟာဗျူဟာအရ အရေးပါသည်ဟု ယူဆသော စီးပွားရေး ကဏ္ဍများအား နိုးကြားလာစေရန် (ဥပမာ-အီလက်ထရွန်း နစ်၊ သတင်းနှင့်နည်းပညာ၊ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ အခြေခံလမ်းပန်းနှင့် သတင်း ဆက်သွယ်ရေး စနစ်၊ လူ့အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး) တို့ဖြစ်ပါသည်။SEs များ၏ အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍ(The Role of Administration in SEZs) SEZs များ၏ အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွင် အစိုးရဌာနအသီးသီး သည် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပါဝင်လျက်ရှိသည်။ ဆောင်ရွက်မှုအားလုံးတွင် အကောက်ခွန်အာဏာပိုင် အဖွဲ့ဝင်များ သည် တာဝန်ယူမှုတစ်ရပ်အနေဖြင့် တိုက်ရိုက်ပါဝင် ပတ်သက်နေ သည်။ သို့ရာတွင် စီးပွားရေးဇုန်အာဏာပိုင်အဖွဲ့ကို ကျော်လွန်၍ နိုင်ငံပေါင်းများစွာတွင် သီးခြားအဖွဲ့အစည်းဆန်ဆန် ဖွဲ့ထားသည့် အခြားသောဌာနများလည်းရှိသည်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုရေး နှင့်အလုပ်သမားရေးရာ၊ အမျိုးသမီးရေးရာ စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဇုန်အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နံှ သူများအား တစ်ကြိမ်လာရောက်စမ်းသပ် ရင်းနှီးမြှုပ်နံှရန် ဆွဲဆောင် ခွင့်ပြုလျက်ရှိကြသည်။ ရိုးရှင်းသောလုပ်နည်းမှာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေ ဖြင့် လိုအပ်သော အတည်ပြုချက်များဖြင့် ဆက်လက်ပြုလုပ်ရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဆက်တိုက်ပြုလုပ်သွားနိုင်ရန် စီစဉ်ပေး ထားခြင်းဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးဇုန်များ၌ လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နံှသူများသည် များ သောအားဖြင့် ကုန်ထုတ်သူများ၏ အဖွဲ့အစည်းများကို မိမိတို့ ထုတ်လုပ်သော ကုန်ပစ္စည်းများကဏ္ဍအလိုက် ဖွဲ့စည်းကြသည်။ (ဥပမာ-အထည်အလိပ် လုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့၊ အီလက်ထရောနစ် လုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ စသည်တို့ဖြစ်ကြသည်။) တစ်ခါတစ်ရံ မိမိတို့ ဒေသခံနိုင်ငံများအပေါ်မူတည်၍ဖွဲ့စည်းကြသည်များလည်းရှိပါသည်။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ သည် အလုပ်သမား ခန့်ထားရေးကဲ့သို့သော ကိစ္စမျိုးတွင် ကူညီပေးသည့် ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့များလည်း ဖွဲ့ကြပါသည်။ အသွင်အပြင်အားဖြင့် ပြည်ပပို့ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးဇုန်များသည် အခြားသော စက်မှုဇုန်၊ စက်မှုရပ်ဝန်းများနှင့် အတူတူပင် ဖြစ်ပါသည်။ စက်ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးပစ္စည်း များသည် ပြည်တွင်းစီးပွားရေး ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများထက် သာလွန်ကောင်းမွန်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းဆက်သွယ်ရေး အခြေခံလိုအပ်ချက်များသည် ဇုန်ပြင်ပအခြေအနေများထက် ပိုမိုခေတ်မီပြီး၊ အခြေခံအားဖြင့် ပြည့်စုံသည်ကို တွေ့ရသည်။ ပုဂ္ဂလိကပိုင် စီးပွားရေးဇုန်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အားပေးသော နိုင်ငံ များတွင် စီးပွားရေးဇုန်များအတွင်းနှင့် ပြင်ပစက်ရုံအနေ အထားကွာခြားချက်မှာ ပို၍ကြီးမားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ သို့ပါ၍ ဇုန်၏အခွင့်အရေးများကို ဇုန်အတွင်းသာ အသုံးပြု နိုင်စေရန်၊ အလွဲသုံးစား မဖြစ်စေရန် ဇုန်အုပ်ချုပ်ရေးမှာ အရေးပါသောကဏ္ဍတွင် ပါဝင်နေပေသည်။Think Global, Act Local ပုံစံဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာများ တိုးတက်ပြောင်းလဲမြန်ဆန်လွန်းသော ယနေ့ခေတ်တွင် Globalization နှင့်အညီ လိုက်ပါဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ နိုင်ငံ များသည် အခြားနိုင်ငံများ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွေ့အကြုံကို လေ့လာပြီး မိမိတို့နိုင်ငံ နောက်ကျမကျန်ရစ်စေရန် နိုင်ငံတကာနှင့် စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများပြုလုပ်၍ နိုင်ငံခြား တိုက်ရိုက်ရင်း နှီးမှုများဖိတ်ခေါ်ပြီး နိုင်ငံတကာအရင်းအနှီးများ စီးဆင်း အောင် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိကြပါသည်။ စီးပွားရေးကဏ္ဍ လွတ် လပ်မှုကြောင့် နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှုများ လွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ကြပြီး နိုင်ငံစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လျင်မြန်ကာ လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာသည့် တရုတ်၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့သည်လည်း သက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ လွတ်လပ်မှုများရရှိနိုင်ရေးအတွက် စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ၊ စည်းမျဉ်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ကန့်သတ်ချက်များ လျော့ကျဖယ်ရှားရေး စသည်ဖြင့် ဖြေလျော့မှု(Liberalization) ပြုရန် လိုအပ်လာပါသည်။ နိုင်ငံ တိုင်းသည် မိမိနိုင်ငံစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအား(Liberalization) နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရာတွင် Think Global, Act Local ပုံစံဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှုများကို ဆွဲဆောင်ရာတွင် မည်သည့်ပြည်တွင်း ပြည်ပလုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းမဆို ၎င်းတို့ အကျိုးအမြတ်မရှိဘဲ လုံလောက်သော ဆွဲဆောင်မှု၊ မက်လုံးမပါဘဲ စီးပွားရေးလာရောက်လုပ်ကိုင် ကြမည်မဟုတ်ပါ။ မိမိတို့၏ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုလည်း မထိခိုက်စေရန် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးစီးပွားမျှတစွာ ဆောင်ရွက်မှသာလျှင် Win Win Theory အရ လာရောက်လုပ် ကိုင်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အခြေအနေကို လေ့လာကြည့်လျှင် ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံများသည် နိုင်ငံခြား တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှု(FDI)အတွက် ဆွဲဆောင်မှု မက်လုံး များကို အပြိုင်အဆိုင်ပေးခြင်းဖြင့် ဆွဲဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ အခြေခံအဆောက်အအုံများ ကောင်းမွန်ရန် နိုင်ငံတကာ၏ အောင်မြင်လျက်ရှိသော စီးပွားရေးဇုန် များကို လေ့လာရာတွင် ၎င်းနေရာများသည် ပြည်ပပို့ကုန်လုပ်ငန်းနှင့် ပြည်တွင်းသွင်းကုန် လုပ်ငန်းနှစ်ခုလုံးအတွက် လွယ် ကူစွာ ဆက်သွယ်နိုင်သည့် လမ်းကြောင်းများရှိရန် လိုအပ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ များသောအားဖြင့် အထူးစီးပွားရေး ဇုန်များသည် မဟာဗျူဟာမြောက် တည်နေရာ၊ အနေအထား ကောင်းမွန်ရန်လိုအပ်ပြီး ပထဝီအနေအထားအရ ၎င်းနေရာ များတွင် လေယာဉ်ကွင်းများ၊ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းများနှင့် အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများ စသည့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ (Infrastructures) ကောင်းမွန်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းအခြေခံသည့် အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ တည်ဆောက်မည်ဆိုပါက ၎င်းနေရာသို့ အုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှု အပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ဝင်လမ်း ထွက်လမ်း ကောင်းမွန်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းအပြင် ဆောက်လုပ်မည့်လုပ်ငန်းအမျိုးအစားကိုလိုက်၍ လျှပ်စစ်နှင့် ရေပေးရေးစနစ်၊ ရေဆိုးရေညစ်များထုတ်ခြင်း ကိစ္စရပ်၌ သန့် စင်ရေးစနစ်များကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လေထုညစ်ညမ်းမှုနှင့် ဆူညံ သံများ စသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက် အပြည့်အစုံအား စဉ်းစားဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နံှသူတို့ဘက်မှ အကဲဖြတ်ချက် ရင်းနှီးမြှုပ်နံှသူတို့ဘက်မှ အကဲဖြတ်သည့် အခြေအနေများမှာ ဇုန်တစ်ခု၏ ဖြစ်နိုင်ခြေအလားအလာနှင့် ယှဉ်ပြိုင် နိုင်သော အားသာချက်များကို ဂရုတစိုက် သုံးသပ်ကြခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် မဟာဗျူဟာမြောက် တည်နေရာ တွင်ရှိခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်လုပ်သား ရရှိနိုင်ခြင်း၊ သဘာဝသယံ ဇာတ အရင်းအမြစ် ပေါြွကယ်ဝခြင်း၊ အကုန်အကျသက်သာ သည့် စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ရှိခြင်းနှင့် ထိုကဲ့သို့သော အထူး စီးပွားရေးဇုန်များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နံှရန်လိုအပ်သည့် ရေရှည် လုပ်ငန်း ရှိ/မရှိ၊ ဆွဲဆောင်မှု မက်လုံးများ၏ အနေအထား၊ ဈေးကွက်ရှာဖွေခြင်း စသည့် အချက်အလက်များအပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးတွင် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ယှဉ်ပြိုင်မှု သည် ''လျင်မြန်မှု''၊ ''အရည်အသွေး''နှင့် ''ဈေးနှုန်း''အပေါ်တွင် မူတည်ပြီး အဆိုပါလုပ်ဆောင်ချက်များ ချောမွေ့စေရန်နှင့် ဇုန်များအောင်မြင်မှု၏ အဓိကသော့ချက်မှာ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရများမှ လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် အလုပ်သမားဆက်ဆံရေး မဟာဗျူဟာကိစ္စရပ်များ ပိုမို အဆင့်မြင့်လာစေရန်တို့ပင်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံများစွာတို့သည် လုပ်ခလစာ ပေါပေါရရှိခြင်းကို ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှု၏ အဓိက မက်လုံးဆွဲဆောင်မှုအဖြစ် ယခုအချိန်အထိ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ဆဲပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သတိမမူမိသော အချက်မှာ ထိုသို့ဆွဲဆောင်ခြင်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှု အရည်အသွေးအနိမ့်စားကိုသာ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့သည် ကမ္ဘာ့ပြိုင်ဆိုင်မှု (World competitiveness) ၌ အောင်မြင်မှုအနည်းငယ်နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်အောင်မြင်မှုရရှိရန် အခွင့် အရေးနည်းပါးမည်သာဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတွင် ထိထိရောက်ရောက် အောင်မြင်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်သော ကုမ္ပဏီတို့ကမူ ကောင်းမွန် သောအလုပ်သမားများကိုသာ ရှာဖွေလျက်ရှိကြပြီး ပြောင်းလဲတိုးတက်နေသော နည်းပညာကို အမှီလိုက်နိုင်မည့်သူ၊ ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းမှုများကိုလည်း အလျဉ်းသင့်သလို ပြောင်းလဲနိုင်မည့်သူကို ရှာဖွေခန့်ထားလျက်ရှိကြသည်။ ထို ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ကျွမ်းကျင်ပြီး အတွေ့အကြုံရှိ သော အလုပ်သမားထုကို ထိန်းထားလိုကြသည်။ အလုပ်ပျက် ကွက်မှု၊ ငြီးငွေ့မှု၊ အခြားသော ပဋိပက္ခများကို ရှောင်ရှားလိုကြသည်။ ဇုန်နယ်မြေများသည် အဆင်အတန်းမြင့် လူသား အရင်းအမြစ်များကို အလိုရှိကြပြီး အထူးသင်တန်းများပေးခြင်း၊ အလုပ်သမားဆက်ဆံရေးအနေအထားများမြှင့်တင် ခြင်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နံှသူများအနေဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဆင့်အတန်းသို့ ရောက်ရှိသွားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံ တကာ စီးပွားရေးပြိုင်ဆိုင်မှုသည် ပိုမိုပြင်းထန်လာပြီး ဇုန်နယ်မြေအတွင်းရှိ လုပ်ငန်းများအား ထုတ်လုပ်မှုလျင်မြန်ရန်နှင့် တိုးတက်မြင့်မားရန် တွန်းအားပေးလျက်ရှိရာ သင့်တင့် လျောက်ပတ်သော ကျွမ်းကျင်လုပ်သား၊ ပညာပိုသုံးရသော အလုပ်သမားများရရှိရေးမှာ ပိုမိုအရေးပါလာပါသည်။SEZနှင့် နိုင်ငံ၏ လူမှု-စီးပွားရေး ထို့ကြောင့် ှSEZ များသည် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပစီးပွားရေး အဆောက်အအုံများကို ပိုမိုချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းမှုများဖြစ် ပေါ်စေပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှုများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များနှင့် ထုတ်လုပ်မှုများ တိုးတက်ခြင်းမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံ၏ လူမှု-စီးပွားရေးတိုးတက်မှုတို့ကို များစွာအထောက်အကူပြု စေမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ . . . .
ကုန်ပစ္စည်းအတုပြဿနာကြောင့် ပြည်သူနစ်နာဆုံးရှုံးမှု မဖြစ်ပေါ်ရေး ဝိုင်းဝန်းကူညီ ဆောင်ရွက်ပေး
မြန်မာနိုင်ငံကတည်ထောင်ထားရှိသော National Trade Portal and Trade Repository Website ၏မူရင်းကုတ် (Source Code) အား မိုဇမ်ဘစ်နိုင်ငံမှ ကူးယူသုံးစွဲခွင့်ပြုရေးဆိုင်ရာ မြန်မာ-မိုဇမ်ဘစ် နှစ်နိုင်ငံအကြား နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MoU) လက်မှတ်ရေးထိုး
မြန်မာ့ထွက်ကုန်များ ပြည်ပဈေးကွက်သို့ ပိုမိုတင်ပို့နိုင်ရေး ကဏ္ဍစုံမှ ကြိုးပမ်းရမည်
မြန်မာ့လက်မှု အနုပညာပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်တင်ပို့ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအား လေ့လာကြည့်ခြင်း
စားသုံးသူများအတွက် အခွင့်အရေးကောင်းနှင့်စီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်ကောင်း ဖြစ်လာမည့် ယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်
ဆန်အရည်အသွေးနှင့် ပြည်ပတင်ပို့ရေး၏ အနာဂတ်
မြန်မာ့ဝဥ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု မြင့်မားခြင်းမှ ဈေးကွက်ခိုင်မာရေးဆီသို့ . . . .
မြန်မာ့ဆန် တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ရာတွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာရန်လိုအပ်